Hbja - Wun Yan
ကျွန်မနာမည်က … လှမြတ်သူဇာနွယ် … နာမည်ကလှတယ် မဟုတ်လားရှင် … နာမည်က မဟာဆန်သလို … လူကလည်း … မဟာဆန်ပါတယ်ရှင် … ကျွန်မလား … အခုလာမယ့် … ၂၀၁၁ မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲမှာ … မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု … ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ … အလှယမင်းဆို … သိပြီမှတ်လားဟင် … ရော် … ခက်တော့တာပဲ … ကျွန်မက လှလားဆိုတော့ … ဘယ်လိုပြောရမလဲ … ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတော့ … ကျွန်မကို … မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှရတနာ တပါးလို့ … ချီးမွမ်းကြပါတယ် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် … ကျွန်မ မျက်နှာက မဟာဆန်သူလို့ပြောရလောက်အောင် … နဖူးလေးက နည်းနည်းကျယ်ပါတယ် …
လပြည့်ဝန်းပမာ … မျက်နှာလေး ၀ိုင်းပြီးတော့ … မျက်ခုံးကောင်းပါတယ် … ဖေဖေရဲ့ အမွေဆိုပါတော့ရှင် … ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်ကျော်စပဲ ရှိပါသေးတယ် … အရပ်က ၅ ပေ ၇ လက်မ … အင်း … ဟုတ်တယ် … မြန်မာပြည်စံချိန်နဲ့ဆို … ကျွန်မ အရပ်က ရှည်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ် … ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကတော့ … ဟင့် … ရင် ၃၂၊ ခါး ၂၄၊ တင် ၃၆ … ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အတော်လေး ဖွံ့ဖြိုးတယ်လို့ ပြောရမှာပဲရှင် … ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင် … မနက်တိုင်း နွားနို့သောက်ရပါတယ် … ကာယဆရာမ ချမှတ်ထားတဲ့ … နည်းစနစ်အတိုင်း … လေ့ကျင့်ရပါတယ် … ဒီလိုမျိုး ဖွံ့ဖြိုးတာ ကြိုက်လားမေးရင် … သိပ်တော့ မကြိုက်ဘူးလို့ .. ဖြေပါရစေရှင် … ကျွန်မက … တီရှပ်တွေ ၀တ်ချင်ပါတယ် … ခက်တာက … ရွှေရင်မို့မို့က … ဖွံ့ဖြိုးလွန်းတော့လည်း … ကွယ်ဝှက်ရခက်ပါတယ် … အပြေးလေ့ကျင့်ရင် သိပ်သိသာပါတယ် … ဘရာစီယာကို … ခပ်ကြပ်ကြပ်ဝတ်ပေမယ့်လည်း … လှုပ်ရမ်းချင်နေပါတယ် … အရမ်းတင်းတင်း
၀တ်တော့လည်း … အသားတွေ ပွန်းကုန်တော့ … နာတယ်ရှင့် … အတွင်းသားတွေက
နုတယ်မဟုတ်လားရှင် … မနက်စောစော ကန်တော်ကြီးထဲမှာ … လေ့ကျင့်ခန့်လုပ်ရင် … တွေ့သမျှ ကိုကို
… ဦးဦးတွေက … ကျွန်မရဲ့ ရင်ကို … သေချာစိုက်ကြည့်ကြတော့ … ခပ်စူးစူး အကြည့်ခံရတော့ … ကျွန်မ … အနေရခက်ပါတယ်ရှင့် … ရင်ထဲမှာ ရှက်လည်းရှက်မိပါတယ် ရှင် … ကျွန်မတင်ကလေ ၃၆ ဆိုတော့ … ဂျင်းဘောင်းဘီဘာတွေ ၀တ်ရင် … သိပ်စိတ်ညစ်တာပဲရှင် … အဆင်ကြိုက်ရင်တောင် … ဆိုဒ်မရှိလို့ …
မ၀ယ်ရ … စင်္ကာပူကနေ ၀ယ်လာတဲ့ … ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကလည်း … ၀တ်ခါနီးရင် … ၀တ်ရတာ သိပ်ခက်တာပဲရှင် … ကားတက်နေတဲ့ တင်တွေက … ဘောင်းဘီဝတ်ရင် … တစ်နေတော့လေ … သိပ်စိတ်ညစ်တာပါရှင် … နောက်တစ်မျိုး စိတ်ညစ်ရတာက … လမ်းသွားရင် … တင်တွေက လှုပ်တာပါပဲရှင် … သာမန်မိန်းကလေးတွေတောင် … တင်လှုပ်သေးတာပဲ … ကျွန်မတို့လို … မယ်ဆိုဒ် ၃၆ တင်မျိုးက … ပိုလှုပ်တာပေါ့ရှင့် … ညာခြေလေး လှမ်းလိုက်ရင် … ထမီလေးအောက်က … ညာတင်လေးက သိမ့်ကနဲ … အောက်ကိုနိမ့်သွားပြီး … ဘယ်တင်လေးက … သိမ့်ကနဲ … အပေါ်ကို တက်သွားတယ် … ဟော … ညာခြေလေး မြေကြီးနဲ့ထိသွားရင် … ညာတင်လေးက … အောက်ကနေ သိမ့်ကနဲ … တက်လာပြန်ရော … ဘယ်တင်လေးကတော့ ပြောင်းပြန်ပေါ့ … ညာတက်ရင် ဘယ်ကျတယ် … ညာကျရင် … ဘယ်တက်တယ်
… ကျွန်မ လမ်းသွားလို့ … ဒီလိုမျိုး … တင်အလှုပ်လေးကိုမှ … အရသာခံပြီး … လိုက်ကြည့်နေတော့ …
နေရခက်တာပေါ့ရှင် … သတိထား လျှောက်တဲ့ကြားက … တင်တွေက သိမ့်ကနဲ … ငြိမ့်ကနဲ လှုပ်လှုပ်သွားလို့ … ကိုကို မောင်မောင်တွေ ခမျာ ရင်ထဲမှာ … ကျလိကျလိ ဖြစ်ရှာကြတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ … ကျွန်မလည်း … ထိန်းလျှောက်တာပါပဲရှင် … ကျွန်မက ယင်ဖိုတောင် မသန်းဖူးသေးတဲ့ …
အပျိုစစ်စစ်ဆိုတော့ … အအိုတွေလိုတော့ … သိပ်မယမ်းခါဘူးပေါ့ … ခက်တာက … ကျွန်မရဲ့ လမ်းလျှောက်ဟန်ပါပဲ … မြန်မြန်လျှောက်လျှောက် … နှေးနှေးလျှောက်လျှောက် … ခြေလှမ်းတွေက … မျဉ်းတစ်ကြောင်းထဲ လျှောက်တတ်အောင် … ကျင့်ထားမိတော့ … ဖျောက်ရခက်ပါတယ်ရှင် … ဒီလိုမျိုး …
မျဉ်းတစ်ကြောင်းထဲလျှောက်ရင် … ဘယ်လသိုတိထားထား … တင်တွေက … ခါတာပေါ့ … ကျွန်မသိတာပေါ့ရှင် … အပျိုလေးဖြစ်တဲ့အပြင် … နောက်ပိုင်းလှအောင် … လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ထားတော့ … ကျွန်မရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှက … ရင်ပူမယ်ဆိုလည်း … ပူစရာပါပဲရှင် … ခါးလေးက …
၂၄ ဆိုတော့ … ခါးနေရာလေးက သိမ်သွားပြီး … အောက်ပိုင်းကို ဖွံ့သွားတော့ … ကိုကိုတွေ သရေယိုတယ်ဆိုတာ … လက်ခံပါတယ် … တစ်ခါတစ်လေ … ညစ်တီးညစ်ပတ် ပြောတတ်တဲ့ ချာတိတ်တွေ
… ဘေးက ဖြတ်သွားမိရင် … ခါးကိုင်ပြီး … ဒီအိုးကြီးကို ကြိတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ် တဲ့ရှင် … ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရှင် … နားရှက်စရာ ဒီလိုစကားတွေ ကြားရင် … ကျွန်မရင်မှာ … တစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ် … ရှက်တာလား … ကြောက်မိတာလား … မခွဲတတ်ပေမယ့် …
သေချာတာတော့ … သူတို့ပြောသလို … မနေရဲတာတော့ အမှန်ပါပဲ … အံမယ်လေး … တွေးမိရင်တောင် … ကြက်သီးလေးတွေ ထလာပါတယ် …
သူများတွေ ပြောပြောနေတဲ့ အချစ်ကို … ကျွန်မလည်း ကြုံချင်တာပေါ့ရှင် … သွေးနဲ့ သားနဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့ မိန်းမပျိုဆိုတော့ … လိုချင်တာပေါ့ရှင် … ဒါပေမယ့် ကျွန်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ချစ်သူမျိုးက … ကျွန်မထက် အရပ်ရှည်ရမယ် … ဒါမှ … လမ်းသွားရင် … သူ့ပုခုံးကို ကျွန်မ မှီလို့ရမှာပေါ့ရှင့် …
ရုပ်မချောရဘူး … ဒါပေမယ့် ယောက်ျားပီသတဲ့ … ရုပ်အင်္ဂါမျိုးရှိရမယ် … ကျွန်မက သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီပြီး … လက်သီးဆုပ်လေးနဲ့လည်း … ထုပြီး … ပူဆာချင်တယ်ရှင့် … ဒီတော့ … ကိုယ်ကာယဗလ … တောင့်တောင့်တင်းတင်း လူမျိုးလည်း ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ် … အသက်အရွယ် အများဆုံး ငါးနှစ်လောက်ပဲ ကွာတာကောင်းပါတယ် … ဒါမှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် … အတွေးအခေါ်မျှမှာပေါ့ … ဟင်း …
ရီးစားက ဘယ်နားမှန်းမသိဘူး … ဂျီးများတာက ကျွန်မပါပဲရှင် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် …ကျွန်မရဲ့ ခံယူချက်တစ်ခု … ရုပ်လှတာတဲ့ … ကျန်းမာသန်စွမ်းတာကို … ပိုနှစ်သက်တယ် … ရုပ်လေးတော့ ချောပါရဲ့ … ပိန်ပိန်ညှောင်ညှောင် … ကျန်းမာရေးက တရှောင်ရှောင်ဆို … ဘယ်ကောင်းမလဲရှင် … ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါးတဲ့ … ကျွန်မဆို … မနက်တိုင်း … အပြေးလေ့ကျင့်ပါတယ် … မနက်စောစော
လေကောင်းလေသန့်ရှုရင်း … နာရီဝက်လောက် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင် … ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ
… စီရိုတိုနင်၊ ဒိုပါမိုင်း၊ ဖိနိုင်းအိသိုင်လာမိုင် စတဲ့ ဓါတု ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေးတယ်တဲ့ … အဲဒီပစ္စည်းတွေက
… ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတယ်တဲ့ …စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကနေ လျော့စေတယ်လေ … အပြေးလေ့ကျင့်တော့ … အမောခံနိုင်တာပေါ့ရှင် … မနက်စောစော ထပြေးရင် … နောက်က
ကောင်လေးတစ်ချို့ လိုက်လာတတ်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် သိလား … လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်ရင် … သူတို့ လျှာထွက်နေပြီ … အမောမခံနိုင်တော့ … ပြတ်ကျန်ခဲ့တာပေါ့ …
အပြေးလေ့ကျင့်ပြီးလို့ အိမ်ရောက်ရင် … ဒေါ်လေးမေ စီစဉ်ထားတဲ့ … မနက်စာကို သေသေချာချာ စားပါတယ် … ကြက်ဥကြော်၊ ပေါင်မုန့်၊ ခရမ်းချဉ်သီးရယ်၊ မုံလာပန်း အစိမ်းရယ် ကို သံလွင်ဆီနဲ့ ရောကျော်ထားတဲ့ … အသီးအရွက်တစ်ပန်းကန်၊ နို့တစ်ခွက် ပုံမှန်စားရပါတယ် … ဒါမှ အသားအရေ လှမှာပေါ့ … မုန့်စားပြီးလို့ ချွေးတိတ်သွားရင် … ကျွန်မရဲ့ ရွှေရင်ဖြိုးဖြိုးလေးအတွက် … လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရပါတယ် … အခင်းပေါ်မှာ အိပ်၊ ပခုံးဘေးကို လက်တွေဆန့်တန်းထားပြီး လက်ထဲမှာ ၀ိတ်တုံးကိုင်၊ အပေါ်ကို မြှောက်၊ တံတောင်ဆစ်ကို ကွေးပြီး ပြန်ချ၊ ပြန်ဆန့်ထုတ် … ဒီလိုမျိုး ၁၅ ကြိမ်လောက် နှစ်ခါ …
လုပ်ရပါတယ် … ဒါပြီးရင် … ကျွန်မ ရေချိုးတော့မယ် … ချွေးတွေကြောင့် ကပ်စေးစေးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား …
ရေချိုးခန်းထဲ … ၀င်ခါနီး … ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့မှာ … အင်္ကျီတွေ၊ ဘောင်းဘီတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး …
ရွှေရင်ကို ပေကြိုးလေးနဲ့ တိုင်းကြည့်ပါတယ် … အမြဲ မဟုတ်ပေမယ့် … တစ်လတစ်ခါလေလာက်တော့ … တိုင်းကြည့်လေ့ရှိပါတယ် … ဒီနေ့တော့ … ဒင်းလေးကို တိုင်းရအုံးမယ် … ဂျိုင်းအောက်ကနေ … ပေကြိုးလေးကို လျှိုပြီး … ရွှေရင်ကို တင်းတင်းတိုင်းလိုက်တော့ ၃၂ လက်မ … အိုကေ … ကျွန်မက အပျိုဆိုတော့ … ကျွန်မရဲ့ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးက … နို့အလည်ဝိုင်း Areola ဟာ
နှင်းဆီသွေးရောင်ရှိပါတယ် … နို့သီးဖျားလေး Nipple ကတော့ … ပန်းရောင်လေးပါ … တကယ်လို့ ကျွန်မမှာ ကလေးရှိလို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရရင် … နှင်းဆီသွေးရောင်လေးဟာ … ညိုမဲမဲလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ … ဒေါ်လေးမေ ပြောပြဖူးတာပါ … ဟုတ်မဟုတ်တော့ … စစ်တမ်းမကောက်ဖူးပါဘူး … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပေါ်နှုတ်ခမ်းအရောင်နဲ့ …
နို့သီးဖျားအရောင်ဟာ တူလေ့ရှိတယ်တဲ့ … ဟိ ဟိ … ထားပါတော့လေ … အပျိုလေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မမှာ …
ရှိတဲ့ … နို့သီးထိပ်လေးကတော့ … အမြဲလိုလို မာနေတာပါပဲ … တစ်ခါတစ်လေများ … ကိုကိုမောင်မောင်တွေက … ကျွန်မရဲ့ ရွှေရင်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေရင် … ဘရာစီယာအောက်က … နုိ့သီးဖျားလေးက … ပိုပြီး ထောင်လာပါတယ် … အို … အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ … သေချာတော့ မသိသေးပါဘူး … ကျွန်မရဲ့ ရွှေရင်ကို … အားရအောင် … ကလေးနို့စို့သလိုစို့ပြီး … ဆွဲဆုပ်ချေပစ်ချင်တဲ့ … အကြည့်မျိုးဆို … ကျွန်မရင်တွေ တုန်ရပါတယ် … ခံစားချက်က တစ်မျိုးပဲရှင့် … ရှက်တာထက် … ကျေနပ်တာမျိုးဆို ပိုမှန်လိမ့်မယ် …
ရွှေရင်နှစ်မွှာရဲ့အောက်က … ဗိုက်သားလေးက ချပ်ချပ်ရပ်ရင် … တိုင်းကြည့်လိုက်တော့ ၂၄ လက်မ … ဒီအတိုင်းပါပဲ … အောက်မှာတော့လေ … ဆင်နှာမောင်းသဏ္ဍာန် … ပေါင်တံလေးနှစ်ချောင်း … ကျွန်မပေါင်တံလေးက … သိပ်လှတာရှင့် … တုတ်တတ်ုခဲခဲကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး … ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ … ကျစ်ကျစ်လေးပေါ့ …အေရိုးဗစ်ကစားထားတဲ့ အကျိုးက … အဆီပိုမရှိဘူးပေါ့ရှင် … ပေါင်တံလေး နှစ်ခုကြားမှာ … ကျွန်မရဲ့ … ကျွန်မရဲ့ … ဟင့် … ရတနာရွှေကြုပ်လေးပေါ့ … သူလေးပေါ်က … အမွှေးလေးက … ပါးပါးလေး … နည်းနည်းလေးပါရှင် … ကျွန်မက အမွှေးအမျှင်နည်းတယ်ရှင့် … ဆံပင်သာသန်တာ … အောက်က အမွှေးလေးက … ပါးပါးလေး … နုတော့ နုတယ်ရှင့် …
အမွှေးပါးပါးလေးက … ရတနာရွှေကြုပ်ကို … လုံခြုံအောင် မဖုံးထားနိုင်ဘူးပေါ့ရှင် … အမွှေးလေးအောက်မှာ … ဖောင်းကားပြီး ကြွတက်နေတဲ့ … ရတနာရွှေကြုပ်က … ရေကူးအင်္ကျီဝတ်ရင် … ပေါင်ကြားမှာ … မို့မောက်လွန်းပါတယ်ရှင် … ပေါင်လေးနည်းနည်းကားလို့ … အပေါ်နှုတ်ခမ်းသား လုံးလုံးလေး နှစ်ခုကို … နဲနဲဖြဲကြည့်ရင် … အတွင်းပိုင်းက … ပန်းရောင်အသားနုလေးတွေကို မြင်ရတယ်ရှင့် … ဟင့် … အဲဒီနေရာလေးတွေကလေ … လက်ကလေးနဲ့ … ထိလိုက်ရင် … ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးပါပဲရှင့် … တစ်ခါတစ်လေများ … ဟင့်ကနဲ ပါးစပ်က မြည်သွားပြီး … တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်သွားတတ်ပါတယ် …
ကျွန်မရဲ့ ရတနာဖူးလေးက … ပြောင်းဖူးစေ့လောက်ပဲ ရှိပါတယ် … ပန်းဖူးရောင်လေးနဲ့ … ချစ်ဖို့ တအားကောင်းတာရှင့် … ဟိုနေ့က … ကျွန်မစိတ်ထဲ … ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း … ပွတ်ကြည့်ချင်လာတာနဲ့ … ရတနာဖူးလေးကို … ပွတ်လိုက်မိတာ … အိုရှင် … လူတစ်ကိုယ်လုံး … ဘာဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူး … လေထဲကို မြောက်သွားသလိုလို … လေဟုန်ကိုပဲ စီးနေသလိုလို … ခံစားချက်က … အရမ်းကောင်းတယ်ရှင့် … စိတ်ထဲကလည်း … ထပ်ထပ်ပြီး … ပွတ်ချင်နေတာပါပဲ … စိတ်ကို အတင်းထိန်းပြီး … လက်ကို ခွာလိုက်တော့ … ရင်ထဲမှာ … လှပ်လှပ် လှပ်လှပ်နဲ့ … တုန်နေတယ်ရှင့် … ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကို … စာအုပ်တွေဖတ်ရင်း … မနေ့ကတော့ သိလာခဲ့ပါတယ် … မိန်းကလေးရဲ့ ရတနာဖူးလေးကို … ပွတ်ပေးရင် … ခံစားချက်က အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့ … လူကို ထွန့်ထွန့်လူးအောင် … ဖြစ်ပြီးရင် …
ကာမဆန္ဒရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ကို … ရောက်သွားပါတယ်တဲ့ … ရင်တွေတုန်လိုက်တာရှင် … စမ်းကြည့်ချင်လိုက်တာ … ရင်ထဲမှာ … ရေငတ်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ … တစ်ယောက်ယောက်က … ရတနာဖူးလေးကို ပွတ်လိုက်ဖို့ … အတင်းအမိန့်ပေးနေသလိုပါပဲ … လုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်လေ …
“ဟာာာာာာာာာ … ဟင့် …”
အို … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ရတနာဖူးလေးကို လက်ဖျားလေးနဲ့ … ထိတယဆ်ိုရုံလေးထိရသေးတယ် …
နှုတ်ခမ်းဖျားက … ဘာလို့ ငြီးရတာလဲဟင် … ပန်းဖူးလေးကို ပွတ်မိတာနဲ့ … တစ်ကိုယ်လုံး …ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာပဲ … အို … ခက်တော့တာပဲ … ဒီအတိုင်းမတ်တပ်ရပ်ပြီး … လုပ်ရင် …
မကောင်းပါဘူး … မွေ့ယာပေါ်မှာ … လှဲချလိုက်ပြီး … ကျွန်မ ပေါင်လေး နှစ်ဖက်ကို ကားပစ်လိုက်တယ် …
နည်းနည်းလေး … စိုးရိမ်စိတ်ရှိတာမို့ … ဘယ်လက်ကလေးက … မွေ့ယာကို ကိုင်ထားရင်း … ညာလက်ကလေးက … ရတနာရွှေကြုပ်ကို ကျော်ပြီး … ရတနာဖူးလေးကို … ထပ်ပွတ်ပစ်လိုက်သည် …
“အို … ဟင့် …”
ရတနာဖူးလေးက … မာတောင်ပြီး … ထောင်မတ်နေတာပဲ … မခံချင်ရှာဘူးပေါ့ … လက်ကလည်း …
စမိရင် … မလွှတ်ချင် … စိတ်ထဲမှာ တရွရွလည်း ဖြစ်တယ်ရှင့် … သုံးလေးခါလောက်ပွတ်လိုက်တော့ … ခါးလေးက ခွက်သွားပြီး … ရင်လေးက … မောက်လာသည် … အို ရှင် … ကောင်းလိုက်တာ …
ကောင်းလိုက်တာ … ခါးလေးက ခွက်သွားတော့ … ရတနာရွှေကြုပ်လေးက … အောက်ကို ငုံ့ချင်နေသည် … ပန်းဖူးလေးက လက်မခံ … တင်ပါးတွေကို ခပ်တင်းတင်း … ကော့ပေးလိုက်ပြီး … ပေါင်လေးကလည်း … ပိုကားလာသည် … အို … ထိတယ် … ထိတယ် … ရတနာရွှေကြုပ်ကြားလေးထဲက … အရည်လေးတစ်မျိုး စိမ့်ထွက်လာသည် … ရတနာဖူးလေးကို … ပွတ်ရတာ … ပိုချောလာသည် … အားမရ … ကိုင်ရခက်လိုက်တာရှင် … လက်ထဲမှာ ချော်ချော်သွားတော့ … အတင်းဖိထားလိုက်တယ်လေ … အို … အို
… အို …
နှုတ်ခမ်းဖျားလေးက … ကောင်းလွန်းလို့ ငြီးလိုက်မိသည် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ …
မနေနိုင်လောက်အောင် ကောင်းလိုက်တာ … ဘယ်လက်က … ယောင်ယမ်းပြီး … ကော့တက်နေတဲ့ ရင်သားကို … ဆုပ်ချေနေသည် … ပိုဆိုးတာပေါ့ရှင် … ကျွန်မ အထိအတွေ့မှာ … သာယာနေမိပါတယ် … ရင်သားလေးကို … အကိုင်ခံရတာ တစ်မျိုး … အောက်က … ရတနာဖူးလေးကို … ပွတ်နေတာက တစ်မျိုး … အို … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ရင်ထဲက … ကာမဆန္ဒကတော့ … မီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေပါတယ် … စိတ်ထဲမှာ အားမရတော့ဘူးရှင် … ပန်းဖူးလေး လက်ချောင်းလေးနဲ့ ပွတ်တာ … မခံတော့ပဲ … မနေနိုင်တော့လို့ … အတင်းပဲ … ရတနာရွှေကြုပ်က ကော့ကော့ပြီး … အပွတ်ခံနေတယ် …
“ဟင့် … ဟင့် …”
“ဟာ … ဟာ … ဟာ …”
ကောင်းလိုက်တာရှင် … လှုပ်ရှားမှုတွေက သွက်လာတော့ … ခံစားချက်က ပိုပြင်းထန်လာတယ် …
အော်ဒါကြောင့်လည်း … သူများတွေ ရီးစားထားကြတာကိုး … ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ရင်တောင် … ဒီလောက်ကောင်းရင် …အို … စိတ်ထဲမှာလေ … တစ်ယောက်ယောက်ကို … တမ်းတနေသလိုပဲ … တမ်းတစရာ ချစ်သူမရှိတော့ ခကတ်ာပဲရှင် …
“အို … ရှီး …”
လက်ဖျားလေးက … ရတနာဖူးလေးကို ပွတ်သပ်နေရင်း … အောက်က … ရတနာရွှေကြုပ်လေးထဲကို …
နည်းနည်းဝင်သွားသည် … ဆစ်ကနဲ စိတ်ထဲက သိလိုက်ပေမယ့် … မရတော့ … ပန်းရောင်လျှိုမြှောင်လေးထဲကို … လက်ဖျားလေးနဲ့ … သွင်းလိုက်မိတယ် ဆိုရုံပဲ … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ဟွန့် … ဖောင်းအိနေတဲ့ … ရတနာရွှေကြုပ်လေးရဲ့ … နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုက … မနာလိုဘူး ထင်ပါရဲ့ … အထဲဝင်လာတဲ့ လက်ဖျားလေးကို … အတင်း ဖမ်းဆုပ်ပစ်ချင်နေတာပဲ … အို … မရပါဘူးရှင် … ပန်းရောင်လျှိုမြှောင်လေးထဲက … အတွင်းသားတွေက … ရွစိတက်နေတော့ … လက်ဖျားလေး ၀င်လာတာကို ၀မ်းသာနေရှာတယ် … ဟင့် … စိတ်က ဟိုဟိုဒီဒီနဲ့ … မနက်က အပြေးလေ့ကျင့်တုန်း …
တွေ့တဲ့ ကောင်လေးကို … မျက်စိထဲ မြင်ယောင်လာသည် … ဟင့် … သူပေါ့ … မနက်တိုင်း … ကျွန်မ
ပြေးရင် … လမ်းတစ်ဝက်ကနေ စောင့်နေတယ် … ကျွန်မနောက်ကနေ … လေးငါးပေ အကွာက ပြေးတယ်
… ကျွန်မသိတာပေါ့ရှင် … ကျွန်မရဲ့ … စွံ့ကားနေတဲ့ … နောက်ပိုင်းကို ကြည့်ပြီး … သူ
ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ … သိချင်လိုက်တာ … အားကစားဘောင်းဘီအောက်က … တင်သားနှစ်လုံးက … လုံးကျစ်နေတော့ … သူ့စိတ်ထဲ … ကျလိကျလိ ဖြစ်နေမလားဟင် … ဖြစ်မှာပေါ့နော် … အို … စိတ်ကူးထဲမှာ … သူ အနားရောက်လာပြီး … ကျွန်မကို … အတင်းဖက်တယ်ရှင် … အို … လက်တွေကလည်း ရဲလိုက်တာ … ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းတွေကို … အတင်းနမ်းတယ် … အို … သူ့လက်ညှိုးလေးက … ကျွန်မရဲ့ … နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲကို … ထည့်တယ် … စိတ်ကူးအတိုင်း … ကျွန်မ ဘယ်လက်က … နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲကို ထည့်လိုက်တယ် … အို … ကျွန်မလေ … ၀င်လာတဲ့ လက်ကလေးကို … စုပ်လိုက်မိတယ် … လျှာလေးနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်သေးတယ် … အို … ခက်တော့တာပဲ …
သူက စိတ်မြန်တယ်ရှင့် … ကျွန်မရဲ့ ရွှေရင်မို့မို့ကို … အုပ်ကိုင်ပြီး … ဆုပ်နယ်တော့တယ် … အို … ကောင်းလိုက်တာရှင် … မာကျစ်နေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက … သူ့ကြောင့် ကြေမွသွားမှာလားဟင် …
“အို … ရှီး … ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ … မောင်ရယ်”
ဟင့် … နှုတ်ခမ်းဖျားက … ပလီပလာနဲ့ ငိုငြီးလိုက်သည် … မရှိသေးတဲ့ … စိတ်ကူးယဉ် ချစ်သူကို … ညုလိုက်မိပါတယ် … အို … ဟင့် … ဟင့် … သူက … ရွှေရင်ကို အုပ်ကိုင်ပြီး … လက်ညှိုးလေးနဲ့ … ကျွန်မရဲ့ … ပန်းနုရောင် … နို့သီးဖျားလေးကို … ဖိပြီး … ချေပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာ … ဟင့် … အို … မောင်ရယ်” “အို … ဟင့် … ဖြေးဖြေး …”
ဟင့် … ကျွန်မကို … ရူးတယ်လို့ပဲ ဆိုဆို … ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပွတ်ပြီး … အော်ချင်ရာလျှောက်အော်နေတော့ … ခက်ပါတယ်ရှင် … စိတ်က မထိန်းနိုင်တော့ … ရွှေရင်ကို … ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ပြီး … ချေလိုက်မိတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … လူကို ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာပါပဲ … ပန်းနုရောင်နို့သီးဖျားလေးက … ရမက်ကြောင့် ထောင်မတ်နေတော့ … ပွတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေသည် …
လက်ညှိုးလေးနဲ့ လက်မ … ပွတ်ချေလိုက်တော့ … ရွှေရင်က … ကော့ကော့တက်လာသည် … ကျွန်မသိပါတယ် … ကျွန်မရဲ့ … ရတနာရွှေကြုပ်လေးထဲက … ချစ်ရည်ကြည်တွေ … ရွှဲရွှဲစိုနေပြီဆိုတာ …
ရတနာဖူးလေးကို … လက်လေးနဲ့ ပွတ်လိုက်တိုင်း … အောက်က ဖင်ကြီးက မနေနိုင်တော့ဘူးရှင် …
ရွှေကြုပ်လေးထဲက ရွစိတက်အောင် … ယားနေတာမို့ … ပြေလိုပြေညား … ဖင်ကြီးကို … ဝေ့၀ိုက်ပြီး … ကော့တင်ပေးလိုက်မိပါတယ်ရှင် …
ကျွန်မရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့လေးက … ဖောင်းကားပြီး … ရဲရဲနီနေတာပါပဲ … ရမက်ကြောင့် … ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာလေးကလည်း နီရဲနေတာပါပဲရှင် … ပန်းဖူးလေးကို ဆော့ကစားရင်း … ရွှေရင်က … တသိမ့်သိမ့် ဖြစ်လို့လာပါတယ် …
“မောင်ရယ် … ဟင့် … အ … အ”
ကျွန်မ … စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ … ပန်းရောင်လျှိုမြှောင်လေးထဲ … လက်လေးသွင်းလိုက်မိပါတယ်ရှင် … ရင်ထဲမှာ … ဒိန်းတလိန်းနတ်ဖမ်းပြီး … ငိုချင်သလိုလို … ရီချင်သလိုလို နဲ့ … ခံစားချက်ကတော့ … ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ … ပန်းနှစ်မွှာက … အတင်းဆုပ်ထားတော့ … အ၀င်ရ အထွက်ရ ခက်လိုက်တာရှင် … ဒါပေမယ့် … အားလေးစိုက်ပြီး … ထိုးထည့်လိုက်တယ် … အရမ်းတော့ မထည့်ရဲဘူးရှင် … အတွင်းသားလေးတွေက နုတယ်မှတ်လား … မတော်လို့ … လက်သည်းနဲ့ … ခြစ်မိပြီး … အနာဖြစ်သွားရင် … ခက်ရချည်ရဲ့ … ဟင့် … လက်လေးအထဲနည်းနည်းဝင်သွားရင် … ရွှေကြုပ်လေးက … လေးငါးခါ …
ဆက်တိုက် ညှစ်လိုက်တာ … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ဟင့် … ကျွန်မတို့ လက်ကလေးနဲ့တောင် … ဒီလောက်ကောင်းနေရင် … ဟိုမောင်လေးရဲ့ … ဟာနဲ့ဆို … အို … ရှက်လိုက်တာရှင် … သူ့ဟာလေးနဲ့ … ကျွန်မ … ရွှေကြုပ်လေးထဲ … အထည့်ခံလိုက်ရင် … အို … ကျွန်မ ခံနိုင်ပါမလားရှင် … တွေးနေတုန်းပဲရှိသေး … တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောတွေ တင်းလာပြီး … နှုတ်ခမ်းက တဇတ်ဇတ်တုန်လာပါတယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … ကိုက်ထားပေမယ့် မရပါဘူး … တစ်ကိုယ်လုံးက … အားတွေက … ရွှေကြုပ်လေးထဲမှာ စုပြီး … အထဲဝင်နေတဲ့ လက်လေးကို … အတင်းဆုံး ဖမ်းဆုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ် … ဟင့် … ဟင့် … အို … ကောင်းလိုက်တာ … ကောင်းလိုက်တာ … ဟင့် … အတွေးလေးတွေထဲမှာ … ဟိုးအမြင့်ကြီးနေ ပြုတ်ကျသလို … ရင်ထဲမှာ အေးကနဲ … သိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး … ရွှေကြုပ်လေးထဲမှာ … တဇတ်ဇတ်နဲ့ … ညှစ်ရင်း … ချစ်ဝတ်ရည်တွေကို … ပြွတ်ကနဲ … ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်မိပါတယ်ရှင် …
ကာမအရသာကြောင့် … ကျွန်မ ရင်တွေ ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက် နဲ့ … မိန်းမောနေပြီး … သောင်ပြင်မှာ လှိုင်းလေးပုတ်သလိုလို … တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ … လောကရဲ့အရသာသစ်ကို … ခံစားနေပါတယ် … လူဆိုတာ ခက်သားလားရှင် … မိန်းကလေးတစ်ယောက် အရွယ်ရောက်လာရင် … အိနြေ္ဒရှိရှိ နေရ … ပြောရ … ဆိုတော့ … စိတ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားရပါတယ် … ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ … လွတ်လွတ်လပ်လပ် တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတော့ … ဒီစိတ်မျိုး ဖြစ်မိတာ မဆန်းပါဘူးရှင် … အလိုဆန္ဒတွေ … ထကြွသောင်းကျန်းရင် … အိနြေ္ဒရှိရှိ မနေနိုင်တော့ပါဘူးရှင် … ဆန္ဒရဲ့ သွေးဆောင်ရာကို … လိုက်ပါသွားရင်း … မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ် … ဒါ့ကြောင့်လည်း … ဒေါ်လေးမေက … ကျွန်မကို … ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အနေနီးနီး မနေဖို့ … ဆုံးမဖူးပါတယ် … ဟင်း … ခက်ပါတယ်ရှင် … ကာမအရသာဆိုတာက … မကြုံဘူးခင်ကတော့ … ကြောက်မိတာပေါ့ … အခုတော့ … အရသာသိသွားတော့ … ခံစားချင်တယ်လေ … ထပ်ထပ်ပြီးလည်း မြည်းကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင် … ကျွန်မ …
မွေ့ယာပေါ်မှာ … လူးလွန့်နေတုန်း … တံခါးခေါက်သံကြားတော့ … ၀ုန်းကနဲ ထရပ်လိုက်မိပါတယ် … နည်းနည်းတော့ လန့်သွားရှင့် … ကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်မရှိပဲ … မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း … ကိုယ်ဗလာနဲ့ … မွေ့ယာပေါ်မှာ … တစ်ယောက်တည်း … သောင်းကျန်းလို့ … ချစ်ရည်ကြည်လေးတွေကလည်း …
မွေ့ယာပေါ်မှာ … အိုင်ထွန်းနေပါတယ် … ဟယ် … ဒုက္ခပါပဲ … အန်တီမေများ တွေ့သွားရင် … အဆူခံရတော့မယ် … အိမ်မှာက … အန်တီမေနဲ့ ကျွန်မနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းနေတော့ … တံခါးခေါက်တာ … အန်တီမေပဲ … သေချာတယ် …
“သမီးရေ … တံခါးဖွင့်ပါအုံး”
“ဟုတ် … ဒေါ်လေးမေ … လာပြီ … လာပြီ …”
ကျွန်မ … ထမီကို မြန်မြန် စွတ်ပြီး … ရင်လျားလိုက်ပါတယ် … ၀တ်ရည်တွေ … ပေပွနေတဲ့ မွေ့ယာကို … စောင်လေးနဲ့ ဖုံးထားပြီး … တံခါး အမြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ် …
“သမီးနေမကောင်းဘူးလားဟင် … မျက်နှာလေးတွေက နီလို့”
“ကောင်းပါတယ် … ဒေါ်လေးမေရဲ့ … ချွေးထွက်တာများလို့ … ထင်ပါတယ်” “အခန်းထဲမှာလည်း … ဘာနံ့လဲဟင်”
ဒေါ်လေးမေ … ရှုံ့ချည်ပွချည် … လုပ်ပြီး … ကျွန်မကို … စိုက်ကြည့်နေပါတယ် … ဒေါ်လေးမေရဲ့ မသင်္ကာတဲ့ မျက်လုံးအကြည့်ကြောင့် … ကျွန်မ ရင်တွေ နည်းနည်းတော့ တုန်သွားပါတယ် … ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ … ပလူးပလဲနေတာများ … လူမိသွားရင် … ရှက်လို့ သေမှာပဲ …
“ဘာနံ့မှ မရှိပါဘူး … ဒေါ်လေးမေရဲ့”
“သမီး … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟင်”
ဒေါ်လေးမေ အပြောကြောင့် … ကျွန်မမျက်နှာ ကွပ်ကနဲ ပျက်သွားပါတယ် … ချက်ခြင်း … မျက်နှာကို ပြန်ပြင်လိုက်ပေမယ့် … ဒေါ်လေးမေ ရိပ်မိသွားပါတယ် … ဒေါ်လေးမေ … မွေ့ယာပေါ်က … စောင်ကို … ဆွဲလှန်ပစ်လိုက်သည် …
ကျွန်မ … မျက်နှာတွေ ဘယ်နားထားရမှန်းမသိအောင် … ထူပူသွားတာပါပဲရှင် … ပလူးပလဲနေမိတာ … လူမိသွားတေ့ … ရှက်လိုက်တာရှင် … ရှက်လိုက်တာ … ကျွန်မရဲ့ ချစ်ဝတ်ရည်တွေကို … လက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့ … ဒေါ်လေးမေကို … အရမ်းကြောက်မိသွားပါတယ်ရှင် …
“ဒါတွေက … ဘာတွေလဲ”
ဒေါ်လေးမေ … လေသံမာမာနဲ့ မေးလိုက်တာနဲ့ … ကျွန်မ … ကျွန်မလေ … ရှက်လွန်းလို့ … မျက်နှာကို လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး … ငိုချလိုက်မိပါတယ် … ကျွန်မမှာ … ဖြေဖို့ အားမရှိတော့ပါဘူး … ရှက်လွန်းလို့ … မျက်ရည်တွေက … ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာပါတယ် … ဒူးကလည်း မခိုင်တော့ … ခုတင်ဘေးမှာ … ထိုင်ချလိုက်ပြီး … ဒူးနှစ်လုံးကြားမှာ … မျက်နှာဝှက်ပြီး … ဟီးကနဲ ငိုချလိုက်ပါတယ်ရှင် …
“အို … ကလေးရယ် … မငိုရဘူးလေ … ဒေါ်လေးမေက … သမီးကို ဆူပူချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး … တိတ် … တိတ် … မငိုရဘူးနော် … ဒါ အရွယ်ရောက်တဲ့ သူတိုင်း … ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ လူ့သဘာဝပဲ … ”
ကျွန်မ … ခုတင်ဘေးမှာ … ဒူးလေးထောင်ပြီး … တသိမ့်သိမ့်ငိုနေမိပါတယ် … နည်းနည်းတော့ … အံ့သြသွားပါတယ် …
ကျွန်မရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့လေးကို … အုပ်ကိုင်ပြီး …
“ဒီဆီးခုံမို့မို့လေးကို Mons Vernoris လို့ခေါ်တယ် … သမီး”
“ဟင့် … ဒေါ်လေးမေကလည်း …”
ဒေါ်လေးမေ … ကျွန်မရဲ့ ဆီးခုံ မိုမို့လေးကို … အုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ … စိတ်ထဲမှာ … မရိုးမရွဖြစ်သွားပါတယ် … ဒေါ်လေးမေ ကျွန်မရဲ့ … ရတာနာရွှေကြုပ်လေးကို … လက်လေးနဲ့ ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး …
“အို … အမေ့” ရတနာရွှေကြုပ်ဝက … နှုတ်ခမ်းထူထူးလေးကို … ညွှန်ပြရင်း …
“ဒါလေးက … မိန်းမကိုယ် နှုတ်ခမ်းကြီး … သူ့ကို Labia Majora လို့ ခေါ်တယ်” ပန်းလေးရဲ့ အတွင်းက ပွင့်ဖတ်နုနုလေးကို … လက်ဖျားလေးနဲ့ ဖိထားရင်း …
“ဟောဒါက … မိန်းမကိုယ် နှုတ်ခမ်းလေး … သူလေးကို Labia Minora လို့ခေါ်တယ်” “အို … ဟင့် … ဟင့် … ဒေါ်လေးနော်”
“ဒီလှိုဏ်ခေါင်းလေးက … Vaginal Canal … သမီးရဲ့ ပန်းလေးထဲကို … ယောက်ျားလေးတွေက … သူတို့အင်္ဂါကို ထိုးထည့်ပြီး … လိင်ဆက်ဆြံကမှာ”
အန်တီလေး … ကျွန်မရွှေကြုပ်လေးကို ပိုပြီး ဖြဲလိုက်တော့ … ကျွန်မမှာ … နေရထိုင်ရ ခက်လိုက်တာရှင် … ပြီးတော့ … ပြီးတော့ … တစ်တစ်ခွခွနဲ့ ဒီလိုစကားတွေ ပြောသေးတယ် … နားလည်းရှက် … ရင်လည်းတုန် … ဒါပေမယ့် … ဒေါ်လေးပြောသမျှ … ဆက်တော့ နားထောင်ချင်ပါတယ် …
“ဟောဒီ … အမြှေးပါးလေးက Hymen … သမီးရဲ့ အပျိုစင် အမှတ်အသားပေါ့”
“အို … ဒေါ်လေး … မထည့်နဲ့နော် … အို … မလုပ်ပါနဲ့ … ဒေါ်လေးရယ် … ဟာ …. ဟင့်”
ဒေါ်လေး လက်က … ကျွန်မရဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းလေးထဲ တိုးဝင်လာတော့ … ဟင့် … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … စိတ်ထဲမှာ … တစ်မျိုးကြီးရှင် … ခုနက … ရတနာဖူးလေးကို … ပွတ်ပေးတဲ့ အရသာနဲ့ မတူဘူး … ကျွန်မ ရွှေကြုပ်လေးက … ကြောက်လို့နဲ့ တူပါရဲ့ … အထဲဝင်လာတဲ့ ဒေါ်လေးလက်ကို … အတင်းဖမ်းညှစ်ထားပါတယ် … ကျွန်မလည်း ယောင်ယမ်းပြီး … ဒေါ်လေးလက်ကို … အတင်းဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် …
“ကြောက်တယ်မှတ်လား … သမီး”
“ကြောက်တာပေါ့ … ဒေါ်လေးရဲ့ … သမီး အပျိုရည်ပျက်သွားမှဖြင့်”
“သမီးက … ဘာလို့ အပျိုစင်ဘ၀ကို … တန်ဖိုးထားရတာလဲ”
ကျွန်မ … ကြောင်သွားတယ် … ကျွန်မက … မြန်မာမိန်းကလေး … ကျွန်မ ရာသီစလာလို့ … အရွယ်ရောက်ကတည်းက … ပိပိပြားပြားနေဖို့ … အပျိုစင်ဘ၀ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ … ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် သွန်သင်ဆုံးမ ခဲ့တဲ့ … ဒေါ်လေး … အခု သူ့မေးခွန်းကြောင့် … ကျွန်မ စဉ်းစားရတော့မယ် … ကျွန်မက အပျိုစင်ဘ၀လေးကို … ဘာလို့ ဂရုတစိုက် … ထိန်းသိမ်းရမှာလဲ …
“ဒေါ်လေးမေပဲ … သွန်သင်ထားတယ်လေ … မိန်းကလေးဆိုတာ … အပျိုစင်ဘ၀မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးတဲ့ … ထိန်းသိမ်းရမယ် … လျှို့ဝှက်ရမယ် … ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ပလူးပလဲမနေရဘူး … အပျိုရည်ပျက်ရင် …
“မှန်တာပေါ့ … သမီးရယ် … မှန်တာပေါ့ … သမီးအခု … အတွေ့ရဲ့ အရသာကို သိသွားပြီ … တစ်ယောက်ထဲ ဖြေသိမ့်ရတာ … အားမရလို့ … သိပ်မကြာခင် … သမီး … ချစ်သူရီးစားထားတော့မယ် … သမီး ထားမယ့်ချစ်သူက … အမျိုးကောင်းသား ဆိုရင်တော့ … ကောင်းတာပေါ့ … အုတ်ကြားမြက်ပေါက် … သိုက်သမား … ဆေးသမားဆို … သွားပြီ … သမီးဘ၀ သွားပြီ … မှတ်ထား သမီး … အတွေ့ကို မရှောင်နိုင်တာ … လမ်းပေါ်မှာအိပ် … လမ်းပေါ်မှာ စားတဲ့ … သတ္တ၀ါတွေ အတွက်မှန်တယ် … အတွေ့ရဲ့ အရသာကို … ငမ်းငမ်းတက် … ဖြစ်နေရအောင် … သမီးက … လူလား … ခွေးလား …”
ဒေါ်လေးမေရဲ့ … ပက်ပက်စက်စက် … မေးခွန်းတွေက … ကျွန်မရင်ကို … ပိုပြီး … ၀မ်းနည်းစေပါတယ် …
ငါမှားသွားပြီ … အတွေ့ရဲ့ နောက်ကို … ဘာလို့ ငါလိုက်မိခဲ့တာလဲ …
“သမီးက … လူပါ … ဒေါ်လေး … ဟင့် … သမီး … မသိလို့ လုပ်မိတာပါ … နောက်ကို မလုပ်တော့ပါဘူး …
အီး … ဟီး … ဟီး”
“သမီးရဲ့ … အခု အပျိုစင်ဘ၀လေး … သမီး ဘယ်လို ခံစားရမလဲ”
“ဟင့် … ၀မ်းနည်းမှာပေါ့ … ဒေါ်လေးရယ် … ၀မ်းနည်းမှာပေါ့”
“သမီးရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀လေးကို … လူယုတ်မာတစ်ယောက်က … အတင်းရယူမယ်ဆို … သမီးဘာလုပ်မလဲ”
ဒိန်းကနဲ … ကျွန်မရင်တွေ … တုန်သွားသည် … အပျိုလေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ … တစ်သက်လုံး …
ဖြူဖြူစင်စင်နေလာခဲ့တော့ … အခုလိုမျိုး ဒေါ်လေးအမေး … တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေပါ
“သမီး … သူ့ကို သတ်ပစ်မယ်”
“ဘာလို့ … သတ်ပစ်မှာလဲ”
“မတရားတဲ့ ကိစ္စမို့ … မုန်းတယ်”
“သေချာလား … တကယ်သတ်ပစ်မှာလား”
“သေချာတယ် … ဒေါ်လေး … သေချာတယ် … သမီး ရအောင်ကို သတ်ပစ်မှာ”
“အခု … သမီးကို … ဒေါ်လေးမေ … လက်နဲ့ ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ရင် … ဘာဖြစ်သွားမလဲ”
ကျွန်မ … တုန်တက်သွားသည် … ဒေါ်လေးမေ … လက်နဲ့ … ထိုးထည့်လိုက်ရင် … ကျွန်မရဲ့ … ကျွန်မရဲ့ … အမြှေးပါး ပျက်စီးသွားမှာပေါ့ … ဒါဆို … သွားပြီပေါ့ … အပျိုစင်ဘ၀လေး ပျက်သွားမှာပေါ့ …
“ဟင့် … ဒေါ်လေးနော် … လျှောက်မလုပ်နဲ့နော် … သမီး … ကြောက်တယ်”
“နင့်အမေ အဖေ ဘယ်လို သေရလဲ … သိလား”
ကျွန်မ … ငယ်ငယ်လေးထဲက … ဖေဖေ မေမေ … မရှိပါဘူး … ဒေါ်လေးမေက … ကျွန်မကို …
ကျွေးမွေးပြုစုလာတာပါ … ဒေါ်လေးမေပြောတော့ … ကျွန်မ မေမေက … ကျွန်မကို … မွေးမွေးပြီးချင်း … မီးတွင်းမှာ … ဆုံးသွားတယ် … ဖေဖေက … ကားမှောက်ပြီး ဆုံးတယ် … အဲဒါတွေက … အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ …
“သမီးကို … မွေးပြီးတော့ … မေမေ ဆုံးတယ် … ဖေဖေက ကားမှောက်ပြီး ဆုံးတယ်ဆို …” “မဟုတ်ဘူး … လုံးဝ မဟုတ်ဘူး”
ဒေါ်လေးမေရဲ့ … အော်သံက … အခန်းထဲမှာ ဟိန်းထွက်လာသည် …
“အဲဒီနေ့က … ဆောင်းတွင်း …ချမ်းလိုက်တာလည်း ခိုက်ခိုက်တုန်ပဲ … အောင်ပန်းက လိမ္မော်ခြံထဲမှာ … နင့်အမေက … နင့်ကို ချိုချိုတိုက်နေတယ် … ငါက မီးဖို ဖိုပေးပြီး … နင့်တို့သားအမိ မအေးအောင် …
လုပ်ပေးနေတာ … အဲဒီအချိန်မှာ … အဲဒီအချိန်မှာ …”
ပြောနေရင်း … ဒေါ်လေးမေ … အံတွေကြိတ်လာသည် … မျက်နှာကြီးက နီလာသည် … ကျွန်မ … တော်တော်လေးလန့်သွားသည် … ငေါက်ကနဲ ထထိုင်လိုက်ပြီး … ဒေါ်လေးမေကို ကြည့်ရင်း …
“ဘာဖြစ်လဲ … ဒေါ်လေး … ပြောပါအုံး … သမီးရင်တွေတုန်လိုက်တာ”
“ငါတို့ … အိမ်ထဲကို … ဓါးပြ သုံးယောက် ရောက်လာတယ် …”
“သူတို့ကို … ဒေါ်လေးသိလား”
“မသိဘူး … မျက်နှာကို … ပ၀ါတွေ စည်းထားတယ် …”
“ပြီးတော့ … ပြီးတော့ … အတွင်းပစ္စည်းတွေ ထုတ်ခိုင်းတယ် … ငါလည်း … ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် … အသက်ကို ရန်မရှာနဲ့ … ပစ္စည်းယူသွားလို့ … ”
“နင့်အဖေက … တောင်ကြီးတက်သွားတယ် … ပစ္စည်းတက်ဝယ်တာ”
“အင်း … နောက်တော့ရော …”
“နောက်တော့ … နောက်တော့ … ဒင်းတို့ထဲက … တစ်ယောက်က ငါ့ကို … ချုပ်ပြီး …
နောက်တစ်ယောက်က … အတင်းကြံတော့တာပဲ … ဘယ်လိုမှ တောင်းပန်လို့လဲမရပါဘူး … တောက်”
“ဟင် … ဖြစ်ရလေ … ဒေါ်လေးရယ် …”
ကျွန်မ … ဒေါ်လေးကို … အရမ်းသနားသွားသည် … တောက် … ယုတ်မာလိုက်ကြတာ … လူ့တိရစ္ဆာန်တွေ
“ငါ့ကိုလေ … တစ်ယောက်ပြီး … တစ်ယောက် … မုဒိန်းကျင့်ကြတယ် … အတင်းရုန်းတော့လည်း … ပါးရိုက်ခံရတယ် … ဒင်းတို့က … ငါ့ကို … လုပ်တာ … အားရတော့ … နင့်အမေကိုပါ … ဆက်လုပ်တယ်”
ကျွန်မ ခေါင်းထဲကို … မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုပါပဲ … ထိတ်လန့်ခြင်း … ခြောက်ခြားခြင်း …
ယူကြုံးမရဖြစ်ခြင်း … ဒေါသထွက်ခြင်းတွေကြောင့် … ကျွန်မလည်း အံကို တင်းတင်းကြိတ်ပြီး … ဒေါ်လေး ပြောတာကို … ဆက်နားထောင်နေမိသည် …
“အရမ်းယုတ်ကန်းတဲ့ … လူယုတ်မာတွေ … နင့်အမေက … သွေးနုသားနုနဲ့ … ၀ိုင်းလုပ်တာခံရတော့ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ … နင့်အမေက … သွေးအလူးလူးနဲ့ အသက်မရှိတော့ဘူး
“ယုတ်မာလိုက်တာ .. ယုတ်မာလိုက်တာ”
“တောက် … ငါ … ငါလေ … အဲဒီလို အဖြစ်ဆိုးကြီးကြောင့် … ငါ့ကိုယ်ငါ သတ်သေမလို့ပါပဲ … မွေးကင်းစ နင်က … နို့ဆာလို့ … ငိုနေတော့ … နင့်ကို … ငဲ့ပြီး … ငါ သတ်မသေခဲ့တာ … ကံဆိုးမသွားရာ … မိုးလိုက်ရွာဆိုသလိုပဲ … နင့်အဖေ … ငါ့အစ်ကိုက … ကားမှောက်တယ် … သူလည်း အဲဒီနေရာမှာ ပွဲချင်းပြီးပဲ”
ရက်စက်လိုက်တာ … ဘယ်လိုကံကြမ္မာများလဲ … ကျွန်မဟာ … ကံမကောင်းခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ … သမီးတစ်ယောက်လား … ဒီလိုမျိုး … အဖေနဲ့ အမေ အသေဆိုးနဲ့ သေရအောင် လုပ်တာ … ဘယ်သလဲူ
“သိပြီးလား … နင့်အမေ ဘယ်လို … သေရလဲဆိုတာ … သိပြီလား”
ဒေါ်လေးမေ … နာနာကြည်းကြည်း အော်ဟစ်ပြီး ပြောဆိုသံက … ကျွန်မ ရင်ကို … ကွဲစေလောက်ပါတယ် … တူအရီးနှစ်ယောက် … မျက်နှာမှာ မျက်ရည်တွေက အပြည့် … ဒေါ်လေး … ပြောရင်း … တစ်ချက်ရှိုက်ပြီး …
“မှတ်ထား … နင့်စိတ်ထဲမှာ စွဲအောင်မှတ်ထား … နင့်ရဲ့ မိဘတွေ အတွက် … ဘယ်လို လက်စားချေမှာလဲ … ပြောစမ်း … ”
“တွေ့အောင် ရှာပြီး … ရအောင်သတ်မယ် … ”
ကျွန်မ … အံကို တင်းတင်းကြိတ်ပြီး … ဒေါ်လေးကို … စေ့စေ့ကြည့်ပြီး … ပြောလိုက်သည် … ဟုတ်တယ် … မခံနိုင်ဘူး … ငါ့မိဘတွေကို … ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားတဲ့ … ဒင်းတို့ကို … ငါရှာရမယ် … သတ်မယ် … သတ်မယ် … မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီး … တစစီလုပ်ပစ်လိုက်မယ် … ကျွန်မရင်မှာ … အမုန်းတရားတွေကြောင့် … မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေပါတယ် …
“ဒေါ်လေး … သူတို့ကို … မှတ်မိလား”
“မမှတ်မိဘူး … ဒါပေမယ့် … သေချာတာက … သူတို့လက်မောင်းက … ဆေးမှင်ကြောင် ကိုတော့မှတ်မိတယ် …”
“မြွေ … တြိဂံထဲမှာ မြွေပါးပြင်းထောင်နေတဲ့ပုံ”
“သူတို့ကိုကော … ရှာတွေ့လား”
“အင်း … သူတို့က ပိုင်ပြီဆိုပြီး … ရန်ကုန်မှာ လာပြီး ဇာတ်မြုပ်နေနေတာ … ဟင်း ဟင်း … ကမ္ဘာပျက်သွားရင်တောင် … ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး … တစ်ယောက်က သေသွားပြီ … တစ်ယောက်ကို … ငါမနေ့က … သွေးကြွေးဆပ်လိုက်တယ် … ဒီမှာကြည့်” လညှ်း တန်း ဈေး အမကှိုပုးံ ထမှဲလေူ သ အလောင်း
ယမနေ် န့ ည ၉ နာရခီ နတ့်ငွ်… စညပ် ငသ်ာယာ ၀နထ်မ်း များမှ… လညှ်း တန်း ဈေးအတငွ်း ရှိ အမကှိုပုးံ များကို သမိ်း ဆည်း စဉ် … ပလပစ် တစအ်တိတ်စလ်ုးံ ကို… မသကာင်္ ၍ ဖငွြ့်ကညလ့်ကိုရ်ာ… အတိအ်တငွ်း … လကတ်စဖ် က် … ယောကျာ်းအင်္ဂါ တစခ်ု… မျကလ်ုးံ တစလ်ုးံ ကိုတေရွ့ ရှိ ဖြင့် … ကမာရတွရ် စဲ ခန်း မှ မခှု င်း အမတှ်( ) ဖြင့် … အမဖှု ငွ့် စစေ် ဆးလျက်ရပှိါသည်…
ဒီသတင်းလား … ဂျာနယ်ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် … စာလုံးမည်းကြီးဖြင့် … ဖော်ပြရလောက်အောင် … ရန်ကုန်ကလူတွေ … အုတ်ကျော်သောင်းနင်း … အထိတ်တလန့် ဖြစ်နေကြတာ … ကျွန်မလည်း ကြားမိပါတယ် … တစ်ချို့ကလည်း … ရန်ငြိုးကြောင့် ဖြစ်မယ် … တစ်ချို့ကလည်း … ရန်ဖြစ်လို့ … အကုန်လုံးက သို့လောသို့လောနဲ့ … အမျိုးမျိုးဝေဖန်နေကြပါတယ် … ကျွန်မတောင် …
တွေးလိုက်မိသေးသည် … ဒါ … လူသတ်မှုလို့ … ရက်ရက်စက်စက် … လက်တုံ့ပြန်ထားတဲ့လူသတ်မှုလို့ … အခု … ဒါဆို … တရားခံက … ဒေါ်လေးမေပေါ့ … လက်တြုံ့ပန်လိုက်တာ … ဒေါ်လေးမေပေါ့ …
ကောင်းတယ် … သိပ်ကောင်းတယ် … သွေးကြွေးဆိုတာ … ဒီလိုမျိုးဆပ်ရတယ် … မှတ်ထား …
ဒေါ်လေးမေရဲ့ … လက်တြုံ့ပန်ပုံကို … ကျွန်မ အားရကျေနပ်မိပါတယ်ရှင် … မေမေတို့ကို … မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့ လူယုတ်မာတွေကို … ဒီလိုမျိုး လက်စားချေခွင့်ရတာ … သိပ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ် … သုံးယောက်မှာ … နှစ်ယောက်ကသေသွားပြီ … တစ်ယောက်က … ကျန်သေးတယ် … ဒင်းဘယ်မှာလဲ … ဒင်းဘယ်မှာလဲ …
“ဒေါ်လေး … ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကိုရော … တွေ့ပြီလား”
“သိတယ်ပေါ့ … ဒီလူယုတ်မာကို … အခုဆို … ဒင်း … သွေးလေခြောက်ခြားနေလောက်ပြီ … ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ … သက်တော်စောင့်တွေ ဘာတွေ ငှားထားတယ် … သမီး … ဒင်းကို လက်စားချေဖို့ … သမီးရဲ့ အကူအညီလိုအပ်တယ် …”
“ဘယ်သူလဲဟင် … ဘယ်သလဲူ … သမီး အခု သွားသတ်မယ် … မိလို့ကတော့ … အရေခွံတစ်မျှင်ခြင်း ခွာပစ်မယ် … အကြောတစ်ချောင်းခြင်း ဆွဲထုတ်ပစ်မယ် … တောက်”
“စိတ်မလောနဲ့ သမီး … စိတ်မလောနဲ့ … အဲဒီလူယုတ်မာက … ခေါင်းဆောင် … ဒင်းကို သွေးအေးအေးနဲ့ … သတ်ရမယ် … အရမ်းစွတ်လုပ်ရင် … သမီးပဲ အထိနာလိမ့်မယ် …”
“ဒေါ်လေးပြော … သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ … သမီး ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ရမလဲ … ဘယ်နေရာသွားရမလဲ”
ကျွန်မ … အသွေးအသားထဲက … လူသတ်ချင်စိတ်တွေ … တားမနိုင် စီးမရ ဖြစ်လာပါတယ် … ဒေါသကြောင့် … တကိုယလ်ုံး … ဇက်ဇက်တုန်ပြီး … လက်သီးကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားမိပါတယ်ရှင် …
“သမီး … လက်စားချေရမယ့် လူက … ဒီလူပဲ … သမီးအမေကို သတ်ခဲ့တဲ့ … လူယုတ်မာက ဒီလူပဲ … ရော့”
ကျွန်မရှေ့ကို … ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ … ပစ်ချလိုက်သည် … ကျွန်မ ကြည့်လိုက်သည် … ဓါတ်ပုံထဲက လူက … အသက် ၅၀ ၀န်းကျင် … မျက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်း … ယောက်ျားပီသမည့်ပုံ … အထူးခြားဆုံးက … သူ့မျက်လုံး … စူးစူးရှရှနဲ့ … လူတစ်ယောက်ရဲ့ … ရင်ထဲကို ဖောက်သွားမည့် အကြည့် … သူ့နာမည်က …
ဦးသက်အောင် … မြန်မာပြည်ရဲ့ ဟိုတယလ်ုပ်ငန်း ၁၀% ကို … ပိုင်ဆိုင်ထားသော … စူပါသူဌေးကြီး …
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွင် … နံပါတ် ၁ ဖြစ်နေသော … AK ဆောက်လုပ်ရေး … ဒါတွေအားလုံးကို … သူပိုင်သည် … အချိန်တိုအတွင်း … လျှမ်းလျှမ်းတောက် ဖြစ်လာအောင် … စီးပွားရေးအကွက်မြင်သည် … ဂျာနယ်တွေမှာ … သူ့အကြောင်း သူ့အမြင်တွေကို … တခမ်းတနားဖော်ပြရလောင် … ကြီးကျယသ်ည် … ဘာမှမရှိသော ဘ၀မှ … အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် … ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေ … ဘိုးဘွားရိပ်သာ … မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း … စသည်တို့ကို … ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းနေပုံ … ဒါတွေက … ဂျာနယ်တွေမှာ ခဏခဏပါသည် …
လူတွေ အမြင်မှာ … ဒင်းက … သူတော်ကောင်းကြီးပေါ့ … အလုပ်အရမ်းလုပ်တဲ့ … သူဌေးကြီးပေါ့ … ဟင်း ဟင်း … ကျွန်မ … သူ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို ဆက်ဖတ်လိုက်သည် …
အမည် – ဦးသက်အောင် အသက် – ၄၅ နှစ်
မွေးနေ့ – ၃၀ ဒီဇင်ဘာ အရပ် – ၆ ပေ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၈၀ ပေါင် သွေးအမျိုးအစား – အေ အိမ်ထောင် – မရှိ (ဇနီး ကွယ်လွန်) သားသမီး – သား တစ်ယောက်ရှိ (သက်နိုင် – အသက် ၂၅ နှစ်ဝန်းကျင် … မုဒိန်းမှုဖြင့် ထောင်ကျနေဆဲ … လွတ်မြောက်ရန် ရက်ပိုင်းသာလို)
ဒီလူယုတ်မာက … ဒီအရွယ်ထိ … နောက်အိမ်ထောင်မရှိရအောင် … မစွံတာလား … မဖြစ်နိုင်ဘူး … ထပ်မယူပဲ … အယောင်ဆောင်ပြီး … ခိုးစားနေလို့ ဖြစ်မှာပေါ့ … ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ … သားကလည်း ဖအေတူပဲ … မှုဒိန်းမှုတဲ့ … ရွံဖို့ကောင်းလိုက်တာရှင် …
အကြိုက် – ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိသော အိမ် … ဂေါက်ရိုက်ခြင်း … မိန်းမ ချောချောလှလှ (လက်ရှိ စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်ကို … စပွန်စာပေးထားသည် … ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေပါ … သိပ်မကြာခင် ခွာပြဲတော့မည်) … ကိုယ်ပိုင်ကလပ်တွင် အရက်သောက်ခြင်း (သုံးပက်ထက်ပို သောက်လေ့မရှိပါ) အိမ် – ကိုးမိုင်တွင် ၄ ဧက ကျယ်သော ခြံထဲတွင် နှစ်ထပ်တိုက်ဖြင့် နေသည် … ရေကူးကန်ရှိသည် …
ရုပ်ရှင်ရုံလေးရှိသည် … အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းရှိသည် …
လုံခြုံရေး – AK လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှ လက်ရွေးစင် ၁၀ ဦးက နေ့ည မပြတ် … စောင့်ကြပ်လျက်ရှိသည် …
ထူးခြားချက် – ဒေါသကြီးသည် … လိုချင်တာကို ရအောင် ယူတတသ်ည် … ရာဂကြီးသည် … လိင်တံက ၈ လက်မ … ပုလဲဂေါ်လီ ၈ လုံးထည့်ထားသည် … မိန်းကလေးများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် … အလွန်ကြမ်းတမ်းသည် … သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှ … စိတ်ကျေနပ်သည် … အထူးအားတိုးဆေးများ သုံးဆွဲထားသဖြင့် … နှလုံး အနည်းငယ်အားနည်းနေသည် …
“ဒေါ်လေးမှာ … ဘယ်လို အစီအစဉ်ရှိလဲဟင်”
“ဒီအတိုင်း … ရှင်းပစ်လိုက်လို့တော့ရတယ် … ဒါပေမယ့် … ဒီလူယုတ်မာကို … ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ လက်စားချေရင် … သက်သာသွားမှာပေါ့ … ဒင်းကို … စိတ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင် … လုပ်ပြီးမှ … အမိဖမ်းပြီး … အရေခွံနွှာပစ်မယ်”
“ဟုတ်တယ် … သမီးလည်း … ဒင်းကို အဲဒီလိုပဲ လုပ်ချင်တာ”
“ပထမအဆင့် … ဒီလို … ဒီလိုလုပ်ကြမယ်”
ကျွန်မ … ဒေါ်လေးရဲ့ … အစီအစဉ်တွေကို … နားထောင်ရင်း … လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် …
ဆုပ်ထားမိသည် … သတ်မယ် … သတ်မယ် … ဦးသက်အောင်ရေ … အိပ်ရေးသာဝအောင် အိပ်ထားပေတော့ …
ည ၈း၃၀ နာရီဆိုပေမယ့် … ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်က … တိတ်ဆတ်ိမသွား … လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေက ဥဒဟို သွားနေကြသည် … AK ကုမ္ပဏီရုံးချုပ် … ဒီကုမ္ပဏီက … အိမ်ခြံမြေနှင့် ဟိုတယ်များတွင် … သိန်းပေါင်းသောင်းနှင့်ချီကာ … ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ကုမ္ပဏီကြီး … သူဌေးကြီး … ဦးသက်အောင် တစ်ဦးထည်းပိုင်သော ကုမ္ပဏီ … ကုမ္ပဏီရှေ့တွင် လုံခြုံရေး တစ်ယောက် … ထိုင်လျက်စောင့်နေသည် … ကားနဲ့ တပတ်ပတ်ကြည့်ပြီး … တိုက်တလုံးရဲ့ ရှေ့မှာ … ကျွန်မရဲ့ မာစီဒီးကားကို … ရပ်လိုက်သည် … မြေညီထပ်အခန်းကို ဖွင့်ပြီး … ကားကို အထဲသွင်းလိုက်သည် … ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ … လူသိပ်မရှိ… တံခါးပြန်ပိတ်လိုက်သည် … ဒီတိုက်က … AK ကုမ္ပဏီနဲ့ ကျောချင်းကပ်ရပ် … ခြံစည်းရိုးသာခြားသည် … ဒီအခန်းက … ဒေါ်လေးမေ ၀ယ်ထားသည့် အခန်း … မြေညီထပ်နဲ့ …
ပထမထပ်ကို ၀ယ်ထားသည် … ဒီတိုက်က ဆောက်ပြီးခါစ … အပေါ်ထပ်တွေက … မရောင်းရသေးတော့ … လူမနေသေး … ဒေါ်လေးမေက … ပိုင်သည် … အလုပ်လုပ်တာ ပိရိသေသပ်သည် … အခုလည်းကြည့် … ဟိုလူယတ်ုမာကို … လက်တြုံ့ပန်ဖို့ … သေချာကျနစွာ အစီအစဉ်ဆွဲထားသည် … ကားနောက်ဖုံးကို ဖွင့်ပြီး … အထဲက … အ၀တ်ထုပ်ကို … ဖြေလိုက်သည် … အနက်ရောင်ကိုယ်ကျပ် အင်္ကျီ … မိုက်တယ် … ကျွန်မ … ၀တ်လာတဲ့ တီရှပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် … ဟင်း … ဖွံ့ထွားတဲ့ရင်နှစ်မွှာက …
ဘရာစီယာအောက်မှာ ရုန်းကန်နေသည် … ပြည့်တင်းတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက … မနေ့က လက်ဆော့ထားလို့လား မသိ … ပိုလို့ ကြွနေသည် … ခက်တာပဲ … ထမီလေးကို ချွတ်ချလိုက်သည် … ဖြောင့်ဖြောင့်ကျစ်ကျစ် ပေါင်တံလေးနှစ်ခုကြားမှာ ရွှေတြိဂံလေး … ကျွန်မရဲ့ ရတနာရွှေကြုပ် … မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကားနေတဲ့ …
ရွှေကြုပ်လေးရဲ့ အလှတရားကို … ပင်တီလေးက … ခပ်ကြပ်ကြပ်အုပ်စီးထားသည် …
ပြည့်ဖြိုးတဲ့ပေါင်တံလှလှလေးကို … အနက်ရောင်ဘောင်းဘီကို ကောက်စွပ်လိုက်သည် … လက်နှစ်ဖက်ကို လျှိပြီး … အင်္ကျီလက်ထဲထည့်လိုက်သည် … ကွက်တိ … နောက်ကျောက ဇစ်ကို ဆွဲတင်လိုက်သည် … အရမ်းလှတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအတိုင်း … ကွက်တိပါပဲ … ဆံပင်အရှည်ကို … နှစ်ခေါက် သုံးခေါက် ချည်လိုက်သည် … အမည်းရောင်မျက်နှာဖုံးကို … ဆံပင်တွေပါ ဆန့်အောင် ဆွတ်ချလိုက်သည် … ဟဲ ဟဲ … ကျွန်မက … နင်ဂျာမလေး ကျနေတာပဲ … လက်အိတ် … စွပ်ရအုံးမည် …
လက်ဗွေရာမကျန်အောင်ပေါ့ … ကျောပိုးအိတ်အမည်းကို သေချာလွယ် … အားလုံးပြီးတော့ … ပထမထပ်ကို အတွင်းလှေကားကနေတက်ပြီး … နောက်ဖေး တံခါးကို ဖွင့်ပြီး … ပြတင်းပေါက်တံခါးတွင် … ကြိုးစကို သေချာ ချည်လိုက်သည် … ကျန်တစကို … မြှားတချောင်းရဲ့ အနောက်မှာ သေချာတပ်သည် …
ဒူးလေးထဲကို မြှားကို ထည့် … အသက်ကို ၀အောင်ရှုပြီး … ဟိုဘက်တိုက် သုံးလွှာကို
သေချာချိန်လိုက်သည် … ဒူးလေးထဲက မြှားက … ရွှတ်ကနဲ ထွက်သွားပြီး … တိုက်နှစ်ခု အလယ်မှာ … ကြိုးတန်းက … ခပ်တင်းတင်းဖြစ်သွားသည် … အိုကေ … အသက်ကို ၀၀ရှုပြီး … ကြိုတန်းကို လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ တွယ်ပြီး … ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ ချိတ်လိုက်သည် … ဟို့ ဟို့ … ကြိုးတန်းက … ကျွန်မအလေးချိန်ကြောင့် နည်းနည်း အိသွားပေမယ့် … ရပါတယ် … လက်တဖကက်ို ရှေ့တိုး…
နောက်တစ်ဖက်က … ထပ်ကိုင် … ခြေထောက်က အရှေ့ကို ရွှေ့ …. ဒီလိုနဲ့ … ကျွန်မ … ဟိုဘက်ရောက်အောင် ကူးလိုက်သည် … ဟူး … မောလိုက်တာ … နည်းနည်းတော့ ရင်တုန်သည် … အရင်ကလေ့ကျင့်ထားဖူးပေမယ့် … ဘာအတွက်မှန်းမသိ … အခုမှ သိတော့သည် … တော်တယ် … ဒေါ်လေး … အရမ်းတော်တယ် … လက်စားချေဖို့နေရာမှာ … ဒါမျိုးတွေက အသုံးဝင်တာပါလား …
နောက်ဖေးသံပန်းတံခါးကို … ခပ်ကြီးကြီးသံကြိုး နှစ်ကြိုးနဲ့ချည်ထားပြီး သော့ခတ်ထားသည် … အပေါ်သော့ကိုဖွင့် … အောက်သော့ကိုဖွင့် … နောက်ဖေးတံခါးကနေ ၀င်လာတော့ … စားပွဲတွေ အများကြီး တွေ့ရသည် … စားပွဲတွေ ရှေ့တွင် မှန်ခန်းတစ်ခု … မှန်ပေါ်တွင် Financial Manager … ဘဏ္ဍာရေးမှူးပေါ့ … ဟင်း ဟင်း … တံခါးဘုလုံးလေးထဲကို … သံချောင်းလေးထည့် … အပေါ်ထိုး … အောက်ထိုး … ဘေးကလန့် … ဟိုဘက်ဒီဘက် … မွှေလိုက်တော့ … ဟင့် … စိတ်က မနေ့က … ကိုယ့်ရွှေကြုပ်လေးကို ကိုယ်မွှေတာ … သွားသတိရသည် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ဟွန့် … ငါကလည်း ငါပဲ … အတွေ့မရှောင်နိုင်တဲ့ … ခွေးမများဖြစ်နေပြီလားမသိ … အခုတော့ … မတွေးနိုင် … နောက်မှပေါ့ … ဟိ …
နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက်ပြီး … ထပ်မွှေလိုက်သည် … သော့ကိုပြောတာပါ …
ဟဲ … ဟဲ … တံခါးလေး ပွင့်သွားတော့ .. အထဲမှာ စားပွဲခုံကြီး … စာရွက်စာတမ်းတွေ သူ့နေရာနဲ့ သူ သပ်သပ်ရပ်ရပ် … ထပ်ထားသည် … မိန်းမဆိုတာ ခက်သားလားရှင် … စပ်စုချင်စိတ်ကြောင့် …
ကျောပိုးအိတ်ထဲက … ဓါတ်မီးလေးကို ထုတ်ပြီး … နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်လိုက်သည် … အို … ဘဏ်ကနေ ငွေချေးထားတာပါလား … ဘဏတ်ိုးငွေသွင်းရမယ့် ဆင့်ခေါ်စာ … သိန်းပေါင်း … ၇၀၀၀ … ဟိုး … မနက်ဖြန်သွင်းရမယ့် ဘဏ်တိုး ပိုက်ဆံတွေက … အင်း … ဒီသံဘီဒိုကြီးထဲမှာပေါ့ … ဘီဒိုသော့ကို ခပ်သွက်သွက် … မွှေလိုက်သည် …
“ချက် … ဂလောက်”
အိုး … ဟို့ … ဒီလောက်များတဲ့ … ပိုက်ဆံတွေကို … ဘဏ်ထဲမထည့်တာလဲ … ကြည့်ရတာ …
အချိန်မမှီတော့လို့ … ခဏသိမ်းထားတာလား … ဒါမှမမဟုတ် … အိမ်တွေ ခြံတွေ … ရောင်းရငွေတွေကို သိမ်းထားတာလား … ဟာကွာ … ဖြစ်ချင်တာဖြစ် … ဘာတွေလျှောက်တွေးနေမှန်းမသိဘူး … ငါးထောင်တန်တွေ အထပ်လိုက် … ကျောပိုးအိတ်ထဲက … အိတ်အမည်းလေးတွေကို ထုတ်သည် … ထည့် ထည့် … မြန်မြန်ထည့် … ၂ … ၄ .. ၆ … ၁၀၀ … တစ်အုပ်ကို … ၅ သိန်း … အုပ် ၁၀၀ ဆို … သိန်း ၅၀၀ … ဟူး … ရှုံ့ကြိုးလေးကို တင်းနေအောင်ချည် … နောက်တစ်ထုပ် … ထပ်ထည့်သည် …
ချွေးပြန်လိုက်တာရှင် … ၁ ထုပ် … ၂ ထုပ် … ၁၄ ထုပ် … ဟူး … မောလိုက်တာ … မပြီးသေးဘူး … အိတ်တွေကို … ဂျိတ်နဲ့ ချိတ်ပြီး … နောက်ဖေးက ကြိုးကနေ လျှောချလိုက်သည် … အိုကေ … အားလုံးပြီးပြီ
နောက်ဆုံးလက်ဆောင်လေးတော့ … ထားခဲ့ရမှာပေါ့ … ဗီဒိုကြီးထဲက … စာချုပ်တွေကို အက်ဆစ်ရည်တွေ ဖြန်းပစ်လိုက်သည် … အက်ဆစ်က ရှဲကနဲ … စာရွက်တွေကို … စားပစ်လိုက်တာ … ကြည့်ကောင်းလိုက်တာရှင် … မနက်ကျလို့ ဗီဒိုတံခါးဖွင့်လိုက်ရင် … အားလုံး ဟောင်းလောင်း … ဟား ဟား ဟား … ဦးသက်အောင် … လူယုတ်မာကြီး … သက်အောင် … သိန်း ၇၀၀၀ ဆုံးရှုံးလို့ … ဘယ်လို ဒေါသတွေ ထွက်နေမလဲဆိုတာ … ကျွန်မ မျက်စိနဲ့ မြင်ချင်စမ်းပါဘိ … ရှင့်လို လူယုတ်မာကို …
သွက်သွက်ခါ ရူးအောင် … လက်စားချေပြမယ် …
ဗီဒိုကို ပြန်ပိတ် … အခန်းတံခါးကို ပြန်ပိတ် … နောက်ဖေးသံကြိုးတွေ ပြန်ပတ် … သော့ခတ် … သွယ်ထားတဲ့ ကြိုးကနေ … ခပ်သွက်သွက် … ကူးပြီး … ဒီဘက်တိုက်ကို ပြန်လာခဲ့သည် … ချည်ထားတဲ့ ကြိုးကို ဖြုတ် … မီးခြစ်နဲ့ မီးရှို့လိုက်တယ် … ဟင်း ဟင်း … ရေနံစည်ရယ် … ဓါတ်ဆီရယ် စိမ်ထားတော့ … ရှဲကနဲ … ကြိုးတန်းတစ်လျှောက်လောင်သွားသည် … ဟိုးဘက်တိုက်က … ချည်ထားတဲ့ ကြိုးထုံးလေးကပါ … မီးလောင်သွားသည် … အိုကေ … နောက်ကြောင်းရှင်းတယ် … နောက်ဖေးတံခါးကို ပိတ် … ငွေထုပ်တွေကို … အောက်ကိုသယ်ချသည် … ကားနောက်ဖုံးထဲ သေချာစီပြီးထည့်လိုက်သည် … ၀ှီး မောလိုက်တာရှင် …
မျက်နှာဖုံးကို … ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ … ဆံနွယ်ရှည်ရှည်က … ၀ဲကျလာသည် … ကျောပိုးအိပ်ကို ပစ်ချပြီး …
လက်အိတ်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်သည် … နောက်ကျောက ဇစ်ကို ဖြုတ် … ကိုယ်ကျပ်အင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် … ချွေးတွေကြောင့် … တစ်ကိုယ်လုံး ကပ်စေးနေတာပဲရှင် … အင်္ကျီတွေကို … လုံးထွေးပြီး … ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့် … ခုနက … အင်္ကျီဟောင်းကိုလည်း … ထပ်ထည့် …
ကျောပိုးအိတ်ကို သေချာပိတ်ပြီး … ကားနောက်ဖုံးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည် … နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၉ နာရီ … ဒါ … ဒါ … ဒါ … ဒီ … ဒီ … ဒီ … ဟို့ … ဟို့ … ဟိုး …
ပျော်လွန်းလို့ … သီချင်းလေး ငြီးပြီး … လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ … ကျွန်မ ရေချိုးခန်းဆီကို လျှောက်လာပါတယ် …
ခြေလှမ်းတွေကို … မျဉ်းတစ်ကြောင်းထဲ လျှောက်ပြီး … တင်တွေကို … အပြတ်ယမ်းခါပစ်လိုက်ပါတယ် … ရေချိုးခန်းအ၀ရောက်တော့ … ပင်တီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် … အာ ဟာ့ … ချွေးတွေကြောင့် … စေးကပ်နေတာပဲရှင် … လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လိုက်လို့ထင်ပါရဲ့ … ပင်တီလေးက … ပန်းတောင်ကြားမှာ ညပ်နေရှာတယ် … သတိနဲ့ … ချွတ်ချလိုက်ပေမယ့် … လူကတော့ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်ရှင့် …
ဘာမှန်းလဲမသိဘူး … အထိကိုမခံတဲ့ … ရွှေကြုပ်လေးပဲ … ရေချိုးခန်းထဲမှာ … ဆံပင်တွေကို ချည်ပြီး …
ရေမစိုအောင် … ပလပ်စတစ် အဆောင်းလေးဆောင်းလိုက်သည် … ရှုပ်လိုက်တဲ့ … ဆံပင် …
ရေပန်းလေးကို ဖွင့်ချလိုက်တော့ … ဟား … အေးသွားတာပဲ … ဆပ်ပြာရည်လေးကို … လက်ထဲထည့်ပြီး … ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ … လျှောက်ပွတ်ပစ်လိုက်သည် … ဟွန့် … ရင်နှစ်မွှာက … ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည် … ကျွန်မ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ … အုပ်ကိုင်လို့ မနိုင်အောင် … ထွားလာတာလား … မနေ့က … ကလိမိလို့ … လက်ယောင်လိုက်ပြီး … ဖောင်းလာတာလားမသိ … ဆပ်ပြာရည်လေးနဲ့ … ပွတ်သပ်လိုက်တော့ …
စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးလေးပေါ့ … ပန်းရောင်နို့သီးဖျားလေးကို … ဖွဖွလေးပွတ်ပစ်လိုက်တော့ … နှုတ်ခမ်းဖျားက … တဟင်းဟင်း ဖြစ်လာပါတယ် … အိုး … ကျွန်မဟာ … အတွေ့ကို မရှောင်နိုင်ပဲ … ငမ်းငမ်းတက်ဖြစ်နေပြီလား … ခက်တာပဲရှင် … ကာမအရသာဆိုတာ … စမိရင် … ဖြတ်ရခက်တယ်ရှင့် … စားဖူးတဲ့ကလေးက ပိုငတ်တယ်တဲ့ … လုပ်ဖူးတော့ … ဒီခံစားချက်ကို … ထပ်ထပ်ပြီး ခံစားချင်တာပေါ့ရှင် … ဟင့် … လက်လေးက … အောက်က … ရွှေကြုပ်လေးကို … အလိုလို ရောက်သွားသည် … အို …
ပန်းဖူးလေးက … ဘာလို့ ထောင်မတ်နေတာလဲဟင် … ဘာမှတောင်မလုပ်ရသေးဘူး … တစ်ချက်လေး ပွတ်မိလိုက်တော့ … လူကို ထွန့်ထွန့်လူးသွားသည် … ဟင်း … မဖြစ်ဘူး … မဖြစ်သေးပါဘူး … နောက်ကျနေပြီ … ညစာစားပွဲ တစ်ခု တက်ရအုံးမယ် … ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချပြီး … နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်ထွက်မတတ် … ကိုက်ထားရင်း … စိတ်ကို ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရသည် … နည်းနည်းတော့ … ဘ၀မကျချင် … လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ … မဖြစ်ရလို့ထင်ပါရဲ့ … ဒေါသလေးတော့ ထွက်မိတယ် … ခက်တယ်ရှင် … ခက်တယ် … ရေစိုနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ … ခပ်သွက်သွက် … သုတ်ပစ်လိုက်ပြီး …
အလှဆီလိုးရှင်း ကို … အသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားအောင် … သေချာလိမ်းလိုက်တယ် … ဒါမှ မွှေးပြီး … အသားအအရည်ချောမွတ်မှာပေါ့ရှင့် … မျက်နှာကို ခပ်သွက်သွက် … မိတ်ကပ်ကို လိမ်းလိုက်သည် …
ခပ်ပါးပါးပဲလိမ်းတယ် … ကျွန်မက … မိတ်ကပ်အထူကြီး လိမ်းရတာ … မကြိုက်ဘူးရှင့် … ဆံပင်တွေကိုလည်း … အမွှေးဆီနဲ့ သေချာ လိမ်းလိုက်တော့ … မည်းမှောင်တဲ့ ဆံကေသာက … ပိုပြီး …
တောက်ပြောင်လာတာပေါ့ … ဘရာစီယာ ကိုယ်ကြပ်ကို … ၀တ်လိုက်သည် … ဘရာစီယာခွက်ထဲမှာ …
ရင်နှစ်မွှာက … ပိုလို့ မို့မောက်လာသည် … ဟင့် … ဟိုကျရင် … နှာဘူးတွေကတော့ … မျက်လုံးခွာတော့မှာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော် … ဂါဝန် … ခရမ်းရောင် … ညစာစားပွဲမှာ … ထင်ရှားအောင် …
ဒါမျိုးဝတ်ရတယ်ရှင့် … ဂါဝန်က နည်းနည်းတော့ တိုတယထ်င်တယ် … ဒူးအထက်နားရောက်တယ်ဆိုတော့ … သိပ်တိုတယလ်ို့လည်း … ပြောလို့မရပါဘူး … အို … ဂါဝန်ကဟောင်းလောင်းကြီး … ပင်တီလေးဝတ်မှပေါ့ရှင့် … ခရမ်းရောင် ပင်တီလေးကို … ကောက်စွပ်လိုက်သည် … ဟင်း … ဟင်း …
စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ လြုံခုံသွားသည် … နားကပ်တွေတပ် … လည်ဆွဲခပ်သေးသေးပဲ … ဆွဲလိုက်တယ် … ရင်နှစ်မွှာအလှနဲ့တင် … လုံလောက်ပါတယ်ရှင့် … အို … မေ့ကျန်ခဲ့တော့မလို့ …
ပင်တီလေးကို ကောက်ပြီး … ကျောပိုးအိတ်အမည်းထဲ သွားထည့်လိုက်ပြီး … ကားနောက်ဖုံးကို … သေချာ သော့ခတ်လိုက်သည် … ကားကို အပြင်ထုတ်လိုက်သည် … တံခါးပိတ် … သော့ခတ် … ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ … လူမရှိ … အိုကေ …
နာရီကြည့်လိုက်တော့ … ၉း၂၀ … မှီပါတယ် … ပွဲက ၉း၃၀ မှ စတာ … ထရိတ်ဒါးဟိုတယ် ဆိုတော့ … သိပ်မမောင်းရပါဘူး … အ၀င်ပေါက်နဲ့ နီးတဲ့ ကားပါကင်မှာ … ထိုးလိုက်တယ် … အိုး … မေ့တော့မလို့ …
ဖိနပ်မ၀တ်ရသေးဘူး … မြန်မာပြည်မယ် တစ်ယောက် … ခြေဗလာနဲ့ … ထရိတ်ဒါးဟိုတယ် ကိုလာတယ်ဆိုရင် … ဟိ ဟိ … ဂျာနယ်ထဲမှာ … တော်တော်ဟော့သွားပေါ့ရှင် … ခရမ်းရောင် … ဒေါက်ဖိနပ်ကို … စီးပြီး … ကားအောက် ဆင်းလိုက်တယ် … ကားနောက်ခန်းက … ၀က်ဝံရုပ်ကြီးကို …
အပြင်ထုတ်ပြီး … သယ်လကိုပါတယ် … ကျွန်မ … ပြုံးလိုက်တယ် … ကျေနပ်တယ်ရှင် … ကျေနပ်တယ် … အားလည်းအားရတယ် … ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ … ထရိတ်ဒါးဟိုတယ် ၀င်လာတော့ … လူတွေ တော်တော်စုံနေပြီ … နာမည်ကြီး မင်းသမီး … မွေ့နေ့ပွဲမို့ … ခန်းမထဲမှာ … လှပျိုဖြူတွေ … အလှတရားတွေ … ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နဲ့ … လင်းလက်လို့နေပါတယ် …
“ဟယ် … လှမြတ် … ရောက်ပြီလား … လာ … လာ … ဒီနေ့ အရမ်းလှတယ်နော် … လှမြတ်”
“မမရဲ့ … အလှတရားကို မမှီသေးပါဘူး … မမရယ် … ဟင်း … ဟင်း”
မင်းသမီးက … အဖြူရောင် ဂါဝန်ရှည်ကို ၀တ်ထားပါတယ် … မိန်းမတို့ရဲ့ … အတွင်းပစ္စည်းတွေက … အခုထိလှသေးတယ်ဆိုပေမယ့် … နည်းနည်းတော့ ကျနေပါပြီ … မိတ်ကပ်ကြောင့် … မီးရောင်အောက်မှာ … အရမ်းလှပေမယ့် … တမျိုးကြီးပဲရှင် … မင်းသမီးရဲ့ … ဖော်ဖော်ရွေရွေ … ဧည့်ခံလာတော့ … ကျွန်မ … ပြုံးပြလိုက်ပြီး … လက်ထဲက … ၀က်ဝံရုပ်ကြီးကို … ပေးလိုက်ပါတယ် …
“ဟက်ပီဘက်ဒေးနော် … မမ … ဒီထက်ပိုလှပြီး … အကယ်ဒမီတွေ … နှစ်တိုင်းရပါစေ”
“အို့ … လှမြတ်ရယ် … ကျေးဇူးနော် … ညီမလေး … ကျေးဇူး”
“ရွှတ်” ကနဲ … ကျွန်မပါးကို … သူနမ်းပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မလည်း … ပြန်နမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင် … ခန်းမထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ … လူတွေကတော့ … ၀ိုင်းကြည့်နေကြပါတယ် … နာမည်အကြီးဆုံး … မင်းသမီးနဲ့ … မယ်မြန်မာ တို့ … ဘယ်သူ ပိုလှလဲဆိုတာ … တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ … သဖန်းပိုးလုပ်နေကြပါတယ်ရှင် …
ဟင်း … ဟင်း … ဒါကလည်း … လူ့သဘာဝပဲလေ … ကျွန်မ ဘယ်ဝိုင်းမှာ ထိုင်ရင်ကောင်းမလဲ … အရှေ့ကို … လျှောက်ရင်း … လိုက်ကြည့်ရင်း … စင်မြင့်နားက VIP ၀ိုင်းမှာ … တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်နေတဲ့ … လူတစ်ယောက်ကို … တွေ့လိုက်ရပါတယ် … ဟိုလူယုတ်မာပေါ့ … အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးသေးပေမယ့် … ဒင်းမျက်နှာကို … အသဲစွဲအောင် မှတ်ထားတယ်ရှင့် … အမေကို သတ်ခဲ့တဲ့ … လူကို … မေ့စရာလားရှင် … ကျွန်မ … မျက်နှာ … ဒေါသကြောင့် … တည်သွားပါတယ် … စိတ်ထဲမှာ … သူ့ကို … ထပြီး လည်ပင်းညှစ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ … လည်ပင်းကို … ဓါးနဲ့ လှီး ပစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ် သူ့ကိုလည်း စိုက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ် … သူကလည်း … ကျွန်မတို့ကို … ကြည့်နေတော့ … အကြည့်ချင်းဆုံမိပါတယ် … ဟင်း ဟင်း … တွေ့ကြပြီပေါ့လေ … အခုချိန်မှာ … ရှင့်စိတ်တွေ ပျော်နေမှာပေါ့ … မနက်ဖြန် ရုံးတက်မှ … သိန်း ၇၀၀၀ ပျောက်နေမှန်းသိရင် … ဒေါသူပုန်ထမယ့် မျက်နှာကို … ကြည့်ချင်စမ်းပါဘိ … အတွေးကြောင့် … ကျွန်မ … ပြုံးလိုက်ပါတယ် … ဒါကို သကူ ဘာထင်သွားလဲမသိ … ဟင်း ဟင်း … ဒင်းကို ပြုံးပြတယ်များ ထင်နေလားမသိ … သူ့ဘေးမှာ … နေရာတစ်နေရာ … လွတ်နေပါတယ် … မင်းသမီးက … ကျွန်မလက်ကို ဆွဲပြီး … လျှောက်လာရင်း … အဲဒီခုံကို … ညွှန်ပြပြီး …
“လှမြတ် … ဒီမှာထိုင်နော် … ပွဲပြီးမှ ပြန်ရမယ်နော် … ဒါပဲ”
“အို … မမကလည်း … VIP ၀ိုင်းကြီးမှာ … ထိုင်ရမှာလား”
“မြန်မာပြည်ရဲ့ … အလှတပါးဆိုတာ … VIP ၀ိုင်းမှာ ထိုင်ရမှာပေါ့ကွယ် … ဟုတ်ဘူးလား”
“ဟင်း … ဟင်း … ဟုတ်ကဲ့ … မမ”
ကျွန်မ … စိတ်တော့ နည်းနည်းပျက်မိတယ်ရှင့် … ဒီလို လူယုတ်မာ ဘေးမှာ … ထိုင်ရတာ … မသတီပါဘူးရှင် … အခုတော့ … မတတ်နိုင်ဘူး … ကံတရားက … ဒီလိုမျိုး … ဇာတ်လမ်းဆင်တော့ …
ကျွန်မကလည်း … ဗျူဟာပြောင်းရမှာပေါ့ရှင့် … ဟင်း … ဟင်း … စွံ့ကားတဲ့ … တင်တွေက … ထိုင်ခုံပေါ်မှာ … အိကနဲ … ထိုင်ချလိုက်ပြီး … လူယုတ်မာကို … တစ်ချက် ပြုံးပြလိုက်ပါတယ် …
“သူက … အိမ်ခြံမြေသူဌေးကြီး … ဦးသက်အောင်တဲ့” “ဟုတ်ကဲ့ … မမ”
“သူကတော့ … ”
“မြန်မာပြည်ရဲ့ … အလှတပါး … လှမြတ်သူဇာနွယ် မလား”
“ဟင်း ဟင်း … အချင်းချင်းသိနေကြတာလား … ဒါဆို … စကားဆက်ပြောကြအုံးနော် …”
“မဟုတ် …” မဟုတ်ဘူးပြောမလို့ပါ … ဒါပေမယ့် … ကျွန်မစကားမဆုံးခင် … မင်းသမီးက … ထွက်သွားပြီ
“လှမြတ်သူဇာနွယ် … နာမည်ရော … လူရော … အရမ်းလှတယ်ဗျာ …”
“ဟုတ်ကဲ့ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်”
ကျွန်မကို … ချီးကျူးသလိုနဲ့ … ခရမ်းရောင် … အင်္ကျီလည်ဟိုက်အောက်က … ရုန်းကြွနေတဲ့ … ရင်သားတွေကို … ငမ်းငမ်းတက် … ကြည့်နေတာတော့ … မလွန်လွန်းဘူးလားရှင် … စိတ်ထဲမှာ … ဒေါသအရမ်းထွက်မိပါတယ်ရှင် … အတွင်းစိတ်ကို မပေါ်အောင် … မနည်းထိန်းပြီး … ဟန်လုပ်ကာ … ပြုံးပြရင်း … ကျွန်မရင်နှစ်မွှာကို … ပိုပြီး … ၀င့်လာအောင် … အရှေ့ကို နည်းနည်းကော့ပြီး … ထိုင်ပစ်လိုက်တယ် … ဟင်း … ဟင်း … ဒီနှာဘူးကောင်ကို … စိတ်ကြွအောင် … မရိုးမရွဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး … ပညာပေးရမယ် …
“အစ်ကိုကလည်း … ယောက်ျားချော … ချောပါတယ်နော်”
အစ်ကို … လို့ ခေါ်ပြီး … ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ … ညုပစ်လိုက်တယ် … ဟင်း ဟင်း … ရွံလိုက်တာရှင် … ရွံလိုက်တာ … အစီအစဉ်ရှိလို့သာ … ညုလိုက်ရတယ် … သူ့ကို အစ်ကို လို့ ခေါ်လိုက်လို့လား မသိပါဘူး …
“ဟား ဟား ဟား … ကောင်မလေးက … စကားတတ်တယ်နော်”
“အို … စကားမတတ်ပါဘူးရှင် … ချောလို့ ခန့်လို့ … သဘောရိုးပြောတာပါနော်”
“သူဇာလို့ ခေါ်ရင်ကော ရတယ်မှတလ်ားဟင်”
“အို … သဘောကျသလို ခေါ်ပါ … အစ်ကိုရယ် … ရပါတယ် … ဟင်းဟင်း”
သားကောင်ကတော့ … ထောင်ချောက်ထဲ … တန်းတန်းဝင်လာတာပဲ … ဟင်း ဟင်း …. ကျော့ကွင်းနဲ့ ထောင်စရာမလိုတော့လည်း … သက်သာတာပေါ့ရှင် … မိလို့ကတော့ … အသည်းကို အရှင်လတ်လတ်ခွဲပြီး … အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ပစ်မယ် … အရေခွံကို … တမျှင်ချင်း … ခွာပစ်မယ် … ဟင်း … ဟင်း …
“သူဇာက … အသားအရေလည်း … လှတယ်နော်”
“ဟုတ်တယ် … အစ်ကိုရဲ့ … ကျွန်မက … ငယ်ငယ်တည်းက … အသားအရေ … လှတယ်ရှင့်” “ဒါဆို … ဖွေးဥနေမှာပဲဗျာ”
ဘယ်နေရာ ဖွေးဥနေတာလဲ … စကားကို … အနှောင့်အသွားမလွတ် … မထိတထိ … လာပြောနေတော့ … ပါးပိတ်ရိုက်ပစ်လိုက်ချင်တာရှင် … မဖြစ်သေးဘူး … မဖြစ်သေးဘူး … စိတ်ထိန်းမှ … ဟင်း …
“အို … အစ်ကိုနော် …”
ကျွန်မ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ပြီး … မျက်စောင်းလေး ထိုးလိုက်ပါတယ် … မိန်းမမာယာထဲက … မျက်စောင်းထိုးခြင်းဟာ … တိုက်ပွဲ တရာအောင်လာတဲ့ … ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတောင် … ပျာယာခတ်ပြီး … စိတ်ကို မရိုးမရွဖြစ်စေနိုင်တဲ့ … နည်းပေါ့ရှင် … ဟင်း ဟင်း …
“ဟိုလေ … အဲဒီသဘော ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ … အသားအရေက လှတော့ … ဖွေးဥနေမှာပေါ့လို့ ပြောတာဗျာ …”
“ဟွန့် … တော်သေးတာပေါ့ရှင် … ”
“သူဇာက … ကြော်ငြာတွေဘာတွေ … တော်တော် ရိုက်နေရပြီလား”
“မရိုက်ရသေးပါဘူး … အဆက်အသွယ်ကလည်း နည်း … ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေလည်း မကြိုက်တော့ …
“ကိုယ်တို့ ကုမ္ပဏီအတွက် … ကြေငြာရိုက်ပေးနိုင်မလားဟင်”
ရိုးနေပြီ … ဒါမျိုးတွေက … ရိုးနေပြီ … တခြားမိန်းကလေးတွေလို … ငွေနဲ့ မျှားပြီး …
သွေးဆောင်ချင်တယ်ပေါ့ … မျှားပေါ့ရှင် … မျှားပေါ့ … ငါးမျှားချိတ်က အစာလာဟပ်တာ … ရှင်လား … ကျွန်မလား … သိပ်မကြာခင် သိရမှာပေါ့ရှင် …
“ဘယ်လို ကြေငြာမျိုးလဲဟင် … ပြက္ခဒိန်ကြေငြာလောက်တော့ မရိုက်ချင်ဘူးရှင့်”
“မဟုတ်ဘူးလေ … အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲတွေမှာ … သူဇာ့ပုံနဲ့ ကြေငြာချင်တယ် … အနုပညာကြေးလည်း … မနည်းစေရပါဘူး”
“အနုပညာကြေးက အဓိက မကျဘူးရှင့် … ကျွန်မက … ကျွန်မ သိက္ခာကို သိပ်တန်ဖိုးထားတယ် …
အကျင့်မကောင်းတဲ့ … ကလိမ်ကကျစ် လုပ်ငန်းတွေအတွက် … ကျွန်မ အသုံးချမခံနိုင်ဘူးရှင့်”
“ဟာ … ကိုယ်တလို့ပ်ငန်းကို … အကျင့်မကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းလို့ ဆိုလိုချင်တာလား”
“ဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူး … အခုမှတွေ့တာဆိုတော့လေ … သေချာ မသိသေးဘူးပေါ့ … အစ်ကိုရယ် … ခဏလေးနော်”
မွေ့နေ့ရှင် မင်းသမီးက … မွေ့နေ့ကိတ်လှီးမလို့ … လှမ်းခေါ်နေတော့ … ထိုင်ခုံက မြန်မြန်ထလိုက်သည် …
ကိုယ်အလှည့်မှာ … ဖွံ့ထွားတဲ့ … တင်သားကို … သူ မြင်သာအောင် … သိမ့်ကနဲ … ငြိမ့်ကနဲ … လှုပ်ယမ်းပစ်လိုက်သည် … ကျွန်မရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှတွေကြောင့် … ရင်တွေပူနေမယ်ဆိုတာ သိသားပဲ …
တင်လေးတွေကို … ပိုလှုပ်ယမ်းအောင် သွက်သွက်လျှောက်ပြီး … စင်ပေါ်တက်သွားသည် … သူက ကျွန်မနောက်က … လိုက်လာရင်း … မျက်လုံးတွေက မခွာတမ်း … ကြည့်နေတာတော့ …. သေချာတာပေါ့
“လာ … လှမြတ် … လာ”
အကုန်လုံး … ဟက်ပီဘက်ဒေးသီချင်း ဆိုပြီး … မင်းသမီးက … ကိတ်မုန့်လှီး … မုန့်ခွံ့ကြွေးကြ … အားလုံး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ … ပျော်ကြသည် … ပြီးတော့ စားကြ သောက်ကြဖို့ … ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ပြန်လာပါတယ် … ဒင်းလည်း လိုက်လာပါတယ် …
“ခုနက … ကိစ္စလေးကို … လက်ခံမှာလားဗျာ … မနက်ဖြန် … ရုံးချုပ်ကို … လာခဲ့ပါလားဟင် … သေချာ ရှင်းပြပေးတာပေါ့ … ”
“ဟုတ်ပါပြီရှင် … လာခဲ့ပါ့မယ် … အစ်ကိုက … ဘယ်အချိန်ရောက်မလဲဟင်”
“၁၀ နာရီလောက်ဆို ရောက်ပါပြီ … ၁၁ နာရီလောက် လာခဲ့ပေါ့ဗျာ … သူဇာ့ကို … နေ့လည်စာပါ ကျွေးပါ့မယ်”
“ကောင်းပါပြီရှင် … ကောင်းပါပြီ”
“ဟင့်အင်း … ကျွန်မ … အရက်မသောက်တတ်ဘူးရှင့်”
“ကိုယ် တစ်ခွက်လောက် … သောက်လို့ရတယ် မှတ်လား”
“ရပါတယ်ရှင် … သောက်ပါ … ကျွန်မ ခွင့်ပြုချက်မလိုပါဘူး … မင်းသမီးရဲ့ ပွဲပဲဟာကို …”
“ဟဲ … ဟဲ … လိုတာပေါ့ … သူဇာရယ် … သူဇာက မသောက်နဲ့ ဆို မသောက်ဘူး … သူဇာက သောက်ဆိုမှ သောက်မယ် …”
သေခြင်းဆိုးကြီး … ကျွန်မကို … လာညုနေတယ် … ကျွန်မ … ရှက်သလို … ရွံ့သလို … ပြုံးပြရင်း …
“အို … ဘာဆိုင်တာ မှတ်လို့ … ခဏလေးနော် … ဗိုက်လေးလာလို့ …”
“ကိုယ် လကိုပို့ပေးမယ်လေ …”
“ရပါတယ် … ဒီမှာပဲ စောင့်နေနော် … သူများတွေ ကြည့်နေတယ်”
“အော် … အော် … အိုကေ … မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်”
ပိုပြီးရင်းနှီးလာသလိုလို … လိုက်လျောသလိုလို … စကားမျိုးတွေနဲ့ … ကျွန်မ ထပြီး … toilet ကို ထွက်လာတယ် … နောက်ပိုင်းကတော့ … လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ပေါ့ … ဒင်း ကြည့်ပါစေ … တွေးပါစေ … ရာဂတွေ … မြူခိုးဝေနေတဲ့ … ဒင်းလို သားကောင်မျိုးကို … မိလို့တော့ … သွေးကြွေးတွေ အကုန်ပြန်ဆပ်ပစ်မယ် … ကျွန်မ toilet ထဲ ရောက်တော့ … တံခါးဂျက်ကို သေချာပိတ်လိုက်သည် … ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်ပြီး …
အထဲက … နာရီလေးကို ကြည့်လိုက်သည် …ဆေးလုံးလေးကို … ထုတ်လကိုသည် … လိင်စိတ်ကြွစေသော ဆေး … ဂျာမဏီကနေ … တကူးတက … မှာယူထားတဲ့ ဆေး … ဒီဆေးက … ချက်ြခင်း တန်ခိုးမပြ … နာရီဝက် … ၁ နာရီလောက်နေမှ … ဆေးစွမ်းပြသည် … မနေနိုင် … မထိုင်နိုင်လောက်အောင် …
သွေးသားသောင်းကျန်းစေသော ဆေး … ဆေးလုံးလေးကို … လက်သည်းခွံကြားထဲထည့်ပြီး … သေချာဖိထားလိုက်သည် … ရုတ်တရက် လကသ်ည်းကြားကနေ ပြုတ်မကျနိုင် … ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို ပြန်ပိတ်ပြီး … ဂါဝန်ကို နည်းနည်း ပြင်ဝတ်လိုက်သည် … ဟိုဆန့်ဒီဆန်ပေါ့ … လက်ချောင်းလေးကို … သေချာ ပြန်စစ်သည် … ဆေးလုံးလေးက ပြုတ်မကျ … အိုကေ …
ကျွန်မ … စားပွဲနားကို ပြန်ရောက်တော့ … သူက တစ်ခွက်ကို … သောက်နေတုန်း …
“အို … အစ်ကိုကလည်း … မြန်ပါတယ်”
“ကိုယ့်အတွက်တော့ … အရမ်းကြာတယ်ကွာ”
“ချွဲတတ်တယ်နော် … အဟင်း”
“မချွဲတတ်ပါဘူးကွာ … ချစ်တတ်တာပါ … ဟဲ … ဟဲ” ကျွန်မ … မျက်စောင်းလေး … ဒိုင်းကနဲ ထိုးပစ်လိုက်သည် … စကား လမ်းကြေင်းပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ …
“အစ်ကိုကလည်း … သောက်တာနှေးလိုက်တာ … ဒီတစ်ခွက်သောက်နေတာ … ကြာလှပြီ”
“ဟဲ ဟဲ … သူဇာ့ကို … စောင့်ရင်းသောက်နေတာ”
ကျွန်မ … သူ့အလစ်ကို စောင့်ကြည့်နေတာရှင့် … လက်ထဲက … ဆေးလုံးကို … ထည့်ဖို့ ချောင်းနေတာ … နောက်တစ်ခွက်သောက်အောင် သွေးဆောင်ရင်း … အလစ်မှာ ထည့်လကိုမှာပေါ့ … ဒီအချိန်မှာပဲ … မွေးနေ့ရှင် မင်းသမီး ရောက်လာတယ် … လက်ထဲမှာလည်း … ဖန်ခွက်ကိုင်ထားတယ် … ကျွန်မတို့ ရီရီမောမောနဲ့ … မတ်တပ်ရပ်ရင်း …
“အစ်ကိုကြီး … တစ်ခွက်သောက်ရမယ်နော်”
“သောက်မှာပေါ့ဗျာ … သောက်မှာပေါ့ … ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျား … ချီးယား”
ကျွန်မလည်း ရောယောင်ပြီး … တစ်ခွက်မြှောက်ပြီး … သောက်လိုက်ပါတယ် … အချိုရည်ပေါ့ …
ပြန်အထိုင်မှာ … လှစ်ကနဲ … ဆေးလုံးလေးကို … ထည့်လိုက်ပါတယ် …
“မွေးနေ့ပွဲကို လာကြလို့ … ကျေးဇူးတင်တယ်နော်”
“ဟာဗျာ … တစိမ်းတွေမှ မဟုတ်တာ … လာရမှာပေါ့ဗျ”
“လှမြတ်ကိုလည်း … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်”
“ဟုတ်ကဲ့ … မမ … ဒီထက့်ပိုလှပြီး … အကယ်ဒမီတွေ အများကြီးရပါစေ”
“အုိ့ … ဟို့ … ဟို့ … လှမြတ်က … ပြောတတ်လိုက်တာ”
ရွှတ်ကနဲ … ကျွန်မပါးကို နမ်းလိုက်ပါတယ် … အင်း … မွေးနေ့ပွဲဆိုတော့ … စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ ပျော်မိပါတယ် …
“အို … တကယ်ပြောတာပါ မမရဲ့”
“အိုကေ … အိုကေ … အေးအေးဆေးဆေး စားအုံးနော်”
ကျွန်မ ပြန်ထိုင်ပြီးတော့ … ခုနက ခွက်လေးထဲကို … ရေခဲထည့်တယ် … ဆိုဒါ နည်းနည်းထည့်တယ် … သူ မြင်သွားမှာ စိုးလို့ … သွက်သွက်လုပ်ပြီး … အရက်များများ ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … ဆေးလုံးလေးက … ဆော်ဒါနဲ့ အရက်ကြားမှာ … ပျော်သွားရှာပြီ … ဒင်းသောက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ် …
“အစ်ကိုလည်း … တော်တော်သောက်နိုင်တယ်နော်”
“အင်း … သိပ်တော့ မသောက်နိုင်ပါဘူး … ကိုယ်က … အများဆုံး သုံးခွက်ပဲ … သောက်တယ်” “အစ်ကို … သူများတိုက်တာတော့ သောက်တယ် … ဒီတစ်ခွက်လည်းသောက်ရမယ် … ဒါပဲ” ကျွန်မ … သူ့အရှေ့ကို ခုနက အရက်ခွက်ကို … တွန်းပို့လိုက်သည် …
“ဟဲ … ဟဲ … ဒါတော့”
“အို … သူများတိုက်တာတော့ … သောက်တယ် … လှမြတ်တကိုတာကျတော့ … ဟွန့်”
“အောင်မြတ်လေးဗျာ … ရွှေစိတ်တော် မညိုပါနဲ့ဗျာ … သောက်မှာပေါ့ … သောက်မှာပေါ့” “ဒါဆို … အမြန် သောက်ပြ”
ဟင်း ဟင်း … ကျွန်မ … ပြုံးလိုက်တယ် … သဘောကျလွန်းလို့ ပြုံးလိုက်တယ် … ယောက်ျားတွေများ … မိန်းမချောချောလှလှလေးခိုင်းရင် … နဖားကြိုးတောင် အထိုးခံမယ့် ဟာတွေ … ဒင်းလို … နှာဘူးက … ပိုဆိုးတာပေါ့ … အရက်ကို … တရစပ်သောက်လိုက်ပြီးနောက် … သူ့မျက်နှာက ပိုပြီး နီလာတာပေါ့ရှင် … ဒီလိုနဲ့ … ထမင်းစားလိုက် … သူနဲ့ အလိုက်သင့် … အီစီကလီ … စကားပြောလိုက် … နာရီဝက်လောက်နေတော့ … ပြန်တဲ့လူက ပြန်ကုန်ကြပြီ …
“ပြန်ကြမယ်လေ … နော် … အစ်ကို”
ကျွန်မတို့ … မင်းသမီး … မမ ကို နှုတ်ဆက်ပြီး … ကားပါကင်ဆီလျှောက်လာရင်း …
သူ့တပည့်တစ်ယောက်က … ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ် … မသင်္ကာလို့ ကြည့်တာလား … သိပ်လှတဲ့ ကျွန်မကို … စားချင်ဝါးချင်လို့ ကြည့်တာလား … ဂရုမစိုက်ပါဘူး …ဒီလိုကောင်တွေကိုတော့ … ကျွန်မ … ကားရီမုတ်ကို … နှိပ်လိုက်တော့ … ကားက စက်နှိုးပြီးသား … တံခါးဂျက်တွေ ပွင့်သွားသည် … နှာဘူးကြီးက … သူ့တပည့်တစ်ယောက်ကို …
“ဟေ့ … တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်လေ”
ကားတံခါးကို … သူ့တပည့်တစ်ယောက်က … ပျာပျာသလဲ ဖွင့်ပေးလို့ … ကျွန်မ ကားထဲကို …
၀င်ထိုင်လိုက်သည် … “ကျေးဇူးနော်”
တံခါးကို သေချာပိတ်ပြီး … သူက နောက်ဆုတ်သွားသည် … နှာဘူးကြီးက … အနားကို ရောက်လာသည် … ကားထဲကို ခေါင်းငုံပြီး … ကျွန်မကို … ရီဝေေ၀အကြည့်နဲ့ ကြည့်သည် … ကျွန်မမျက်လုံးကိုကြည့်တာထက် … ကျွန်မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို … အပေါ်စီးကနေ … သွားရေယိုရင်း …
“သူဇာနဲ့ … အေးအေးဆေးဆေး … နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ချင်တယ် … သူဇာရယ်”
ဘေးနားက … လူတွေကိုမှ … အားမနာ … ကာမတဏှာကြောင့် … အရှက်တရားမရှိ … လိုချင်တာသာ သိတဲ့ … ခွေးတိရစ္ဆာန် … ရွံလိုက်တာရှင် … ထွီ … ဒါပေမယ့် … ပါးစပ်ကတော့ …
“အို … အစ်ကိုနော် … နောက်မှ … ဟွန့်” ကျွန်မ … ကားကို … ၀ူးကနဲ … မောင်းထွက်ပစ်လိုက်သည် …
ဟား ဟား ဟား … စိတ်ကြွဆေးရယ် … ကျွန်မ အလှရယ်ကြောင့် … ဒင်း … တည့်တည့်ကြီး …
ထောင်ချောက်ထဲ ၀င်လာတာ … ဟား ဟား ဟား … မိလို့ကတော့ရှင် … လက်စားချေမယ့် … အတွေးတွေက … လီဘာကို အဆုံးနင်းပစ်လိုက်တယ် … မာစီဒီးကားက … သခင်မရဲ့ အလိုကျ …
ဝေါကနဲ … ဝေါကနဲ … အရှိန်တအားမြန်လာသည် … ဒိုင်ခွက်က မြှားလေးက … ၄၀ … ၆၀ … ၈၀ … ၁၀၀ …
ဦးဝိဇာရလမ်းလယ်က … သစ်ပင်ကြီးတွေက ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲ … ကျန်ခဲ့သည် … အိမ်ပြန်ရောက်တော့ …
ဒေါ်လေးမေ … တံခါးလာဖွင့်ပေးသည် … အိမ်မှာက … ဒေါ်လေးမေနဲ့ ကျွန်မ နှစ်ယောက်ထဲနေသည် … တခြား အဖော်မထား … ဒေါ်လေးမေက ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်မကြိုက် … လက်စားချေမယ့် ကိစ္စကြောင့် … ပါးစပ်ပွမှာလည်း ကြောက်သည် … ကားကို ဂိုဒေါင်ထဲထည့်ပြီး … တံခါးပိတ်လိုက်သည် … နောက်ဖုံးကို ဖွင့်ပြီး … ဒေါ်လေးမေကို ပြလိုကသ်ည် …
“တော်တော် ပင်ပန်းသွားပြီလား … သမီး”
“မပင်ပန်းပါဘူး … ဒေါ်လေးရဲ့ … ပျော်နေတာ … ဟဲ ဟဲ”
“အထုပ်တွေက များလိုက်တာ …”
“၁၄ ထုပ် ဒေါ်လေး … သိန်း ၇၀၀၀”
“သိန်း ၇၀၀၀ တောင်”
“ဟုတ်တယ်လေ … ဒေါ်လေးရဲ့ … ပိုက်ဆံတင်မကဘူး … စာရွက်တွေလည်း …
“ကောင်းတယ် … ကောင်းတယ် … သမီး သိပ်တော်တယ်”
“သမီးက မတော်ပါဘူး … ဒေါ်လေး စီစဉ်ပေးတာ တော်လို့ပါ … ဒေါ်လေးက … အကုန်သိနေတယ်နော်” “သိရမှာပေါ့ကွယ် … မသိသိအောင် ကြိုးစားထားတာ … ၁၈ နှစ်လောက် စိတ်ဒုက္ခရောက်ခံထားတာ …
လက်စားပြန်ချေမှ … ကျေနပ်မယ် ဟေ့”
“ဒေါ်လေး တစ်ခုတော့ သမီးကို ဂတိပေးရမယ် … ဒင်းကို မိလို့ကတော့ … သမီးလက်နဲ့ … ဒင်းကို … အရေခွံခွာပစ်မယ်”
“အို … လုပ်ရမှာပေါ့အေ့ … လုပ်ရမှာပေါ့ … အခုတော့ … သွားနားချည်တော့ … ပင်ပန်းနေပြီမှတ်လား …
ဒေါ်လေး ဒီအထုပ်တွေ … သွားသိမ်းလိုက်မယ်”
“မြန်မြန်သိမ်းပြီးမှပဲ … အိပ်တော့မယ်”
ကျွန်မနဲ့ ဒေါ်လေး … ပိုက်ဆံတွေကို … ထုတ် … သစ်သားဘီဒိုကြီးတစ်ခုထဲမှာ … အစီအရီ ထည့် … ဒီလောက်များတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို … တခြားအချိန်မှာ ပျော်မိပေမယ့် … ဟိုလူယုတ်မာဆီက …
ပိုက်ဆံမို့လို့လားမသိ … မကိုင်ချင် … နည်းနည်းတော့ ရွံသည် … မြန်မြန်ပြီးအောင် … သွက်သွက်လုပ်ပြီး
… လူတစ်ကိုယလ်ုံးလည်း … ချွေးတွေနဲ့ … ကပ်စေးစေးမို့ … ရေချိုးဖို့ … ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လိုက်ပါတယ် …
ရေချိုးဇလားထဲ … ရေပူရေနွေး ဖြည့်ထားပြီး … ပန်းပွင့် … လက်တဆုပ်လောက်ကို … ကျဲလိုက်ပါတယ် …
ရေပြည့်ဖို့ အချိန်နည်းနည်းလိုသေးတာမို့ … သီချင်းအေးအေးလေး တစ်ပုဒ် ဖွင့်လိုက်ပါသည် …
ရေချိုးဇလားက … ရေပြည့်တော့မှာမို့လို့ … အင်္ကျီချွတ်ပြီး … အထဲမှာ ၀င်စိမ်လိုက်သည် …
“အို … ဟာ”
နွေးထွေးတဲ့ ရေအထိအတွေ့ကြောင့် … နည်းနည်းတော့ သဘောကျသွားသည် … လက်ကို ရေထဲ နှစ်လိုက်ပြီး … လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို … ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက်သည် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ပင်ပန်းနေတာတွေ ရုတ်ချည်းဆို … လျော့သွားပါတယ် … တစ်ကိုယ်လုံး မြုပ်အောင် ထိုင်လိုက်ရင်း … ခေါင်းလေးကို … အလိုက်သင့်လေး … မှီလိုက်ပါတယ် … ဘောင်ပေါ်က … အ၀တ်နုလေးကို ယူပြီး … ဆပ်ပြာရည်နည်းနည်း … ထည့်လိုက်သည် … ရေစိုနေတဲ့ … လက်မောင်လေးတွေကို … အ၀တ်နုလေးနဲ့ ပွတ်တယ် … ဘယ်ပြီးတော့ … ညာ … လက်မောင်းပြီးတော့ … လည်ပင်း … ရွှေလည်တိုင်
ကျော့ကျော့လေးကို … သေချာပွတ်တယ် … ချွေးစေးတွေကပ်နေလို့လား မသိပါဘူး … ပြောင်သွားအောင် ပွတ်တယ် … ဒါပြီးတော့ … ဟင်း … ရင်နှစ်မွှာ … ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက … ရေထဲမှာ … မပေါ့်တပေါ် … လုံးကျစ်တဲ့ … ရင်သားကို … ဖွဖွလေး … ကိုင်ပြီး … အ၀တ်နုလေးနဲ့ … ပွတ်လိုက်တယ် …
“အို … ဟင့် …”
ရင်နှစ်မွှာက … အထိမခံနိုင်လောက်အောင် … ဖောင်းကြွနေသည် … အ၀တ်နုလေး လာထိလိုက်တာနဲ့ … သူ့အလိုလို … ကော့လာသည် … ပတ္တမြားနို့ခဲလေးကို … အ၀တ်နုလေးနဲ့ … ဖွဖွလေး ပွတ်ရင်း … မသိမသလေး ချေပေးလိုက်သည် …
အထိအတွေ့က … ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကာမစိတ်ကို … နှိုးဆွနေသည် … ကျွန်မ မနေနိုင်ဘူးရှင် … ဒီအထိအတွေ့ကို … ကြုံဘူးပြီးကတည်းက … ထပ်ထပ်ပြီးတော့ ခံစားချင်နေတယ် … နို့ခဲလေးကို … ပိုပြီး … ဖိချေလိုက်တော့ … နို့ခဲလေးက … ပိုလို့တောင် ထောင်လာပါတယ် … ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားက … ယားယံလာတဲ့ ဒဏ်ကို … တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ … ကျွန်မ ဖင်လေးက … တကြွကြွဖြစ်နေပါတယ် … အို … လက်ကလေးက … ပေါင်ကြားထဲကို … အလိုလို ရောက်သွားပါတယ် … ဆီးခုံမို့မို့ကို ကျော်ပြီး … ထိပ်ဝလေးကို နှိုက်လိုက်တာနဲ့ … အို ရှင် … တစ်ကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးသွားအောင် … ခံစားချက်က ပြောမတတ်အောင်ပါပဲ … နှုတ်ဖျားလေးက … အသံထွက်ပြီး ငြီးရလောက်အောင် … ကောင်းတယ်ရှင့် … ထကြွလာတဲ့ကာမပိုးက … သွေးကြောတစ်လျှောက် … တရွရွနဲ့ လျှောက်သွားနေတော့ …
ရတနာရွှေကြုပ်လေးက … ပွစိပွစိ ဖြစ်လာပါတယ် … ၀င်မလာသေးတဲ့ … လက်ဖျားလေးကို … ဖမ်းညှစ်ချင်လို့ တူပါရဲ့ … အတင်းပဲ … ကော့ကော့ပေးနေတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ …
လက်ဖျားလေးက … ရတနာဖူးလေးကို … ထိမိလိုက်တာနဲ့ … ကာမစိတ်တွေက ဟုန်းကနဲ … ထကြွလာပါတယ် … အို … ရှင် … ပန်းရောင်လှိုဏ်ခေါင်းလေးထဲက … ချစ်ရည်ကြည်တွေကလည်း … တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ယိုစီးလို့နေပါတယ် … ရေထဲမှာ တစ်ကိုယ်လုံးစိမ်ထားပေမယ့် … ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ … ရမက်ကြောင့် ပူလောင်နေပါတယ်ရှင် … စားဖူးတဲ့ကလေးက ပိုငတ်ပဲဆိုဆို … ဒီအတွေ့အထိကို သာယာမိတာအမှန်ပါပဲရှင် … ပန်းဖူးလေးကို … ကလိမိတာနဲ့ … စိတ်ကူးလေနှင်ရာ … မြူခိုးတွေ လွင့်သလို … ခံစားချက်တွေက … နတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုပါပဲရှင် … ပန်းဖူးလေးကို … ပွတ်တဲ့အရသာကို … တသသဖြစ်နေတဲ့ … ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးတွေကို … လျှာလေးနဲ့ သပ်ပေးရင်း … တစ်ယောက်ထဲ မနေတတ် မထိုင်တတ်ဖြစ်နေပါတယ် … အတွေးတွေက ကယောက်ဂယက်နဲ့ … စိတ်ကူးထဲကို … ဟိုမင်းသားလေး ရောက်လာလိုက် … ဒီမင်းသားလေး ရောက်လာလိုက် … ဟင်း … ဟိုနေ့က ချာတိတ်နဲ့ဆို … အို …
ဟုတ်တယ် … မနက်စောစော ကျွန်မထပြေးတိုင်း … နောက်ကနေ လိုက်ကြည့်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ အကြည့်တွေက … ဘာလိုချင်တာလဲဟင် … တကယ်ချစ်တာလား … ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ချင်တာလား … အို …
သူလာပြီ … ရေကန်ထဲကို … သူဝင်လာတယ် … သူလေ … သူ … တအားဆိုးတယ် … ကျွန်မရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို … ဖွဖွလေးပွတ်တယ် … ဖိတယ် ချေတယ် …
“ဟာာာ … ဟာာာ”
ကောင်းလိုက်တာရှင် … အတွေးထဲက မင်းသားလေးကြောင့် … ကျွန်မ စိတ်တွေ ပိုထန်လာပါတယ် …
ပေါင်တစ်ချောင်းကို … ရေကန်ဘောင်ပေါ်တင်လိုက်တော့ … ပေါင်နှစ်ချောင်းက ပိုကားသွားသလို … ရွှေကြုပ်လေးထဲက … ပန်းဖူးလေးက … ပိုလို့တောင် ကော့ထောင်လာပါတယ် … ကျွန်မစိတ်တွေ အရမ်းကြွပြီ ထနေတော့ … ပန်းဖူးလေးကို … ညှစ်ပြီး … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … အောက်ကနေ ကော့တင်ပေးနေတဲ့ … တင်ပါးကြီးတွေက … ပြန်မကျနိုင်လောက်အောင် … ကောင်းတယ်ရှင် … ထိတယ်ရှင် … ထိတယ် … ခံစားချက်တွေက အရမ်းပြင်းတာမို့ … တိုးတိုးလေး ငြီးနေရာကနေ … အော်ပစ်လိုက်တယ်ရှင် …
“အွန် … ဟင့် …. ဟာာာာာာ … ဟာာာာာာာာ”
မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ … အချစ်ရည်တွေက ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် … ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေတဲ့ကြားက … ခံစားချက်ကတော့ … ပြန်မပြောတတ်အောင် … ကောင်းလိုက်တာ … ဟင်း … လူတစ်ကိုယလ်ုံး မလှုပ်ချင်လောက်အောင် … မိန်းမောနေလို့ … ခဏလေးမှေးနေလိုက်ပါတယ် …
ခဏနေတော့ … တစ်ကိုယ်လုံး အေးလာလို့ … မထချင် ထချင်နဲ့ … ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပါတယ် … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ … ရေတွေသုတ်ပြီး … ည၀တ်အင်္ကျီဝတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို … ပစ်လှဲပစ်လိုက်ပါတယ် … ရေစိုနေတဲ့ … ဆံပင်ရှည်ကို … သုတ်ချင်စိတ်မရှိတော့လောက်အောင် … ပင်ပန်းနေလို့ … ရေစိုလက်စနဲ့ အိပ်ပစ်လိုက်ပါတယ် … ညတုန်းက လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လို့ ပင်ပန်းတာရယ် … အသွေးအသားထဲက ကာမဆန္ဒတွေ ပြည့်သွားလို့ … အားလျော့သွားကြောင့် … မျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ … အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ် …
ဦးသက်အောင် … ၀ူးကနဲ မောင်းထွက်သွားတဲ့ … လှမြတ်သူဇာနွယ် ဆိုတဲ့ … နတ်မိမယ်လေးကို …. အရမ်းသဘောကျသွားသည် … ဒီကောင်မလေးရဲ့ … ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းက … ၃၂-၂၄-၃၆ …
မော်ဒယ်ဆိုဒ်မဟုတ် … လှယဉ်ကျေးမယ်ဆိုဒ် … တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆိုပေမယ့် …
ဒီကောင်မလေးလိုမျိုး … အချိုးကျဖို့ မလွယ် … အသက်က ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ … ဘူးသီးနုနု … ဖွံ့ဖြိုးစ အရွယ် … မြင်လိုက်တာနဲ့ … စိတတွေ ထကြွလာအောင် … လှတဲ့ကောင်မလေးကို … ချစ်ချင်တယ် …
ချစ်ချင်တယ်ဆိုတာထက် … အိပ်ချင်တယ် ဆိုတာက … ပိုမှန်သည် … အိပ်ယာထဲမှာ … မိန်းမတွေက အတူတူပဲ … ဆိုတဲ့ အယူအဆက … မမှန်ဘူးဗျ … မြင်လိုက်တာနဲ့ … ရမက်ထန်စေတဲ့ … ဒီလိုကောင်မလေးနဲ့ … တစ်ညလောက် အိပ်ပစ်လိုက်ရင် … ဟား … အရမ်းလှတဲ့ … ညလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ … ဒီည ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ … ရင်ထဲမှာ … အရမ်းကို … ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေတယ် … ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေတယ် ချာတိတ်ရေ … ဟင်း … အခုတော့ … ဒင်းလေးနဲ့ ချစ်လို့မရသေးဘူး … ချစ်လို့ရတဲ့ …
ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်ဆီ သွားမှ … ဟာ … မေ့နေလိုက်တာ … ဒီည … သူ့ကို အိမ်မှာ စောင့်ခိုင်းထားတယ် … မြန်မြန်ပြန်မှ … ကားမောင်းတဲ့ ကောင်ကလည်း နှေးလိုက်တာ …
“ဟေ့ကောင် … မြန်မြန်မောင်းစမ်းပါကွ” “ဟုတ်ကဲ့ … ဆရာ … ဟုတ်ကဲ့”
ဒီကောင်က … ဆရာ့အထာကို နပ်သည် … ကားကို မိုင်ကုန်မောင်းပစ်လိုက်သည် … အိမ်ရောက်တော့ … တပည့်တစ်ယောက်က …
“ဆရာ … ဟို … မမ ရောက်နေတယ်”
“အိုကေ … ငါသတိယ် … ကားသိမ်းလိုက်တော့ … ခြံတံခါးတွေ သေချာပိတ်ထား”
“ဟုတ်ကဲ့ … ဆရာ”
အိမ်ပေါ်ထပ်ကို … အပြေးတက်လာမိသည် … ဟင်း … ရင်ထဲက … ဆန္ဒတွေကြောင့် … သွေးကြောတွေ ပေါက်ကွဲ ထွက်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့ …
အိပ်ယာပေါ်မှာ … နတ်သမီးလေးတစ်ယောက် … ပါးလွှာတဲ့ … ည၀တ်ဂါဝန်လေးအောက်မှာ … မို့မောက်တဲ့ တင်သားတွေက … တောင်တန်းကြီးတွေလိုပါပဲ … သိမ်သွားတဲ့ … ခါးလေးက …
ကိုင်ဆောင့်ချင်စရာ … ဂါဝန်လေးက … တိုတိုလေးမို့ … ချာတိတ်ရဲ့ အလှတရားတွေကို
လုံအောင်မဖုံးနိုင်ပါဘူး … ဖြောင့်တန်းတဲ့ … ပေါင်တံနှစ်ခုက … ဆင်စွယ်နှစ်ချောင်းပမာ … လှဝင်းနေသည်
… မပေါ်တပေါ်ဖြစ်နေတာက … ချာတိတ်ရဲ့ ပန်းလေး … ချာတိတ်က … အနေအထိုင် ပက်စက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ … တမင်သက်သက် … သွေးဆောင်နေတာ … မြင်တာနဲ့ … လူကို … ချစ်ချင်လာအောင် … ဖျားယောင်းတဲ့ … မိန်းမလက်နက်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ … ဟား ဟား … အမို့အမောက်တွေက … ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လေ … အရင်နေ့တွေက … ဒီလိုမျိုး …
စိတ်ကြွအောင်လုပ်မှ … လုပ်ချင်တာ … ဒီနေ့တော့ … မဟုတ်ဘူးဗျ … အရမ်းလှတဲ့ … သူဇာကြောင့် ကျွန်တော် သွေးဆာနေတာ … မပေါ့်တပေါ်တွေက … စိတ်ရိုင်းတွေကို ထကြွစေတယ်လေ …
“အစ်ကို … နောက်ကျတယ်နော် … မီးစောင့်နေတာ ကြာလှပြီ … ဟွန့်”
“ဆောရီးပါ … ချာတိတ်ရယ်”
ခပ်ညုညုလုပ်နေတဲ့ … ချာတိတ်မလေး … ခဏနေ … ညုနိုင်ပါ့မလား … ကြည့်ရသေးတာပေါ့ … မွေ့ယာပေါ်ကနေ … ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ … ချာတိတ်မလေးကို … ငုံ့ပြီး နမ်းပစ်လိုက်တယ် … နှုတ်ခမ်းလေးက … ချိုလိုက်တာဗျာ … လက်ကလည်း … ဟိုဖက် … ဒီဖက် … ဟိုကိုင် … ဒီကိုင်ပေါ့ …
ည၀တ်ဂါဝန်လေးအောက်က … ပစ္စည်းတွေက … မို့မောက်လွန်းတယ်ဗျာ … တစ်မိနစ်လောက် နမ်းပစ်လိုက်တော့ … အောက်က ချာတိတ်မလေးက … ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ် …
“အို … အစ်ကိုနော် … တွေ့တာနဲ့ ဒါပဲလုပ် … ဟွန့်”
“အရမ်းချစ်တာကိုး … ချာတိတ်ရဲ့”
“ချာတိတ် … ချာတိတ်ဆိုပြီး … အရမ်းလုပ်တာကိုတော့ ကြောက်တယ် … အစ်ကိုရယ်”
“အိုး … တော်ပါ”
“အိုး … ရှက်လွန်းလို့ သေတော့မယ် … မနေ့ကတုန်းက … အစ်ကို အရမ်းဆိုးတယ်”
“ချာတိတ်ရဲ့ အဖုတ်က … စီးနေတာပဲနော် … အောက်ကနေလည်း … ကော့ပေးတယ်”
“ဟိတ် … တော်ပြီ အစ်ကိုနော် … ဟွန့်”
ချာတိတ်မလေးက … ရှက်လွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်တော် ဖက်ထားတဲ့ ကြားက … ရုန်းထွက်ပြီး … မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာ … ဖွက်ထားတယ် … ဖင်လေးက ထောင်လို့ပေါ့ … ဟား ဟား …
ကော့ထွက်နေတဲ့ … ဖင်နှစ်လုံးက … လုံးကျစ်နေသည် … ချာတိတ်ဆိုပြီး … လျော့တွက်လို့မရ …
ပစ္စည်းက တောင့်သည် … ဖင်လေးကို … ဆွဲမလိုက်ပြီး … ကားကနဲ ဖြစ်သွားတော့ … ဖင်နှစ်လုံးကြားက ဖြူမို့မို့ …ေ-ာက်ပတ်လေးက … ဖောင်းကားနေသည် … အ၀လေးက နည်းနည်းလေးသာ ဟသည် … နီနီရဲလေး အကွဲကြောင်းလေးကို … တွေ့တာနဲ့ … မစဉ်းစားတော့ဘူး … စိတ်က တအားထန်နေတာမို့လို့ …
နှုတ်ခမ်းသားကစ်ကစ်လေးကို … ဆွဲဖြဲပြီး … လက်ညှိုးကို … တဆုံးထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … နာတယ် … နာတယ်”
အစိမ်းသက်သက်ကြီး … ထိုးချလိုက်တော့ … ချာတိတ်မ ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ်လေ … ဘယ်ရမလဲ … ရုန်းမအောင် … ခါးကို … အတင်းဖိထားတော့ … ထလို့မရ … ကြပ်စေးနေတဲ့ …
အဖုတ်လေးထဲ … လက်ညှိုးလေးကို … ညှစ်နေတာများ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … တင်းနေတာပဲ … လှုပ်လို့မရအောင် ညှစ်ထားတား … ဒီချာတိတ်မလေးက … နည်းနည်းလောက် နမ်းပစ်လိုက်ရင် … အရည်တွေက … ရွှဲနေပြီ … ကောင်းမှာပေါ့ဗျာ … ဒီချာတိတ်မလေးက … ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ … ပါကင်ဖောက်ထားတာလေ … ပါကင်ဖောက်တဲ့နေ့ကဗျာ … ဟာဗျာ … အတွေးတွေက … စိတ်ကို အဆုံးစွန်ထန်စေတော့ … လက်ညှိုးလေးနဲ့ … ခပ်ပြင်းပြင်းလေး မွှေပစ်လိုက်တယ် …
မွှေရတာခက်လိုက်တာဗျာ … ဖင်ကို အတင်းရှုံ့ထားတော့ … ခရေပွင့်လေးက … သေးသေးလေး ကြုံ့နေသည် … ဘယ်ရမလဲဗျာ … ခရေပွင့်လေးကို … ၀လုံးလေး ရေးပေးလိုက်တော့ … အဖုတ်က ညှစ်ထားတာ … လျော့သွားသည် …
“အား … အစ်ကိုရေ … ဟင့် … ဟင့်”
ရုန်းလို့မရမှန်းသိတော့ … မရုန်းတော့ … ဒါပေမယ့် … ဖင်လေးကို … စကောဝိုင်းလို …
ကော့ကော့ပစ်လိုက်တယ် … ကြိုက်တယ် … ဒါမျိုးမှ … ကြိုက်တာဗျ … အောက်ပေးကောင်းတယ်ဗျာ … ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်နဲ့ … ဒီနားလေးက … အလုံးတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ် … အင်း … ဂျီစပေါ့လို့ ထငတ်ာပဲ … ခပ်သွက်သွက်လေး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ … လက်ကိုညှစ်ထားတာများဗျာ … ပြုတ်ထွက်မတတ်ပဲ …
“အိုး … အစ်ကို … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ”
“အိုး … ဟာာာ …. ဟင့်”
“ကောင်းတယ် အစ်ကိုရယ် … အရမ်းကောင်းတယ်”
“အင်း … ကြိုက်တယ် … ကြိုက်တယ် … လုပ်ပါတော့ အစ်ကိုရယ် … မီးမနေတတ်တော့ဘူး”
ချာတိတ် … ခေါင်းလေးလှည့်ကာ … ကျွန်တော့်ကို လှည့်ပြီး ပြောနေပုံလေးက … ချစ်စရာ …
ကျွန်တော်လည်း … တအားလုပ်ချင်နေတယ်ဗျာ … လက်ညှိုးကို … ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ … အဖုတ်လေးက … အတင်းညှစ်ထားတယ် … မလွှတ်ချင်ဘူးထင်ပါရဲ့ …
“အိုး … အစ်ကိုနော် … ဟင့်” ချာတိတ် ရှက်သွားလို့ထင်ပါရဲ့ … မျက်နှာ ပြန်ငုံ့သွားပြန်တယ် … ပြန်ထွက်လာတဲ့ လက်ညှိုးမှာ … အရည်တွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတယ် … ချာတိတ်မလေးက … ဒါတစ်ခုတော့ ကောင်းတယ် … အဖုတ်ထဲက … အရည်တွေက ညှီနံ့မနံဘူး … သင်းသင်းပျစ်ပျစ်လေး …
အ၀တ်တွေကို … အမြန်ချွတ်ပြီး … သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ … နေရာယူလိုက်တယ် …
အောက်ကကောင်က … ထောင်နေတာပဲ … မနေတတ်တော့ဗျာ … နီနီရဲရဲ စိုရွှဲနေတဲ့ … အကွဲကြောင်းလေးထဲ … ဒ-်ဖျားကို … တေ့လိုက်တယ် …
“အိုး … အစ်ကိုရယ် … ဖြေးဖြေးနော် … ဟင့်”
ဖြေးဖြေးလေး ဆိုတာ … ကျွန်တော် မလုပ်တတ်ဘူးဗျ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ရမှ … အားရတယ် … ကျေနပ်တယ်ဗျ … ဒ-်ဖျားလေးက … အထဲဝင်တယ်ဆိုရုံလေးရှိသေးတယ် … မီးလေးရဲ့ … အဖုတ်က … အတင်းကို … ဖမ်းညှစ်ပစ်တော့တာပဲ … ကြာတယ်ဗျာ … ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … အရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေတော့ … သိမ့်ကနဲ ၀င်သွားတယ် … ချောချောမွေ့မွေ့တော့ ဟုတ်ဘူး … ဒုန်းကနဲ ဆောင့်ပစ်လိုက်တော့ … ဖင်ကုန်းပေးနေတဲ့ … ချာတိတ်မ … အရှေ့ကို … ငိုက်ကနဲ တိုးသွားသည် … “အိုး … အမေရေ … နာတယ် … အစ်ကိုရယ် … တအားမလုပ်ပါနဲ့ဆို …”
ချာတိတ်မလေး … မျက်ရည်လေးတောင် ၀ဲသွားသည် … ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ … ဂေါ်လီ ၈ လုံးထည့်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင် … ၀င်ချက်က ပြင်းတာကိုး … နုနုထွတ်ထွတ် အတွင်းသားလေးကို … ဖြဲကားပြီး ၀င်သွားရုံမကဘူး … ဂေါ်လီတွေက … ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ဆွဲသွားတော့ … သေမတတ်နာသွားမှာပေါ့ … နာပလေ့စေ … ဒီအချိန်မှာ မညှာနိုင်ဘူး … မိန်းမဆိုတာမျိုးက … အဖုတ်ကွဲအောင် –ိုးမှ … အသည်းစွဲအောင် ချစ်မှာ … ဟား ဟား ဟား …
“အား … ဟာာ … ဟာာ … ဟင့် … ဟင့် … နာတယ် … နာတယ် … အဲဒီလို မမွှေနဲ့လေ”
အဖုတ်လေးက … ကြပ်လွန်းတော့ လုပ်ရခက်တယ်ဗျာ … နည်းနည်းချောင်သွားအောင် … မွှေပစ်လိုက်တယ် …
“ဟင် … ဟင့် … အို … အို … အစ့်ကို … အစ့်ကို … ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ အစ်ကိုရယ် … အရမ်းနာတယ် …
ရေနစ်သူတစ်ယောက်လို … ဆွဲမိဆွဲရာ … ခေါင်းအုံးလေးကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားရင်း … အနောက်ကနေ … ဆောင့်သမျှ … မီးလေး ခံနေရှာတယ် … စက်သေနတ်လို … အဆက်မပြတ် …
ဆောင့်တာခံရတော့ … နားထင်တွေတောင် ပူထူပြီး … မျက်နှာတွေ နီရဲလာတယ် … မသနားနိုင်ဘူးလေ … အရှိန်က အရမ်းကောင်းနေပြီမို့ … ခါးကို ကိုင်ပြီး … အနီးကပ် ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … သုံးစက္ကန့်ကို နှစ်ချက်နှုန်းနဲ့ ဆောင့်တော့ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … အဖုတ်ထဲက … အရည်တွေက … ဒလဟောပေါ့ …
ချာတိတ်မလေးက … ကြောက်လွန်းတာလား … ကောင်းလွန်းတာလားမသိဘူးဗျာ … ကျွန်တော့်ဟာကို … ညှစ်ထားတာများ … သားရေကွင်း သုံးပင်နဲ့ စည်းထားသလိုပဲ … စီးနေတာ … ဆောင့်လိုက်တိုင်း … အရှေ့ကို နည်းနည်းရောက်လိုက် … အနောက်ကို … ပြန်ကော့ပေးလိုက်နဲ့ … ဒီကောင်မလေးတော့ ဟုတ်နေပါပြီ … နာတယ် … နာတယ်ဆိုပြီး … အတင်းနောက်ကို ဖင်ကော့ပေးနေတာ … အခါ ၅၀ လောက်လည်း ဆောင့်ပြီးရော … မီးလေး အရမ်းထန်လာပါတယ် … ကျွန်တော့် ဦးဆောင်မှုကို … အားမရလို့ ထင်တာပဲ … အတင်း နောက်ကို … ပစ်ပစ်ဆောင့်တယ် … ကြိုက်တယ်ဗျာ … ကိုယ်က … ဆောင့်စရာမလိုပဲ … သူ့ဟာနဲ့ ညှစ်ပြီး … ဆောင့်တာများ … ကောင်းလိုက်တာ … အသံထွက်ပြီးတောင် ငြီးမိတယ် … သူ့ခါးကို … ကိုင်ထားတာ လွှတ်ပေးလိုက်တော့ … ဇောင်းကလွှတ်တဲ့ မြင်းလိုပဲ … ဆောင့်ရှာတယ် … –ီးကလည်း … ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ့ … ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် … ငြီးသံတွေကလည်း … ဆူညံနေတာပဲဗျာ …
“ဟင် … ဟင့် … အို … အို … အစ့်ကို … အစ့်ကို …”
“အရမ်းကောင်းတယ် … အစ်ကိုရယ် … လုပ်ပါ … လုပ်ပါ …”
လုပ်ပါ … လုပ်ပါဆိုပြီး … သူချည်းပဲ လုပ်နေတာ … ဟား ဟား … သဘောတွေ ကျလွန်းလို့ … ဖင်လေးကို ဆွဲဖြဲလိုက်တယ် …
“အိုး … အစ်ကိုနော် … အတင်းမဖြဲနဲ့ … ဟင့်”
မီးလေးက အဖုတ်ကို … ညှစ်ထားလွန်းတော့ … ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲက … ခရေပွင့်လေးက … ခပ်စူးစူးလေး … အထဲကို ၀င်နေတယ် … အရည်တွေလည်း ရွှဲနေတော့ … စိတ်မကူးတော့ပါဘူး … လက်ညှိုးကို ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် … ၀င်ဘူးဗျ … လက်တဆစ်ပဲ … ၀င်တယ် … ထပ်သွင်းလို့မရဘူး … အတင်းတံခါးပိတ်ထားတယ် …
“အား … နာတယ်နော် … အစ်ကို … ဟင့် … ဟင့်”
“အား … နာတယ် … နာတယ် … ထပ်မထည့်တော့နဲ့ … နာတယ် …”
မထည့်နဲ့ ဆို … ပိုလို့တောင် ထည့်ချင်သေးတယ် … အပြတ်ဟော့နေတဲ့ … မီးလေးကို … နောက်ပေါက်ပါ လုပ်ပစ်လိုက်အုံးမယ် … လက်ညှိုးကို … ပိုထိုးထည့်တော့ … အတင်း ရုန်းတယ် … မရဘူးလေ … လိုချင်တာကို … ရအောင် ယူတတ်တဲ့ အကျင့်က … ကျွန်တော့်မှာ စွဲနေပြီ …
“အား … အစ်ကိုက … အရမ်းရက်စက်တယ်ကွာ … မီးလေး ဖင်ကို … မလုပ်ပါနဲ့ ”
“အရမ်းလုပ်ချင်တယ်ကွာ … မီးလေးကလည်း”
“ဟင့် … ဟင့် … မီးလေးကို … မသနားဘူးလားဟင် … အစ်ကို့ဟာကြီး ထည့်လိုက်ရင် … မီးလေးဖင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်”
“တခြားဟာ လုပ်ပေးမယ်လေ … နော် … အစ်ကို … ဒါတော့ မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရယ် … မီးလေး တောင်းပန်ပါတယ်”
ကျွန်တော် စိတ်တိုလာလို့ … ကျွန်တော့်ဟာကို … ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … အရမ်းကောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ကန့်လန့်ကန့်လန့် လုပ်တာ မုန်းတယ်ဗျာ … မွေ့ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲချပစ်လိုက်တယ် … မီးလေးက … သနားပါတယ် … မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး …
“စိတ်မဆိုးရဘူး အစ်ကိုရယ် … မီးလေး ကြောက်လို့ပါ …”
“အစ်ကို့ဟာကြီး … အကြီးကြီးလေ … မီးလေ ဖင်ကွဲသွားမှာပေါ့”
“စိတ်မဆိုးနဲ့နော် … အစ်ကို့ကို အလျော်ပြန်ပေးမယ်လေ … နော် … ရွှတ်”
ပါးကို တစ်ချက်လာနမ်းပြီး … နှစ်သိမ့်ပေးနေရှာတယ် … စိတ်တိုနေတာ … လျော့သွားတာပေါ့ဗျာ … ဒီလိုမျိုးလေး နမ်းတော့ … ရင်တောင်ခုန်သွားတယ် … သူက ဘယ်လို အလျော်ပေးမှာလဲ …
“ဘယ်လို အလျော်ပေးမှာလဲ … ပြောပါအုံး”
“စိတ်ကို လျှော့ပါ … အစ်ကိုရယ် … လူကြီးနော် … ကလေးကို စိတ်မဆိုးရဘူး … ဟွန့်”
“မရဘူးကွာ … အရမ်းလုပ်ချင်တယ်”
“မီးလေးကို … မသနားဘူးလားဟင် … မနေ့က … ဒဏ်ရာတောင် မပျောက်သေးဘူး … အထဲမှာ
“ဟုတ်တာပေါ့ … မီးလေးက လိမ်ပြောစရာလား … အစ်ကို ကြမ်းကြမ်းလုပ်တာ … အရမ်းနာတယ် အစ်ကိုရဲ့
… မီးလေးက … ချစ်လွန်းလို့ … အံကြိတ်ခံတာ … မျက်ရည်တောင်ထွက်တယ် … ဟွန့်”
“ဟား ဟား … မီးလေးက … အရမ်းကောင်းတာကိုး … ဟုတ်ဘူးလား”
“အိုး တော်ပါ … စိတ်ကို လျှော့နော် … အစ်ကို စိတတ်ိုင်းကျ ဖြစ်ရစေ့မယ် … ဟုတ်ပြီလား … ရွှတ်”
“အင်း … ပြောပါအုံး … ဘယ်လို အလျော်ပေးမှာလဲ …”
“စောင့်ကြည့်ပေါ့ … မီးလေး ဘယ်လိုချစ်တတတ်ယ်ဆိုတာ … ”
တယ်ဟုတ်ပါလား … အပြောကတော့ ကြွေလောက်တယ် …. ခပ်ညုညုလေး ပြောပြီး … ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို … မထိတထိ လာကလိပြန်တယ် … ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ … ကျွန်တော့် အပေါ်ကို … မီးလေး … တက်လာပါတယ် … အိစက်ဖောင်းမို့နေတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … မျက်နှာရှေ့မှာ … ရစ်ဝဲနေတယ် … သူ ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ …
မျက်စိမှိတ်လိုက်ပေမယ့် … ခိုးကြည့်ချင်တယ်ဗျာ … မျက်စိတစ်ဖက်ကို မှိတ်ပြီး … ခိုးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ … ချစ်ရည်လွှမ်းတဲ့ မျက်ဝန်းတွေက … ကျွန်တော့်ကို … စိုက်ကြည့်နေတယ် …
“ဟိတ် … အစ်ကိုနော် … ခိုးကြည့်နဲ့”
မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးနဲ့ ဖုံးပစ်လိုက်တယ် … ဟား ဟား … ချာတိတ်က ကလေးကျနေတာပဲ … ခေါင်းအုံးနဲ့ ဖုံးတော့ အောက်နားလေးက … မသိမသာလေး … ပွင့်နေတာ … သူလုပ်နေတာ မြင်ရတာပေါ့ဗျာ …
ခေါင်းလေးငုံ့ … ဆံပင်လေးကို သပ်လိုက်ပြီး … ကျွန်တော့်နို့သီးဖျားလေးကို … စို့တော့ာတာပဲဗျာ …
ရင်ထဲမှာ … လှိုက်ကနဲ … ကြက်သီးတွေတောင်ထသွားတယ် … မီးလေးလျှာလေးနဲ့ … သပ်လိုက်တိုင်း … ဟား … ရင်ထဲမှာ မီးတွေ ၀ုန်းကနဲ ၀ုန်းကနဲ တောက်လာတယ် … မရဘူးဗျာ … ခံစားရခက်တယ်ဗျာ … သူ့လျှာလေးက … နွေးနွေးလေး … မထိတထိနဲ့ … ကလိတော့ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … ဒီဘက်ပြီးတော့ … ဟိုဘက် … နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ စုပ်ရင်း … မီးလေးက … သူ့ဖင်ကောက်ကောက်လေးကို နောက်ကို ဆုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဟာဗျာ … တင်းပြီး ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့ကောင်က … သူ့ ဖင်နှလုံးကြားမှာ ညပ်သွားတယ် … ချွဲကျိတဲ့ အရည်တွေနဲ့ … ကျွန်တော့်ကောင်ကလည်း … အပွတ်ခံနေရတယ် … ဟာဗျာ
… တကယ်ပါပဲ … အပွဲပွဲနွှဲလာသမျှ … ဒီတစ်ခါကျမှ … မီးလေး လုပ်သမျှ ကျွန်တော် ထွန့်ထွန့်လူးနေတာပဲဗျာ … –ီးတစ်ချောင်းလုံးကို … အဖုတ်မွှေးနုနုလေးနဲ့ … အပွတ်ခံရတာ … ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိပါဘူးဗျာ … တစ်ချက်တစ်ချက် … သူ့အဖုတ်ကြားလေးထဲရောက်သွားလိုက် … နှုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေက … မထိတထထိညှစ်တာခံရလိုက်နဲ့ … ဟုတ်နေတာပဲဗျာ … –ီးတချောင်းလုံးကို … အ၀တ်နုနဲ့ ပွတ်နေသလိုပဲဗျာ … မီးလေးဖင်က နိမ့်ချည်မြင့်ချည်နဲ့ … ကျွန်တော့်ကို နှိပ်စက်နေတာ … မခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာ … ဖင်ကို အနောက်ဖက်ကို အတင်းပွတ်တွန်းရင်း … ဒ-်ဖျားကို … လာလာငြိတယ်ဗျ … ၀င်မလိုလို ဖြစ်လိုက် … အောက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက် … အသဲယားတယ်ဗျာ … မီးလေး အပေါက်ထဲ …
၀င်တော့မလို … ဖြစ်လိုက် … အောက်ကနေ အတင်းကော့တော့လည်း … ချာတိတ်မက …
အောက်ပြန်လျှောသွားတယ် … ဒီလိုမျိုး နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုတော့ … တင်းလာတာပေါ့ဗျာ … နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ … မရမက အောက်ကနေ ပင့်တင်လိုက်တော့ … စွတ်ကနဲ ၀င်သွားတယ် … မီးလေးရုန်းပါသေးတယ် … မရဘူးလေ … အံတိုနေပြီ …
“ဟာာာာ … ကြီးလိုက်တာ အစ်ကိုရယ် … ဟင့်” “အရမ်းရှည်တာပဲ … အစ်ကိုရယ် … အား ….. ”
မီးလေး … တစ်ချက် တုန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … ဆက်ဖြစ်လာမယ့် … နာကျင်ခံကောင်း အရာသာကို … ကြိုသိနေတော့ … နည်းနည်းတော့ လန့်မှာပေါ့ … ကျွန်တော်လည်း စိတ်မရှည်တော့ဘူးဗျာ … လုပ်ချင်နေပြီ … လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မီးလေးဖင်လေးကို … ကိုင်ပြီး … ၀ုန်းကနဲ ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … အောက်ကနေလည်း … အတင်းကော့ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … အား … နာတယ် … အရမ်းနာတယ် အစ်ကိုရယ်”
“အာာာာ … အရမ်း မကြမ်းရဘူးလေ … မီးလေး ကို မသနားဘူးလား … ဟင့် … ”
အသံထွက်ပြီး ငြီးရလောက်အောင် … မီးလေ အဖုတ်ထဲ ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ့ ၀င်သွားတာ … မိုက်တယ်ဗျာ … ထောင်မတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်ကို … ညှစ်ထားတာကို … အရမ်းသဘောကျတယ် … အိကနဲ ကျလာတဲ့ တင်ပါးတွေက … ကျွန်တော့်ပေါင်တွေနဲ့ လာကပ်သွားတယ် … မီးလေး … ဆတ်ကနဲ … သူ့ဖင်လေးကို … ပြန်မသွားတယ် … အဖုတ်က … အကုန်လုံး ကျွတ်ထွက်မသွား … သိမ့်ကနဲ … ပြန်ဆင်းလာပြန်တယ် …
“ဟင့် … ဟင့် … အစ်ကိုရယ် … ကောင်းရဲ့လားဟင်”
“ကောင်းတယ် မီးလေးရယ် … ခပ်ကြမ်းကြမ်း … ချစ်ကွာ … အားမရဘူး”
“အစ်ကိုရယ် … ဟာ … ဟင့် … ဟာ … ဟာ … အို … အစ်ကိုနော် … အု … ဟင့် …”
မီးလေးက … ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကို လက်ထောက်ပြီး … ဖင်လေးကို … ကော့လိုက် … ကောက်လိုက်နဲ့ … အပေါ်ကနေ ဆောင့်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ … တစ်ချကတ်စ်ချက် … မာန်ပါသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ … အဆုံးထိ
… ဒုန်းကနဲ ဆောင့်ဆောင့်ဝင်သွားတယ် … သူလုပ်တာ နည်းနည်းတော့ နှေးတယ်ဗျာ … အားမရတော့ဘူး
… ဟူး … ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး … မကုန်းမကွပုံလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ … အောက်ကနေ အတင်း ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … စက်သေနတ်လို … တဒုန်းဒုန်းနဲ့ကို ဆောင့်ပစ်တာ … အ၀င်အထွက်ကလည်း ကြမ်းတော့ … မီးလေး အော်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ … ခံရှာပါတယ် … သူ့အစေ့လေးကို … ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားတာ … ကောင်းလွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့ … အဖုတ်ထဲကနေ အတင်း ညှစ်ညှစ်ထားသေးတယ် … အရည်တွေကလည်း … ရွှဲရွှဲစိုနေတာပဲဗျာ … အ၀င်အထွက်သံတွေက … နည်းနည်းတောင်ကျယ်လာတယ်
“ဟာ … ဟင့်”
“ဟင့် … ဟင့်”
“အွန် … ဟာာာ” “အားး … ရှီး”
အောက်ကနေ ဆောင့်ရင်း … ကပ်နေတဲ့ ဆီးခုံ နှစ်ခုကြားထဲ လက်ဝင်ပြီး … မီးလေးအစေ့လေးကို … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် …
“ဟား … ထိတယ် အစ်ကိုရယ် … အရမ်းထိတယ်”
ပဲစေ့သာသာအစေ့လေးကို … ပွတ်ပေးလိုက်ရင် … မိန်းမတွေ မနေနိုင်အောင် …
ထွန့်ထွန့်လူးဖြစ်သွားတာပဲဗျာ … စိတ်မပါတဲ့ မိန်းမ … ကာမစိတ်နည်းတဲ့ မိန်းမတွေတောင် … ဒါလေးကို ပွတ်ပေးရင် … မနေနိုင်လောက်အောင်ကို … ထကြွလာလိမ့်မယ် … မယုံရင်လုပ်ကြည့်ပေါ့ …
အသက်ကလည်း ငယ်ငယ် … သွေးကြွခါစ … မီးလေးလို အရွယ်မျိုးကို … ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ပစ်လို့ကတော့ … အသည်းစွဲအောင် ချစ်သွားလိမ့်မယ် … မီးလေးက … တော်တော် အောက်ပေးကောင်းတာဗျ … အစေ့လေးကို အပွတ်ခံရတိုင်း … ဖင်လေးကို စကာဝိုင်းလို ကော့ကော့ပစ်လိုက်တာများ …
ကောင်းလိုက်တာဗျာ … နောက်ပြီး … မီးလေးအဖုတ်က … ကျွန်တော့-ီးကို … ဆွဲဆွဲ ဆုပ်ပစ်တာလဲ … ကောင်းတယ်ဗျာ …
“အား … ရှီး …. ဟင့် … အစ့်ကို့ … အစ့်ကို့ … မီးကို သတ်နေတာလားဟင် … မီး မခံနိုင်ဘူး … ဟီး … မီးသေတော့မယ် … ဟင့် … မီးကို သနားပါအုံး … အစ်ကိုရယ် … အား …. ရှီး … ဟာ … ဟင့် … အား …
သေပြီ … သေပြီ …”
“ဟင့် … အဲလို … မပွတ်ပါနဲ့ … အစ်ကိုရယ် … မီးမခံနိုင်လို့ပါ … နော် … ဟင့် … ပြောလို့လဲမရဘူး … အို
… အာာာ … ရှီး … မီး … သေပြီ … မီး … သေပြီ …”
တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ အောက်ကဆောာင့်ရင်း … မီးလေးအစေ့ကို … ပွတ်ပွတ်ပစ်တာ … မီးလေးတစ်ယောက် အပေါ်မှာ … ထွန့်ထွန့်ကို လူးနေတာပဲ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲဗျာ … ၀ါရင့်တဲ့ … ဖာသည်တွေတောင် … အသည်းခိုက်အောင် … ခံရတဲ့အကွက် … ပါကင်ဖောက်ပြီးစ … ချာတိတ်မက … ခံနိုင်မတဲ့လား … မီးလေးအဖုတ်က ညှစ်ထားတဲ့ အားက … သံချောင်းဆို … ကွေးသွားမလား မသိပါဘူးဗျာ … ညှစ်ထားတဲ့ ကြားက … မွှေရတာ … တအားဖီးလာတယ်ဗျ … အရည်တွေကတော့ … ဟောကနဲ … ဟောကနဲ ထွက်ကျလာတာ … အစေ့ပွတ်နေတဲ့ … လက်ထဲမှာတောင် … အိုင်နေပြီ …
“ဟင့် …. ဟင့် … ရှီး … ကောင်းတယ် အစ်ကိုရယ် … အဲလိုလေး … အဲလိုလေး … ရှီး … မြန်မြန်လုပ်နော်
… အို … ဟင့် … မီးလေးပြီးတော့မယ် …. ပြီးတော့မယ် … ရှီး … ဟာ … ဆောင့်ဆောင့်” ဆယ်မိနစ်လောက် … အောက်ကနေ ပင့်ပြီး … ဆောင့်ချက် … ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ကြုံးတော့ …
မီးလေးအဖုတ်က … ထွက်လိုက်တဲ့ အရည်တွေဗျာ … အိုင်ထွန်းနေတာပဲ … ကျွန်တော်လည်း … မနေနိုင်တော့ဘူး … ပြီးတော့မယ် … သူက … မွှေလိုက် … ကျွန်တော်က မွှေလိုက်နဲ့ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ …
“အား … ရှီး … ဟင့် … ဟင့် … အရမ်းချစ်တယ် … အစ်ကိုရယ် … အရမ်းချစ်တယ် … မီးလေ … မီးလေ … အား … ”
မီးလေး … စကားတွေက ဗလုံးဗထွေး … တစ်ကိုယ်လုံးကလည်း … တွန့်လိမ်ပြီး … ပြီးသွားတယ် … ပြီးခါနီး … မီးလေးအဖုတ်က … ဆတ်ကနဲ … ဆတ်ကနဲ … ညှစ်ညှစ်ပစ်တာ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … အထဲကနေ ဆွဲဆွဲဆုပ်နေတဲ့ အရသာက … ဘာနဲ့မှမတူဘူးဗျ … တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူးဗျာ … ခါးကို စုံကိုင်ပြီး ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … အောက်ကနေ အတင်းပင့်ပြီး … သုံးလေးချက်မွှေလိုက်ရင်း … ပြွတ်ကနဲ … ကျွန်တော့်ဟာထဲက … အရည်တွေ ပန်းထွက်သွားတယ် …
“အို … အစ်ကိုရယ် …. အရမ်းချစ်တယ်နော် … ဟင့် … အို … အစ်ကို့အရည်တွေက … မီးသတ်ပိုက်ကျနေတာပဲ … မီးသားအိမ်ထဲကို … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာ … ကောင်းတယ် … အစ်ကိုရယ် … ကောင်းတယ် … အစ်ကိုရော ကောင်းရဲ့လားဟင်” “အင်း”
နှစ်ယောက်လုံး … ပန်းတိုင်အရောက် … တာဝေးပြေးလာတဲ့ အပြေးသမားတွေလို … မောဟိုက်နေတာပဲ … ဟောဟဲ … ဟောဟဲနဲ့ … နှစ်ယောက်သား … ပက်လက်ကလေး …
မီးလေးက … နည်းနည်းတော့ … ချွဲတတ်သည် … ကျွန်တော့် လက်မောင်းကို … ခေါင်းအုံးအုံးပြီး … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားလိုက်တယ် …
“ရှင်” မီးလေး မျက်နှာ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်သွားသည် …
“အစ်ကိုနော် … ဟင့် … မီးလုပ်ပေးတာ … စိတ်တိုင်းမကျဘူးလားဟင် … မီးက သိပ်မချစ်တတ်သေးလို့ပါ … အစ်ကိုရယ် … ဘယ်လိုလုပ်မှ စိတ်ကျေနပ်မှာလဲဟင်” “ဖင်ချချင်တယ်”
“အို … အစ်ကိုရယ် … မီးကို … မသနားဘူးလားဟင် … မီးဖင်ကွဲသွားမှာ အရမ်းကြောက်တယ်” “မရဘူး … ချမှာပဲ…”
“ဟင့် … အစ်ကို … အရမ်းဆိုးတယ် …”
“ဖင်ကုန်းပေးကွာ … လုပ်ချင်လာပြီ”
“ရှင် … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း”
“မနာပါဘူးကွ … မီးလေးကလည်း … လိမ္မာတယ်နော် … အစ်ကို ဖြေးဖြေးလေး ထည့်ပေးမယ်” “အစ်ကိုက … ညာပြောတယ် … မီးကို … ဖင်ချမှာ … မနာပဲ နေမှာလား … မီးဖင်လေးက …
သေးသေးလေး … အစ့်ကို့ဟာက … အကြီးကြီး … ကွဲသွားမှာပေါ့ … ဟင့်အင်းနော် … မလုပ်ပါနဲ့နော် … ” “ဖြေးဖြေးလေး လုပ်မှာပါဆို … ရုန်းရင်တော့ အတင်းချပစ်မှာနော် … ဖင်ကွဲတော့မှ မအော်နဲ့ …” “ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟင်”
မီးလေး … မကုန်းချင်ကုန်းချင်နဲ့ ကုန်းပေးလိုက်သည် … ပေါင်ကြားမှာက … အရည်တွေက မခြောက်နိုင် … အိုင်ထွန်းနေအောင် ထွက်ထားတော့ … ဘယ်ခြောက်နိုင်အုံးမလဲဗျာ … မီးလေးက … ဖင်ကုန်းပေးပြီး … အနောက်ကို လှည့်လှည့်ကြည့်နေတယ် … ဟုတ်မှာပေါ့ … သူ့ခမျာ ကြောက်နေရှာမှာ … စအိုဝသေးသေးလေးထဲ … ကျွန်တော့်-ီးထည့်မှာဆိုတော့ လန့်နေမှာပေါ့ … ခုတင်ဘေး ခုံပေါ်က … နားကြပ်တံ သုံးချောင်းကို ယူလိုက်သည် … မီးလေး ဖင်ကို … ခပ်စပ်စပ် နှစ်ချက်သုံးချက် ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် …
“ဖတ် … ဖတ် … ဖတ်”
“အား … အစ်ကိုနော် … ဟင့် … နာတယ် … ဘာလို့ ရိုက်တာလဲဟင် … ”
“ဖင်လေးက … အရမ်းလှလို့ …”
“မီးဖင်ကို … ကြိုက်လား …”
မီးလေး စအိုဝက … သေးသေးလေး … သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားတော့ … ဖြူဝင်းနေသည် … စအိုဝလေးကို … နည်းနည်းဖြဲလိုက်တယ် …
“အို … အစ်ကို … အရမ်းမဖြဲနဲ့လေ … ဟင့်”
နားကြပ်တံလေးကို … စအိုလေးထဲ တွန်းထည့်လိုက်သည် … ပြွတ်ကနဲ … ပြန်ကန်ထွက်လာသည် … မီးလေး … အလန့်တကြား ညှစ်ထည့်လိုက်တော့ … နားကြပ်တံလေးက … ပြန်ထွက်လာသည် …
“အို … အစ်ကို … ဘာထည့်လိုက်တာလဲ … ဟင့် … ရှီး”
“စိတ်ကို လျှော့ထားနော် … မီး … မနာပါဘူးကွာ … ခေါင်းထောင်မထားနဲ့လေ … အင်း ဟုတ်ပြီ …
မှောက်ပြီး … ကုန်းထားပေး”
“အို … အစ်ကိုနော် … ဖြေးဖြေး”
နားကြပ်တံလေး … ၀င်သွားပြန်တယ် … မီးလေး ဖင်က … တွန့်ကနဲ … တုန်သွားတယ် … ဖြေးဖြေးလေး မွှေပစ်လိုက်တော့ … ဖင်လေးက … ယမ်းချင်နေတယ် … ယားမှာပေါ့ … ခံရခက်မှာပေါ့ …
“အို … ဟင့် … အစ်ကို …”
မီးလေး ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ … ကျွန်တော့်လက်ကို … လာကိုင်တယ် … တစ်ချောင်း ၀င်သွားတော့ … နောက်တစ်ချောင်း …
“အို … အမေ့ … ရှီး”
သုံးချောင်းမြောက်ကို ထည့်လိုက်တော့ … မီးလေး … ဖင်လေးက တုန်ခါနေသည် … ယမ်းခါနေသည် … ဖြေးဖြေးလေး မွှေပစ်လိုက်သည် … အဖုတ်ကို … လုပ်ရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ … ဖင်ကိုချရတဲ့ … ခံစားချက်က တူဘူးဗျ … ဖင်ချတာကို ပိုသဘောကျတယ်ဗျ … ပါကင်ပိတ် အဖုတ်လေးကို … လုပ်ဖို့ နှူးနှပ်ရသလိုမျိုး …
အနောက်ကို ချရင်လည်း … နှူးနှပ်ရတယ်ဗျ … အဖုတ်ကမှ အတင်းလုပ်ရင် … ၀င်သွားသေးတယ် … အနောက်က မ၀င်ဘူးဗျ … စအိုကြွက်သားတွေက … ပိုပြီးသန်မာတော့ … အထဲရောက်သွားရင်လည်း … အညှစ်ခံရတာ … ပိုထိတယ်ဗျ …
“ဟင့် … ဟင့် … အစ်ကို …. ဖြေးဖြေးမွှေနော် … မီးမခံနိုင်ဘူး … အသဲယားတယ် … အစ်ကိုရယ် … ဟင့် … မနေတတ်ဘူး … အို … အို”
“ဟာ … ရှီး … ဟင့် … အဲလိုမရက်စက်နဲ့လေ … အို … အစ်ကို … အစ်ကို … အစေ့လေးကို မပွတ်ပါနဲ့ဆို … ဟင့် … မီး … သေပြီ … သေပြီ … အရမ်းခံရခက်တယ် … အစ်ကိုရယ် … မီးတောင်းပန်ပါတယ်နော် … အို … ဟင့် …. ဟင့်”
တောင်းပန်လေ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းမွှေလေပဲ … တော်သေးတယ် … မီးလေးက … အိုးကောင်းလို့ …
အိုးပိန်လေးများဆိုရင် … အသက်ထွက်လောက်တယ် … ကျွန်တော်က … အိုးတောင့်တောင့် ချာတိတ်တွေကို … သဘောကျတယ်ဗျ … အိုးတောင့်တဲ့ စော်တွေကို … ချရတာ ပိုဖီးလာတယ် …
အောက်ပေးလဲ ပိုကောင်းတယ်ဗျ … ဖင်ကြီးရင် … စိတ်ကြီးတယ်တဲ့ … ဟား ဟား …
“ဟာ … ဟာ … ဟင့် … ထွက်ကုန်ပြီ … ရှီး … အစ်ကိုရယ် … ဟင့် … ဟင့် … ရှီး … ထွက်ကုန်ပြီ … ဟင့် … တော်ပါတော့နော် … မီးသေတော့မယ် … ဟင့် …
နားထဲမှာ … နားကြပ်ရင်တောင် … တခါတလေ … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာ … နားကြပ်တံမှာ ပါတဲ့ ဂွမ်းလေးက … နုတယ်ဆိုပေမယ့် … စအိုဆိုတာမျိုးကလည်း … အသားနုပဲလေ … အသွေးအသားတွေ ပြောင်းဆန်နေအောင် … ခံရခက်မှာပေါ့ … ကျွန်တော့်လက်ထဲကို … မီးလေး အရည်ပူတွေ … ကျလာတယ် … ပွက်ကနဲပဲဗျာ … ကျလည်း … ဆက်မွှေရအုံးမှာပဲ … နည်းနည်းထပ်မွှေပြီးတော့ … နားကြပ်တံလေး သုံးချောင်းကို … ထုတ်လိုက်တယ် … နားကြပ်တံ … ဒီဘက်အခြမ်းက … အရည်တွေနဲ့ … စိုနေပြီလေ … မီးလေးက … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … တောင်းပန်သာနေတယ် … စအိုလေးက … ပေးမထုတ်ချင်ဘူးဗျ … နားကြပ်တံလေး … လွတ်သွားမှာ စိုးလို့ … ညှစ်ထားတယ် … ဖြေးဖြေးလေး ထုတ်ကြည့်တယ် … မရဘူး … စအိုလေးက … စူပြီးလိုက်ပါလာတယ် … ပြန်ထည့်လိုက်တယ် … ဆတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တော့လဲ …
“အို … အမေ့”
မီးလေးကို … ကြမ်းကြမ်းလုပ်မှပဲရတော့တယ် … ခြောက်နေတဲ့ … ဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ ထပ်ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ … မွှေလိုက်တယ် … အစေ့လေးကိုလည်း … ပွတ်နေဆဲ …
“အို … အစ်ကို … ဟာ … ဟာ”
အခါ နှစ်ဆယ်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်လိုက်တော့ … နောက်တစ်ခါ … မီးလေး … အရည်တွေ ထပ်ကျလာပြန်တယ် … အိုကေ … ဒီအချိန်က … အချိန်ကောင်းပဲ … ကာမအသာထိပ်ဆုံးရောက်သွားလို့ … မီးလေး မိန်းမောနေတုန်း … အပေါက်ကို … ထပ်ချဲ့ပစ်ရမယ် … ဒီလောက်ဆိုရင် … ရလောက်ပြီထင်တယ် … နားကြပ်တံလေးတွေကို … ဆွဲနှုတ် … လက်ညှိုးကို … ဖြေးဖြေးလေး … တစ်ဆစ်ချင်းထည့်ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … နာတယ် … ဖြေးဖြေး … အစ်ကို ဟင့်”
“လက်ညှိုးက … မဆုံးသေးဘူးလားဟင် … နာလိုက်တာ အစ်ကိုရယ်” “၀င်သွားပြီ … မီးလေး … အကုန် ၀င်သွားပြီ … မီးလေးက တော်လိုက်တာ”
မီးလေး … စကားတောင် ပြန်မပြောနိုင် … မျက်နှာကို ရှုံ့မဲ့နေပြီး … မွေ့ယာခင်းကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … ဆုပ်ထားတဲ့ လကသ်ီးဆုပ်လေးက … လက်ဆစ်ဖြူဖြူလေးတွေတောင်ပေါ်နေတယ် … နည်းနည်းတော့ သနားသွားတယ် … ဒါပေမယ့် … ဆက်လုပ်ရမှာပဲ … မီးလေးနေရာမှာ … သူဇာဆိုရင်ဗျာ … ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ … အတွေးက … သွေးဆိုးတွေကို … မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးနေတာ … ခပ်ဆတ်ဆတ် မွှေပစ်လိုက်တယ် …
“အား … နာတယ် … နာတယ် …”
“အား … အား …”
မီးလေး ဖင်က … ထွန့်ထွန့်လူးပြီး … ယမ်းခါနေတယ် … ရုန်းတယ်ဆိုပေမယ့် … အပိုင်ချုပ်ပြီး … လုပ်တော့ … ဖင်ပဲ ယမ်းလို့ရတာပေါ့ … ဖင်ယမ်းလေ … ပိုခံရခက်လေပဲ … ကိုယ်ကလဲ မွှေ … သူကလည်း ယမ်း … မီးလေး ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိပါဘူးဗျာ … ကျွန်တော့်ကောင် … အရမ်းတင်းနေတယ် … လက်ညှိုးကို … ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ ဖင်လေးကို … ဆွဲထောင်ပြီး … စိတ်ကြိုက်ပုံစံချပြီး … နောက်ကနေ … အပေါက်ဝကို … ဒ-်ထည့်ပြီး … ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … ဆောင့်လိုက်တာ … ကြမ်းသွားတယ် … ၀ုန်းဆို … မီးလေး … အရှေ့ကို … ရောက်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် … မလွတ်ပါဘူးဗျ … ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်က … ခါးကို သေချာကိုင်ထားတော့ … ရုန်းမရဘူးလေ … မီးလေးကတော့ … တအီးအီး … တအားအားနဲ့ …
ထုံးစံအတိုင်း ငြီးတွားနေတာပဲဗျာ … သုံးလေးချက် … ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး … စအိုလေးကို … ဆွဲဖြဲကြည့်လိုက်တယ် … မီးလေး ဗိုက်အောက်ထဲ လက်လျှိုပြီးတော့ … အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို … ညှစ်တယ် … အစေ့ကိုလည်း ပွတ်တယ် … စအိုထဲကိုလည်း … လက်တစ်ချောင်း ထည့်ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … အား … အစ်ကို … မီး သေပြီ … မခံနိုင်ဘူး … ဟီး … ဟီး … အရမ်းနာတယ် … အရမ်းနာတယ်
မီးလေး … တအားရုန်းတာ … ရုန်းလည်း မရဘူးလေ … အပိုင်ချုပ်ထားတော့ … ရုန်းလေပိုဆိုးလေပဲ … အဖုတ်၊ ဖင်၊ အစေ့ … သုံးနေရာ ဆက်တိုက်ကြီး … အလုပ်ခံရတော့ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … ဖာသည်တောင် အမေခေါ်ရမယ့် … အကွက် … အဖုတ်ထဲဝင်တဲ့ … –ီးကလည်း … ကြမ်းသလားမမေးနဲ့ … အ၀င်အထွက် … တဇွတ်ဇွတ်နဲ့ … ဂေါ်လီတွေက … အသားကုန် ပွတ်နေတာ … မီးလေး … မောလွန်းလို့ ချွေးတွေတောင် ထွက်လာတယ် … မျက်နှာလေးကလည်း … နီရဲတွတ်နေတာပဲဗျာ … နားရွက်ဖျားလေးတွေတောင် … နီတယ် … ပါကင်ဖွင့်ပြီးစ … ချာတိတ်ကို … ဒီလိုကြုံးတာ … ကျွန်တော် လွန်တယ်ဗျ … ခက်တာက … ကျွန်တော်ကလည်း … ဒီလိုကြမ်းမှ … အားရတာ … ဒီညမှ … ဘယ်လြိုဖစ်လဲ မသိပါဘူးဗျာ … ကျွန်တော်လည်း အရမ်းထန်နေတယ် … သူဇာကြောင့်ဖြစ်မယ် ထင်တယ် … ခိုက်သွားပြီကွာ … သူဇာရေ … စကားလေးထိုင်ပြောတာတောင် … ဒီလောက် သွေးကြွစေရင် … အတူတူများ အိပ်ရလို့ကတော့ … ဟင်း ဟင်း … နေ့တိုင်း … ပွဲဆက်နေမယ်ထင်တယ်ဗျ …
လက်တစ်ချောင်း ၀င်သွားတော့ … နောက်တစ်ချောင်း … နှစ်ချောင်းပူးထပ်ထည့်တယ် … အော်တာပေါ့ … ရုန်းတာပေ့ါ … ဒီလိုပဲ … ထည့်လေကျယ်လေပဲ … မထည့်ခင်ကတော့ … ကျဉ်းတာပေါ့ …
နှစ်ချောင်းဆန့်တော့ … သုံးချောင်း … မီးလေး အသံက ပိုကျယ်လာတယ် … အောကားကို လော်စပီလာနဲ့ ဖွင့်ထားသလိုပဲ … အော်လိုက်တာဗျာ … အလုံခန်းမုိ့တော်တော့တယ် … နို့မို့ရင် … အောက်ကကောင်တွေ ပြေးတက်လာမှာ … သုံးချောင်းထည့်လို့ရတော့ … စအိုဝက တော်တော်ကျယ်သွားပြီ … အိုကေ … ထည့်လို့ရပြီပေါ့ …
မီးလေး အဖုတ်ထဲက … ကျွန်တော့်ကောင်ကို … ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည် …
“ဟာ … ဟင့် …”
မီးလေးက ထန်လွန်းပါတယ် … ထည့်တော့လည်း … အော်တယ် …ထုတ်တော့လည်း အော်တယ် … အော်ပလေ့စေ … များများအော်မှ … အနာသက်သာမှာ … သူအော်လေ … ကျွန်တော်ပိုသဘောကျလေပဲ
အစေ့လေးကို … နှစ်ချက်သုံးချက်ပွတ်လိုက်ပြီး … အရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ … ကျွန်တော့် … ဒ-်ကို … မီးလေး စအိုဝထဲ … မြှုပ်လကိုသည် … ဒီလောက်ချဲ့ထားတာတောင် … ကြပ်လွန်းသည် … သိပ်မ၀င်ချင် … ဒ-်ဖျားက … လည်လည်ပြီး … ပြန်ထွက်ချင်သည် …
“အား … ကို … ဖြေးဖြေးနော် … မီးကို သနားပါအုံး …”
“အား … ”
“အား … ” “အား … ”
“ဟင့် … ထပ်မထည့်နဲ့လေ … အား … အား … မီးကို မရက်စက်နဲ့လေ …”
ကျွန်တော့် –ီးက … တထစ်ချင်းသာ ၀င်ပါတယ် … ဆောင့်သွင်းလို့လည်း မရဘူး … တင်းကြပ်နေတဲ့ … စအိုထဲ … ဖြေးဖြေးချင်းဝင်နေရင်း … စိတ်မရှည်တော့ … တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … အရမ်းနာတယ် … အရမ်းနာတယ် … ဟူး”
မီးလေး ဖင်ကို အတင်းဖြဲပြီး … ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … စိတ်မရှည်တော့ဘူး … အား … ၀င်သွားပြီဗျ
… တစ်ဆုံးပဲ … ကျွန်တော့် ဆီးခုံနဲ့ … သူ့ဖင်နှစ်လုံး ကပ်တဲ့အထိ သွင်းပစ်လိုက်တယ် … မီးလေးကတော့ … တအားရုန်းတာပဲ … ရုန်းပလေ့စေ … ဗိုက်အောက်ထဲ … လက်ကို လျှိုပြီး … အဖုတ်လေးကို လိုက်စမ်းလိုက်တယ် … တွေ့ပြီ … မီးလေး အဖုတ် … အစေ့ … အစေ့ ဘယ်မှာလဲ အစေ့ … စမ်းလို့ရတာနဲ့ … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဒါမှ … မီးလေး အနာသက်သာမှာ … အိုး … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … မီးလေးကို … ဒါကြောင့် သဘောကျတာ … ဘယ်လောက်ပဲ နာအောင်လုပ်လုပ် … ဖင်ကြီးကို … ကော့ကော့ပစ်တာကို … အရမ်းကြိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … ကျိုးမတတ်ညှစ်ထားပြီး … စကောဝိုင်းလို … ဖင်လေးကို … ယမ်းနေတော့ … ကျွန်တော့် ဒုတ်က အထဲမှာ ယမ်းနေတယ် …
“အား … ဟင့် … ဟင့် … ရှီး”
အ၀င်အထွက်တွေက … ဖြေးဖြေးလုပ်နေရာကနေ … မြန်လာတယ် … မီးလေးလည်း … ကောင်းလာတယ် ထင်ပါရဲ့ … ဖင်ကို … အနောက်ကို ကော့ကော့ပေးတယ် … ရဲရဲနီနေတဲ့ … မီးလေးနားရွက်ကို ကြည့်ပြီး … အရမ်းစိတ်ထလာတယ်ဗျာ … ကျွန်တော် အတင်းကို ဆောင့်တော့တာပဲ … ဟူး … ပြီးပြီ … ပြီးပြီ … ပြီးခါနီးလေ … အတင်းဆောင့်လေပဲ … အားကုန်ဆောင့်တော့ … ခုတင်တောင် တုန်လာတယ် … မတတ်နိုင်ဘူး … ကျွန်တော့်ကောင် ပေါက်ကွဲထွက်တော့မယ် …
“အား … ပြီးပြီ … မီးလေးရယ် … ပြီးပြီ … ကောင်းလိုက်တာကွာ … ကောင်းလိုက်တာ …”
အရှေ့နဲ့ အနောက်က … အရသာချင်းမတူဘူးဗျ … အဖုတ်ကို ဆယ်ခါလုပ်လို့ ပြီးတာနဲ့ … စအိုကို …
တစ်ခါလုပ်လို့ ပြီးတာ … အဲဒီလောက်ကို ကွာတာဗျ … ဟူး … မောလိုက်တာဗျာ … အားလုံးလည်း ပြီးရော … ကျွန်တော် ပက်လက်လန်သွားပါတယ် … မီးလေးက … လှုပ်တောင် မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး …
“အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ … မီးလေး ဖင်က … တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် …”
“အစ်ကို ကျေနပ်ရင်ပြီးတာပါပဲ … မီးလေးတော့ … မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … အိပ်တော့မယ်နော် … ဂွတ်နိုက်”
“ဂွတ်နိုက် … မီးလေး” အင်းယားမြိုင်ထဲက … ဖြတ်ပြန်လာရင်း … အိမ်လေးတလုံးကို … ကြည့်ပြီး … ဒေါ်မေသူဇာနွယ် … ကားဆက်မမောင်းနိုင်တော့ … လမ်းဘေးမှာ ရပ်လိုက်ပြီး … ဒီအိမ်လေးကို တမ်းတမ်းတတ … ကြည့်မိလိုက်သည် …
ဒီနေ့က … မေသူဇာနွယ် … မောင့်ကို အဖြေပေးတဲ့နေ့ … ဒီအိမ်က … မေ သိပ်ချစ်တဲ့ … မောင်နေတဲ့ အိမ် … ဒီအိမ်မှာ မောင်နဲ့ မေ … အချစ်အိမ်လေး ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ် …
မေ သိပ်မှားတယ် … တကယဆ်ို … မောင် သိပ်လိုချင်တဲ့ … မေ့ဘ၀လေး … ပေးလိုက်ရင် … အရမ်းကောင်းမှာပဲ … ရှက်လွန်းလို့ … မောင် တောင်းတာ … မေ ငြင်းခဲ့တာ … မေ အရမ်းမှားတယ် … မောင်ရယ် …
တောက် … သက်အောင်ဆိုတဲ့ လူယုတ်မာကြောင့် … မေ့ဘ၀လေး … သွားပြီ … မေ … မျက်ရည်တွေ ကျလာသည် … သတ်မယ် … ဒင်းကို … ငါ့ဘ၀ … ငါ့နှလုံးသားကို … ရက်ရက်စက်စက် ဖျက်စီသွားတဲ့ … သေ#ကောင် … တောက် …
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ လာဆုံတဲ့ ချစ်ဦးသူကို … ဘာရယ်မဟုတ် … သတိရမိသည် … ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် … မောင့်ကို ချစ်ခဲ့မိတဲ့အချစ်တွေက … နှလုံးသားထဲမှာ ပြည့်နေဆဲပါ … မောင်ရယ် … မေ ရက်စက်တာမဟုတ်ပါဘူး … သိပ်ချစ်ရတဲ့မောင့်ကို … အစိမ်းဖြတ်ဖြတ်ခဲ့တာ …
မေရက်စက်တာမဟုတ်ဘူးနော် … ယုတ်မာလွန်းတဲ့ ကံကြမ္မာကြောင့် … မေလေ … မောင့်ကို မတွေ့ရဲတော့ဘူးကွယ် … မေ … သစ်စိမ်းချိုးချိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး … မေ မောင့်အသဲကို ခွဲခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးနော် … အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြချင်တယ် … မောင်ရယ် … ဒါပေမယ့် မေ ပြောမထွက်ဘူးကွယ် … မေ ပြောမထွက်ဘူး …
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ … ကျောင်းစတက်တော့ … မေ … အရမ်းပျော်တယ် … ဖေဖေ့မျက်နှာကြောင့် … အင်းယားဆောင်မှာ … နေခွင့်ရတယ် … သစ်ပုတ်ပင်ကြီး … ဘွဲ့နှင်းသဘင် … အင်းယားကန် … အိုး …
ဒါတွေက … တကယ်ပဲရှိတာပါလား … မေ ပျော်တယ် … အရမ်းပဲ … ကျောင်းတက်ပြီး …
လေးငါးရက်နေတော့ … အင်းယားဆောင်ကို မေ ပြန်တိုင်း … မောင် နောက်ကနေ လိုက်လိုက်လာတယ် … လူဆိုးလေး … ပထမတော့ သတိမထားမိပါဘူး … မောင်က အတင်းလာမိတ်ဆက်တယ် …
“တို့နာမည်က … ခန့် … မင်းနာမည်ရော …”
သူ့နာမည်က ခန့်တဲ့ … တလုံးထဲ … ခန့်တဲ့ … မေ့နာမည်လာမေးနေတယ် … ပြောချင်ပါဘူး … ရှက်တယ် … ဖြတ်ကနဲ သူ့ကို … ကြည့်လိုက်မိတော့ … ချောသားပဲ … မျက်ခုံးကောင်းကောင်း … မျက်လုံးခပ်စူးစူးနဲ့ … မေ့ရဲ့ … မောင် ဖြစ်လာမယ့် … ခန့်ဟာ … လူချောလေးပါလား … ဆံပင်က ခပ်ရှည်ရှည် …
လည်ထောက်တယ် … အဖြူရောင် ရှပ်အင်္ကျီ ကော်လာထောင်ထောင် … ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီ … နဲ့ မောင်က … လမ်းသရဲလား … မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့ တူတယ် … မျက်နှာလေးက … နည်းနည်းတော့ နုတယ် … သူ့ကြည့်ရတာ ရည်ရည်မွန်မွန်ပါပဲ … မေ မောင့်အကြည့်တွေကို မခံနိုင်ဘူး … ခေါင်းငုံ့ပြီး … ခပ်သွက်သွက် ဆက်လျှောက်လာတယ် … မေ ရှက်တယ်လေ …
“ဟိတ် … တို့က … တကယ်ခင်ချင်လို့ပါကွ”
“မေ့နောက် … မလိုက်လာနဲ့နော် …”
“မေ တဲ့လား … ဟိတ် စကားလေး ပြန်ပြောပါအုံးကွ”
မေ ပြန်မပြောရဲဘူး … အရမ်းရှက်တယ် … ရင်တွေလည်း အရမ်းခုန်တယ်ကွယ် … မေ့ ဘ၀မှာ ယောက်ျားလေးတယောက် … နောက်ကနေ စကားလိုက်ပြောတာ … ဒါပထမဆုံးပါ …
ပြောမပြတတ်အောင် ရှက်မိတယ် … နေရထိုင်ရခက်တယ် … စိတ်တအားအိုက်တာပဲ …
“ဟိတ် … မေ့နောက်မလိုက်နဲ့တော့”
မေ … ဆတ်ကနဲ လှည့်ပြီး … သူ့မျက်လုံးကို စိုက်ကြည့်ပြီး … ပြောပစ်လိုက်တယ် … မေ မကြိုကတ်ာကို … အတင်းလာလုပ်ရင် … အရမ်းမုန်းတယ် …
“စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် … ကျွန်တော်က ရိုးရိုးသားသား ခင်ချင်လို့ပါ …”
“အို တော်ပါ … ပထမ ရိုးရိုး … နောက် ဆန်းဆန်း ခင်ချင်တာမှတ်လား … ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီနော့ …”
သူ့အပြောကို … မေ မစောင့် … မေ … အဆောင်ထဲကို … ခပ်သွက်သွက် ၀င်လိုက်တယ် … ဂိတ်ပေါက်ရောက်တော့ … နောက်လှည့်ကြည့်မိတယ် … ရော် … သူ မတ်တပ်ရပ်ပြီး … မေ့ကို ကြည့်နေဆဲ … အို … ရှက်လိုက်တာ … မေ လှည့်ကြည့်တာ သူသိသွားပြီ …
အခန်းထဲရောက်တော့ … အခန်းဖော် … မညွန့်မေက … မေ့ကို … စသည် …
“ဟိတ် … ရှမ်းမလေး … နင့်မျက်နှာရဲနေတာပဲ …”
“ရဲပါတယ် … အို … ကြည့်ပါအုံး ရင်တွေလည်း ခုန်နေတယ် …”
မေ အလန့်တကြား … မေ့ရင်ဘတ်လေးကို လက်နဲ့ ဖိပြီး စမ်းလိုက်မိတယ် … မညွန့်မေ ဘယ်လိုသိတာလဲဟင် …
“ရင်တွေ ခုန်နေတယ်ပေါ့လေ …”
“ဟုတ်ပါတယ် … ကိုယ်တို့ မေဂျာက … ကင်း … တို့ရှမ်းမလေးကို … ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲဟင်”
ဟယ် … မညွန့်မေ … ဘယ်လို သိတာလဲ … ခန့် ဆိုတဲ့ … ဟိုတယောက်က .. တုိ့မေဂျာက … ကင်းတဲ့လား …
“ပြောပါအုံး … မင်းသားလေးက … ဘာတွေပြောလိုက်လဲလို့”
“သူ့နာမည်က ခန့်တဲ့ … ခင်ချင်လို့တဲ့ …”
“အင်း … မေက ဘာပြောလိုကလဲဟင်”
“တို့နောက်မလိုက်လာနဲ့လို့ … ”
“ဟား ဟား … တို့ရှမ်းမလေး ရင်တွေ တအားခုန်နေတယ်ပေါ့ … ဒီလိုပဲလေ … ခင်ချင်လို့ပါ … နောက်တော့ချစ်ချင်လို့ပါ … ဟုတ်တယ်နော် …”
မေ့အတွေးထဲမှာ … ခန့်ဆိုတဲ့ … တယောက်ကို … ဘယ်လိုမှ ဖျောက်မရဘူး … တွေးလိုက်တာနဲ့ … သူပေါ်လာတယ် … အို … ငါသူ့ကိုများ … ချစ်မိနေပြီလား … ဒီလိုနဲ့ … နောက်တနေ့ ရောက်လာတယ် …
ညကလည်း … မေ ကောင်းကောင်းအိပ်မရ … အိမ်မက်ထဲ … သူလာတယ် … မေ့ကို … ချစ်တယ်တဲ့ …
နောက်နေ့ … မေ ကျောင်းထဲသွားတော့ … သူ လိုက်လာတယ် … တကောက်ကောက်ပဲ … မေ စာသင်ရင် … သူ အခန်းရှေ့က … စောင့်နေတယ် … မေ … ကန်တင်းသွားရင် … သူလိုကလ်ာတယ် …
အရမ်းသိသာတယ် … မေလည်း … သူ့ကို မကြည့်ရဲဘူး … သူငယ်ချင်းတွေက … ၀ိုင်းစတယ် … မေ ရှက်တယ် …
နေ့တိုင်းပဲ … မေ့နောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်တယ် … အနားမှာ သူရှိတယ် … ကြည့်လိုက်တိုင်း … သူ့မျက်ဝန်းနဲ့ ဆုံနေတယ် … ခက်တယ် … မောင်ရယ် …
ဇွဲကောင်းတဲ့သူ့ကို … တတိယနှစ်မှာ … အဖြေပေးလိုက်တယ် … မေ … ခန့်ကို … ချစ်တယ် …
ပျော်တာပေါ့ … တအားပဲ … မေတို့ … လျှောက်သွားကြတယ် … အင်းယားကန်ဘောင်မှာ … စကားတွေပြောကြတယ် … လမ်းတွေလျှောက်ကြတယ် … ပန်းခြံထဲမှာ … မောင် ခိုးနမ်းတယ် …
မောင်တအားဆိုးတယ် … ပြန်တွေးတိုင်း … မောင်ပေးတဲ့ … အနမ်းဦးက … မေ့ပါးပြင်ပေါ်မှာ … စွဲနေပြီ … ထင်းကနဲပဲ … သတိရတယ် … မောင်ရယ် …
မနက်ဖြန် … မေ တို့ … အောင်ပန်းပြန်ရတော့မယ် … ကျောင်းပိတ်ရက် … ချစ်သူနဲ့ ခွဲရတော့မယ် … မခွဲချင်ဘူး … မောင်ရယ် … မောင်က … ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်တဲ့ … တခါမှ … မောင်နဲ့
ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖူးဘူး … မေ ကြောက်လို့ … အမှောင်ကို ကြောက်တယ် … မောင့်ကို ကြောက်တယ် … မေ
… လိုက်လျောလိုက်တယ် … မနက်ဖြန် ခွဲရတော့မယ် … မောင့်ဆန္ဒကို … နည်းနည်းလေး လိုက်လျောလိုက်တော့ … မေ … သိတယ် … မောင် အရမ်းကဲတယ် … မေ့ကို … နမ်းတယ် … လည်တိုင်ကိုနမ်းတယ် … မေ့ရင်သားလေးကို … မထိတထိ လာကိုင်တယ် … မေ ရှက်တယ် … မငြင်းရက်ဘူး … မောင် စိတ်ညစ်မှာ စိုးလို့ … မေ့ကို … အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ပေးတယ် …
ဘော်လီထူထူအောက်မှာ … မေ့ရင်သားတွေက … ပိုပြီး … ဆူကြွလာတယ် … ရင်ထဲမှာ … လှိုက်ကနဲ ဖိုကနဲ … ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် … မောင် ဆိုးတယ် … တသက်မမေ့အောင် … မောင် … ချစ်ပြတယ် … နမ်းတယ် … ချစ်ဦးသူရဲ့ … အယုအယမှာ … မေ့ စိတ်တွေ ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်နေတယ် … မောင်က … သူ့အိမ်ကို … ခေါ်သွားတယ် … မေ မငြင်းမိ …
ဒီအိမ်မှာ … မောင် တယောက်ထဲ နေတာ … မေ မသိ … သိခဲ့ရင်တော့ … လိုက်ဖြစ်မယ်မထင် … တကယ်ပါပဲရှင် … စိတ်ကွယ်ရာအရပ်မှာ … ချစ်ရသူနဲ့ … အတူရှိနေတော့ … စိတ်တွေက ယိမ်းယိုင်နေတယ် … မောင့်ကို … ချစ်တယ် … မောင်ကလည်း … ချစ်ချင်နေတယ် … မေကလည်း … အချစ်ခံချင်နေပြီ … မဖြစ်ဘူး … မေက … မြန်မာမိန်းကလေး … အပျိုစင်ဆိုတာ … တန်ဖိုးထားရမယ် … အိမ်ထောင်မပြုမချင်း … ထိန်းသိမ်းထားရမှာက … မေ့တာဝန် … သိပ်ချစ်လို့ … ပေးလိုက်ပြီး … မတော်တဆ … ဝေးကွာသွားရင် … အို … မေ မတွေးရဲဘူး …
တထပ်တိုက်လေး … မေ … လျှောက်ကြည့်တယ် … နောက်ဖေးမှာ ရေကူးကန်ရှိတယ် … စကားတွေ လျှောက်ပြောတယ် … ဧည့်ခန်းလေးကလည်း … ရိုးရိုးလေး … လှတယ် … မောင့်အခန်းက … မဆိုးပါဘူး
… သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ … မောင်က စည်းကမ်းရှိတယ် … မေ … လျှောက်ကြည့်ရင်း … မောင် အခန်းတံခါးပိတ်လိုက်တယ် … မေ … တအားလန့်သွားတာပဲ … မောင် … မေ့ကို … နမ်းတယ် … နည်းနည်း ကြမ်းချင်တယ် … မောင့်မျက်လုံးတွေက … အရောင်ပြောင်းနေတယ် … မေ့ကို … တအားဖက်ထားတယ် … လျှောက်ပြီးတော့ ပွတ်သပ်နေတယ် … မောင်ဆိုးတယ် … မေ … အိပ်ယာပေါ်ကို … လဲကျသွားတယ် … မောင် … မေ့ကို … ချွေတော့မှာလား … မေ မသိ … ဘာမှမသိတော့ဘူး …
မောင့်အနမ်းတွေက … မေ့ကို တခြားကမ္ဘာဆီ ခေါ်ဆောင်သွားတယ် … မောင်ရယ် … မေရယ် … နှစ်ယောက်ထဲ … မေ့ ရင်စေ့အင်္ကျီလေးက … ကြယ်သီးတွေ … တလုံးချင်း ပြုတ်သွားတယ် … မေ့ ရင်တွေ လှပ်ကနဲ ပေါ်လာတယ် … ဘော်လီအောက်မှာ … မေ့ရင်သားတွေက … ရုန်းကြွနေတယ် … သိပ်တော့ မကြီးပါဘူး … ဒါပေမယ့် … လှတယ် … မောင်ပြောတယ် …
“အရမ်းလှတယ်ကွာ” တဲ့ …
မောင် … နမ်းတယ် … နှုတ်ခမ်းမွှေးက … စူးတယ် … မေ … ယားတယ် … ကြက်သီးတွေလည်း … ထကုန်တယ် … မောင် … အတင်းပဲ … ဘော်လီကြိုးကို … လိုက်စမ်းတယ် … ဖြုတ်ချင်တယ်တဲ့ … အို … မေ မသိတော့ဘူး … မောင်ရယ် … ဖွက်ထားတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … မောင်ချစ်သမျှ … လှိုင်းထနေတယ် … မေ့ ရင်ထဲမှာ … ငိုချင်တယ် … ရီချင်တယ် … ရမက်တွေက ထန်လာတယ် … မောင်ရယ် … မောင် … မေ့ … ရင်သားလေးကို … စို့တယ် … မေရှက်တယ် … မောင်ရယ် … ကလေးလေးကို … မောင်စို့တော့ … မေ့အသဲထဲမှာ အရမ်းယားတယ် … မောင့်ခေါင်းကို … အတင်းဖက်ထားမိတယ် … မောင့်လက်မောင်းကို … အတင်းဖက်ထားမိတယ် … မောင် … မလွယ်ဘူး … လက်တွေက အငြိမ်မနေဘူး … လျှောက်ပွတ်နေတယ် … အို … မေ့ပေါင်လေးကို … မောင် ပွတ်တယ် … မေ … မေ … မနေတတ်ဘူး … မောင်ရယ် … မေ … ထမီလေးကို … သူချွတ်တယ် … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … မေ … မပေးနိုင်ဘူး … မေ မပေးချင်ဘူး … မေ ငေါက်ကနဲ ထထိုင်တယ် … အ၀တ်တွေ အမြန်ဝတ်ပြီး … အခန်းထဲက … ပြေးထွက်လာတယ် … မေ … စောင့်ထိန်းရမယ်လေ … မောင့်ကိုလည်း ချစ်ပါတယ် … မေ မပေးရက်ဘူး …
နောက်နေ့ … မေ … အောင်ပန်းပြန်တယ် … မောင် … လိုက်ပို့တယ် … စိတ်တော့ မကောင်းဘူး … မေ … ငိုမိတယ် … မောင်လည်း … မျက်ရည်ဝဲနေတယ် … မေ့ရဲ့ တဦးတည်းသော အကိုကြီး … ကိုကို လာခေါ်တယ် … လိမ္မော်ခြံကို … ပြန်လာတော့ … မေ သိပ်မပျော်ဘူး … မောင့်ကို လွမ်းတယ် … ကိုကို့မိန်းမကတောင် … စနေသေးတယ် … ရန်ကုန်က … ရီးစားကို လွမ်းနေတာလားတဲ့ … ဟုတ်ပါဘူးလို့ … လိမ်ပြောလိုက်ပေမယ့် … မေ့ပါးလေးက ရဲနေတယ် … ကလေးလေးက … ငိုနေတော့ … စကားစပြတ်သွားတယ် … ဒီလိုနဲ့ … တလကျော်တော့ … မောင့်ဆီက စာ တစောင်လာတယ် … အရမ်းလွမ်းတယ်တဲ့ …
ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့နေ့ … ကိုကို … တောင်ကြီးတက်သွားတယ် … မိုးရွာတယ် … အေးစိမ့်နေတာပဲ … မေ … ထင်းပုံကို …
မီးထပ်ထည့်တယ် … ကိုကို့ကလေးက … အိပ်နေပြီ … ယောင်းမလည်း … အိပ်ပျော်နေတယ် … မေ … အိပ်လို့မရဘူး … အိမ်ကို ဓါးပြလာတိုက်တယ် … ဒုက္ခပဲ … ကိုကိုလည်း မရှိဘူး … သုံးယောက် … ရှိတာအကုန်ထုတ်တဲ့ … ယောင်းမက … လန့်နေတယ် … မေက … မကြောက်ဘူး … ယောင်းမကိုပဲ စိုးရိမ်တာ … သွေးနုသားနုနဲ့ … တခုခုဖြစ်မှာပဲ စိုးတာ …
ရှိသမျှ ပစ္စည်း … ထုတ်ပေးပါတယ် .. အေးအေးဆေးဆေး ပြန်တော့လို့ … မရဘူး … မေ့ကို … ပါးရိုက်တယ် … လျှာမရှည်နဲ့ … အင်္ကျီချွတ်တဲ့ … လွန်တယ် … မေ အရမ်းရှက်တာပဲ … ငြင်းတော့ … ပါးထပ်ရိုက်ခံရတယ် … တယောက်က မေ့ကို … ချုပ်တယ် … တယောက်က အတင်းချွတ်တယ် …
မေ့ရင်သားတွေကို … အတင်းနယ်တယ် … မေ့ပန်းလေးထဲ … သူတို့ အတင်းထည့်တယ် … နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး … မောင်ရယ် … မောင် လိုချင်တာ မပေးမိတာ … မေ မှားတယ် … မေ အရမ်းမှားတယ် … တကယဆ်ို … မောင့်ကို ပေးလိုက်ရမှာ … အခုတော့ … အခုတော့ … မေ့ရဲ့ အပျိုပန်းလေး … ကြွေမွသွားပြီ … နွမ်းလျသွားပြီ … တယောက်ပြီးတော့ တယောက် … ငရဲပဲ …
သေချင်တယ် … မေ အရမ်းငိုတယ် … မေ ငိုလေ … သူတို့ ပိုလုပ်လေပဲ … ပြဲကွဲကုန်တယ် … အရမ်းနာတယ် … အားမရဘူးတဲ့ … တဏှာရူးတွေက … မေပြီးတော့ … ယောင်းမဘက်ကို …
မြှားဦးလှည့်သွားတယ် … သွေးနုသားနုနဲ့ … ယောင်းမကို … ၀ိုင်းလုပ်ကြတယ် … မေ တားတော့ … မေ့ကို ၀ိုင်းကန်ကြတယ် … လိမ့်နေတာပဲ … လူယုတ်မာတွေ … ယောင်းမကို … ၀ိုင်းလုပ်ကြတယ် … သွေးနုသားနု … မိန်းကလေးကို … အရသာခံကြတယ် … ရွံလိုက်တာ … ဒေါသထွက်လိုက်တာ … သတ်မယ် … ဒင်းတို့ကို သတ်မယ် … အားလုံးပြီးသွားတော့ … ယောင်းမနဲ့ … မေ ဖက်ပြီး ငိုကြတယ် … ငိုရလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေတောင် မထွက်တော့ဘူး … ငိုရလွန်းလို့ … ရင်တွေ နာနေတယ် … ငိုရလွန်းလို့ … အရမ်းမောတယ် … မေ အိပ်ပျော်သွားတယ် … မှေးကနဲ … တချက်ဖြစ်သွားပြီး … ပြန်နိုးလာတော့ …
ယောင်းမက … သေနေပြီ … ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆွဲကြိုးချပြီး သေနေတာ … တောက် … မေလည်း …
လိုက်သေချင်တယ် … ယောင်းမနောက်လိုက်ချင်တယ် … ခက်တာက … ကလေးလေး … ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိသေးတယ် … နို့ဆာလို့လား … ချမ်းလို့လား … မသိပါဘူး … ငိုနေတယ် … မေ သနားတယ် …
ကလေးကို ချော့ရင်း … ကိုကို ပြန်လာတာကို စောင့်နေတာ … တရက်နှစ်ရက်နေတော့ … သတင်းက တော်တော်ဆိုးတယ် … ကားက … ဂျောက်ထဲကျသွားတယ်တဲ့ … မီးလောင်တယ် … လူသေတယ် ..
လက်စားချေမယ် … မမေ့ဘူး … မုဒိန်းကောင်တွေ လက်မှာ ထိုးထားတဲ့ တက်တူးပုံက … မြွေ … တြိဂံထဲမှာ
မြွေပါးပြင်းထောင်နေတဲ့ပုံ … သေတောင် မမေ့ဘူး … အားးးးးးးး
သက်အောင် … သက်အောင် … နင့်ကို ငါမိလို့ကတော့ … အရေပြားကို တမျှင်ချင်း ခွာပစ်မယ် … ဟုတ်ပြီ ..
တဏှာရူးကို … ထောင်ဖမ်းရမယ် … တောက်
ဒေါ်လေး အပြင်ကနေ … ဖုန်းဆက်တယ် … လှမြတ်ကိုင်လိုက်တော့ … ဟိုခွေးကောင်ဆီကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ညွှန်ကြားတယ် … ပြီးရင် … ဘာဆက်လုပ်ဖို့ … အိုကေ … မျက်နှာသစ် အ၀တ်လဲပြီး … ဒေါ်လေးမေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း … ဟိုလူယုတ်မာကို … လှမြတ် …. ဖုန်းဆက်လိုက်သည် … အသံက ခပ်ညုညု …
“ဟယ်လို … အကိုကြီးလား … ”
“ဟယ်လို … ဘယ်သူလဲဟင် …”
“ဟွန့် … အကိုကြီး … သူဇာ့ကို …. မေ့သွားပြီလား … အကိုကြီးနော် … ဟွန့်” လှမြတ် ညုတုတုနဲ့ … အီလိုက်သည် …
“မေ့စရာလား သူဇာရယ် … ညတုန်းက … အိမ်မက်ထဲမှာတောင် … သူဇာလာသေးတယ် …”
“ခစ် … ခစ် … ဟုတ်လို့လား … ဒါဆို … xxx ကော်ဖီဆိုင်မှာ စောင့်နေမယ်နော် … အခုလာခဲ့”
“ကော်ဖီတော့ သောက်ချင်ဘူးကွာ …”
“အို … အကိုကလည်း … အကို စားချင်တာ … သူဇာ ကျွေးမှာပေါ့ …” လှမြတ် … ခပ်ချိတ်ချိတ်လေး … ပြောရင်း … ရွံလိုက်တာ … ထွီ …
“တကယ် ကျွေးမှာလား …”
“တကယ်ကျွေးမှာပေါ့ … ဒါပဲနော် … ဒီည အိမ်မပြန်ရဘူး … ဘိုင့်”
လှမြတ် အစာကြီးကြီး ပစ်ကျွေးလိုက်တယ် … လှမြတ် … ခပ်မိုက်မိုက် …. ရင်သားအလှပေါ်တဲ့ အ၀တ်မျိုး ရွေးဝတ်လိုက်တယ် … ဂါဝန်တိုတိုလေး ၀တ်လိုက်တယ် … တင်တွေ ရင်တွေ ထင်းကနဲ ပေါ်အောင် … အတွင်းခံတွေကို … တင်းပစ်လိုက်တယ် … ဟင်း ဟင်း… ပန်းရောင် နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတယ် … ရွှေရောင် ဒေါက်ဖိနပ်စီးတယ် … နားကွင်းကြီးကြီး ၀တ်တယ် … အိုကေ … မိုက်တယ် …
ကော်ဖီဆိုင်ရောက်တော့ … ဟိုလူယတ်ုမာ စောင့်နေတယ် … မြန်လိုက်တာ … မိန်းမ ဆိုတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ ငမ်းငမ်းတက်ဖြစ်နေတာ … ဒီတယောက်ပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ် … တွေ့မယ် … အိမ်ရောက်လို့ကတော့ … ဟင်း …
လှမြတ် ၀င်လာကတည်းက … ဦးသက်အောင် … ရင်တွေ ခုန်အောင် … ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လျှောက်ပစ်လိုက်တယ် … မပွင့်တပွင့်ပြုံးတယ် … မထိတထိပေါ့ …
“အကို … ရောက်တာ ကြာပြီလား …”
“ဟင်းအင်း … အခုပဲ … အရမ်းလှတယ် …”
“ဟုတ် … ကျေးဇူး အကို … ဘာစားမလဲ …”
“ကျွေးမှာပေါ့ … ဟင်း … ဟင်း …”
သူဇာ … ခပ်ညုညုလေးပြောရင်း … သူ့ကို … စိုက်ကြည့်လိုက်သည် … သူလည်း … စိတ်တော်တော် ပါနေတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ … လှမြတ် ရင်နှစ်မွှာကို … ငမ်းငမ်းတက်ဖြစ်နေတယ် … မျက်လုံးက အရောင်တွေလက်နေတယ် …
“သူဇာ … ကိုယ့်ရုံး ခဏလိုက်ခဲ့မလား …”
“အွန် … ကြာမှာလား …”
“မကြာပါဘူး … နာရီဝက်လောက်ပဲဟာကို …”
“ဟင့်အင်း … မရဘူးကွာ …”
“ခဏလေးပါ … သူဇာရယ် … အရေးကြီး ဧည့်သည် ချိန်းထားလို့ပါကွာ …”
“အိုး … မရဘူးကွာ … အခုလိုက်ခဲ့ … ဘာလဲ … သူဇာက .. အရေးမကြီးဘူးလား …” လှမြတ် … ခပ်ဆိုးဆိုးလေး … ပြောလိုက်တယ် … နှုတ်ခမ်းက စူလို့ … ဦးသက်အောင် … မနေနိုင်တော့ …
“အင်းပါ … အင်းပါ … ဖုန်းခဏဆက်လိုက်အုံးမယ် … စိတ်မဆိုးပါနဲ့ … သူဇာရယ် … နော် …” ဦးသက်အောင် … ဖုန်းဆက်ရင်း … မျက်နှာကြီး ကျုံ့သွားတယ် … ဒေါတွေ ပွလာတယ် … မျက်နှာကြီးနီလာတယ် … လှမြတ် … ထင်တယ် … ပိုက်ဆံတွေ ပျောက်သွားတာ … သူ သိသွားပြီ … ဟား ဟား … မိုက်တယ်ကွာ … ခစ် … ခစ် … သူ … ဖုန်းချလိုက်တယ် …
“အကို … ဘာတွေ စိတ်ဆိုးနေတာလဲ …”
“သူဇာလေး … ကိုယ် ရုံးခဏသွားမှ ဖြစ်မယ် …”
“ဟွန့် … ရုံးမှာ ဘာဖြစ်နေလို့လဲ … ဒေါသမထွက်ရဘူးလေ …”
“ဆောရီး … ပြဿနာလေး နည်းနည်းရှိလို့ပါ …”
“ဘယ်လောက် ကြာမှာလဲဟင် … ”
“တနာရီလောက်ပါပဲ … ”
“ဒါဆို … ဒီလိုလုပ် … သူဇာ … အိမ်ကနေပဲ စောင့်နေတော့မယ် …”
“အင်း … ကျေးဇူး”
“တနာရီကျော်သွားရင်တော့ မလာနဲ့တော့နော် … တသကလ်ုံး မလာနဲ့တော့ … မခေါ်တော့ဘူး”
“ဟား … သူဇာက … စိတ်တအားကြီးတာပဲ … လာမှာပေါ့ … စိတ်ချ …” လှမြတ်နဲ့ ဦးသက်အောင် … ကော်ဖီဆိုင်ကနေ လမ်းခွဲလိုက်တယ် … မလာပဲမနေနိုင်အောင် … နည်းနည်း ထပ် အီလိုက်သေးတယ် … ဟွန့် …
ပန်းဆိုးတန်းက … စာအုပ်တန်းမှာ … လျှောက်ကြည့်နေတုန်း … ဒေါ်လေးဖုန်းဝင်လာတယ် …
အစီအစဉ်ပြောင်းမယ်တဲ့ … အခုချက်ခြင်း … ဟိုလူ့ဆကီို ဆက်ပါတဲ့ … ဟုတ် … ဒေါ်လေး အသံက တုန်နေတယ် … ဘာဖြစ်တာလဲမသိပါဘူး …
“အကို … သူဇာ … ကားလွှတ်ထားတယ်နော် …”
“ဘာ … အင်းလဲ … စိတ်မပါဘူးလား …”
“ဆောရီးပါ … သူဇာရယ် … အခု ဆင်းတော့မယ်နော် …”
“လာခဲ့နော် … သူဇာ စောင့်နေတာ ပျင်းတောင် ပျင်းလာပြီ …”
“အိုကေ … ခဏလေးပါ … သူဇာလေးရယ် … အခု လာပြီ … အခုလာပြီ …
“အင်း … ဒါမှ … တို့ အကိုကွ … ရွှတ်”
လှမြတ် … ဦးသက်အောင်ကို … ဖုန်းဆက်ပြီး … မလာလာအောင် … ဆွယ်လိုက်သည် … ဒေါ်လေး သွားခေါ်လိမ့်မည် … အိမ်မှာ … အထူးဧည့်သည် ရောက်နေတယ်တဲ့ … သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့ … အင်း … ဦးသက်အောင်ကို … ဒေါ်လေး အပြတ်ရှင်းတော့မယ် … ခက်တယ် ဒေါ်လေးရယ် … ခက်တယ် …
မေ … ဦးသက်အောင် … ကုမ္ပဏီအောက်မှာ မာစီဒီးကားရပ်ထားရင်း … ဦးသက်အောင် … ဆင်းလာတာကို စောင့်နေသည် … တွေ့ကြပြီပေါ့ … သက်အောင်ရယ် … ကမ္ဘာမကြေတဲ့ အငြိုးတွေကို … ဒီနေ့ နင့်ဆီက … အကုန်ပြန်တောင်းရတော့မယ် … ဟင်း … ဟင်း …
သူဆင်းလာသည် … မတွေ့တာ ကြာပေမယ့် … သေလောက်အောင် … မမေ့ဘူး … လူယုတ်မာ … မေ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး … အချိုသာဆုံး ပြုံးပြလိုက်သည် …
“ဦးသက်အောင်လားရှင့် … သူဇာ လွှတ်လိုက်တာပါရှင့် …” “ဟုတ်လား … အိုကေ …”
မေ … သူ့ကို … ကားနောက်ခန်း တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်သည် … သူက … မေ့ကို … စိုက်ကြည့်နေသေးသည် … သူက … မေ့ကို မမှတ်မိ … ဟင်း … ဟင်း … နင်က … ငါ့ကို မမှတ်မိသေးရင် … ခဏနေရင်တော့ …
နင် ငါ့ကို မှတ်မိအောင် … လုပ်ပြရတော့မှာပေါ့ … သူ့တပည့်တွေက … ကားပေါ်လိုက်မယ် … ပြင်နေတုန်း … ဦးသက်အောင်ကို … မေ ပြောလိုက်သည် …
“ဦးသက်အောင်ရှင့် … သူဇာက … ဦးသက်အောင် တယောက်ထဲပဲ … ခေါ်လာရမယ်လို့ …
“ဟုတ်သားပဲ … ဟေ့ကောင်တွေ … နေခဲ့ကြ … အိမ်ကိုပဲ ငါပြန်လာခဲ့မယ် …” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီး”
“ခါးပတ်ပတ်ပေးပါရှင့် …” “လိုလို့လား …”
“ဟုတ်ကဲ့ … သူဇာ မှာလိုက်တာပါ … ကားကိုလည်း သေချာမောင်းရမယ် … ဦးသက်အောင်ကိုလည်း … ခါးပတ်ပတ်ခိုင်းပါတဲ့ … တခုခုဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါရှင့်”
“ဟား … သူဇာလေးကတော့ … ကွာ … ငါ့ကို … တော်တော်ဂရုစိုက်တာပဲ …”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … မနေ့ညက … သူဇာလေးက … တော်တော်ပျော်နေတယ်ရှင့် …” “ဟုတ်လား …”
“ဟုတ်ကဲ့ … ရီးစားဦးနဲ့ တွေ့လာသလိုပဲ … မျက်နှာက … ပြုံးရွှင်နေတာပဲ …” “ဟုတ်လား … ဟား ဟား ဟား”
မေ … ကားကို … ခပ်သွက်သွက်လေး … မောင်းထွက်လိုက်သည် … ပြည်လမ်းရောက်တော့ … ကားကို … အရှိန်မြှင့်လိုက်သည် …
“ဟေ့ … ဘယ်ကိုမောင်းနေတာလဲ …”
“ထောက်ကြန့်က … သူဇာ့အိမ်ကို … သွားနေတာရှင့် …”
“အော် … သူဇာက … အဲဒီမှာလား …”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … အကို့အတွက် … တအိမ်လုံးကို … ညတွင်းချင်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင့်” “တယ်ဟုတ်ပါလား … ဟား ဟား ဟား”
မေ … ကားနောက်မှန်ကနေ … ဦးသက်အောင်ကို … ကြည့်ပြီး … မဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်သည် … သက်အောင် … သက်အောင် … နင့်ကို … ခါးပတ်ပတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ … နင်ထွက်ပြေးမှာစိုးလို့ ပတ်ခိုင်းထားတာ …
နင့်အတွက် … ရှယ်ပြင်ဆင်ထားတယ် … ကြိုးက … ဓါးနဲ့ ဖြတ်လည်း ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး … မေ မဖွင့်ပေးမချင်း … ကြိုးကိုဖြုတ်လို့ရမယ်များ … ထင်နေလား … ဟင်း … ဟင်း … ဒင်းကတော့ ပျော်နေတယ် … သူဇာလေးနဲ့ မျှားလိုက်တော့ … ပျော်ပျော်ကြီးလိုက်လာတာပေါ့ …
ထောက်ကြန့်ရောက်တော့ … မြေနီလမ်းလေး တခုကို ချိုးကွေ့လိုက်သည် … မေ … တချက်မဲ့ပြုံးပြုံးမိသည် … မြေနီလမ်းတလျှောက် သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်များနှင့် အုံ့ဆိုင်းနေသည် … လမ်းအဆုံးမှာ …
ရှေးဟောင်းနှစ်ထပ်အိမ်ကြီး … ခြံတံခါးက သံကနုတ်ပန်းတွေက … လှသည် … ခန့်သည် … မေ …
ကားပေါ်က ခလုတ်တခုကို နှိပ်လိုက်တော့ … ခြံတခါးက … သူ့အလိုလို ပွင့်လာသည် … နောက်မှန်ကနေ … ဦးသက်အောင်ကို … ကြည့်တော့ … အထင်ကြီးသွားသည့် မျက်နှာ … ဟား ဟား …
ရှေးဟောင်းအိမ်ဆိုပေမယ့် … အားလုံးက သပ်သပ်ရပ်ရပ် … မေ ဆင်ဝင်အောက်မှာ ကားရပ်လိုက်သည် … စက်ရပ်ပြီး … အနောက်တံခါးကို ဆင်းဖွင့်ပေးလိုက်သည် …
ဦးသက်အောင် … ဆင်းလာပါသည် …
“သူဇာလေးကော … ”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … အပေါ်ထပ်မှာ စောင့်နေပါတယ် … အထဲကြွပါအုံး …”
မေ … ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်သွားသည် … အ၀င်တံခါးကြီးက … အတော်ကြီးသည် … ဆယ်ပေလောက် ရှိမည် ထင်သည် … တံခါးကြီးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး … လူယုတ်မာ … ၀င်ဖို့ … လမ်းဖယ်ပေးလိုက်သည် … ဦးသက်အောင် ကြောင်သွားသည် … အိမ်ထဲတွင် ဘာမှ မရှိ …
“ဟေ့ … ဘာမှလဲမရှိပါလား …” “ရှိပါတယ်ရှင့် …”
မေ ရီမုတ်ကွန်ထရိုးကို နှိပ်လိုက်ရာ … တခန်းလုံး … အမှောင်ကျသွားသည် …
“ဟေ့ … ဘာလို့ မီးတွေ မှိတ်လိုက်တာလဲ”
ဦးသက်အောင် ပြောနေတုန်း … အပြာရောင်မီးရောင် ဖျော့ဖျော့လေး လင်းလာသည် … လှသည် … ကြမ်းပြင်သည် … တဖြေးဖြေး နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြီး … ပြာလဲလဲ့ ရေပြင်သည် … ပေါ်ထွက်လာသည် … ရေကန် … ရေကန်အောက်မှလည်း … လှပတဲ့ အလင်းရောင်များ ပေါ်ထွက်လာသည် … လှသည် … မိုးပေါ်မှာ ကြယ်လေးတွေ … မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ် …
“အော် … တော်တော်လှတာပဲ …”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … အ၀တ်တွေ ချွတ်လိုက်ပါအုံးရှင့်”
“ဘာ … အ၀တ်တွေ ချွတ်ရမယ် …”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … ခဏနေ … သူဇာလေး ဆင်းလာပြီး … အကိုနဲ့ ကန်ထဲမှာ ရေကူးကြမယ်တဲ့ … အကိုက ကန်ထဲကနေ … စောင့်နေပါတဲ့ … ”
“အိုး … ဟိုး … တယ်ဟုတ်ပါလား … အိုကေ …”
မေ … ကောက်ကျစ်စွာ ပြုံးလိုက်သည် … ဟား ဟား … ရေကန်က သိပ်လှတာပေါ့ … အောက်က အကောင်တွေ လွှတ်ပေးလိုက်ရင် … ပိုလှမယ် … မေ … သက်အောင်ကို … စောင့်ကြည့်နေတယ် … သူက ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းမဖြစ် … ခပ်တည်တည်နဲ့ အ၀တ်တွေ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ … မေ့ကို စိုက်ကြည့်တယ် … မေ ရှက်သလိုလိုနဲ့ ဟဘိုက်လှည့်ပြီး …
“အကို … ရေကန်ထဲ ဆင်းနေပါတော့ … သူဇာ့ကို သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ် …” “အိုကေ … မြန်မြန်ခေါ်လာခဲ့နော် …”
၀ုန်းကနဲ … သက်အောင် … ရေကန်ထဲ ဆင်းသွားသည် … အိုကေ … မေ … ခပ်သွက်သွက်လေး … ရီမုတ်က ခလုတ်တခုကို … နှိပ်လိုက်သည် … ဟား ဟား ဟား … မေ အားရပါးရ ရယ်လိုက်သည် …
ခုနက … ကြမ်းပြင်သည် … တဖြေးဖြေး ပြန်ပိတ်သွားသည် … ခံ … သက်အောင်ရေ … လူယုတ်မာရေ …
သိပ်လှတဲ့ ရေအောက်မှာ … နင့်ကို … ငါးမိနစ်လောက်တော့ နှစ်ထားအုံးမယ် … အသက်ရှုလို့မ၀တဲ့ ဒဏ်လေးကို … ခံစားကြည့်လိုက်ပေါ့ … ပြီးရင်လား … ဟဲ ဟဲ … နင့်ကို … ငါးစာ ကျွေးပစ်မယ် … အသားစားကျူးတဲ့ … အာဖရိက ငါးခူတွေ … ဟော … ထွက်လာပါပြီ … အကောင် သုံးဆယ်ကျော်ပေါ့ …
ဟား ဟား ဟား …
သက်အောင် … သက်အောင် … နင် ငါ့ကို … ယုတ်မာတုန်းက … ငါ့အသားတွေ တဆစ်ဆစ်နာခဲ့ရသလို … နင်လည်း အခုငါ့လို ခံစားရတော့မယ် … ဟား ဟား ဟား … ဦးသက်အောင်က … ရေထဲ ငုပ်သွားပြီး … ပြန်တက်လာတော့ … တက်လို့မရ … ကြမ်းခင်းကို … ပိတ်ပစ်လိုက်တော့ … ခေါင်းတောင် ဖော်လို့ မရ … မွန်းနေသည် … ဟား ဟား ဟား … အသက်ရှူလို့မရ … ဟား ဟား ဟား … မေ … ရေကန်က ရေတွေကို လျှော့လိုက်သည် .. ဟဲ … ဟဲ … အခုချက်ခြင်း သေသွားရင် … ဦးသက်အောင် … ဘုမသိဘမသိ သေသွားတော့ … မမိုက်ဘူးလေ … နည်းနည်းလေး ထပ်နှိပ်စက်လိုက်အုံးမယ် …
အာဖရိက … ငါးခူတွေ … ဦးသက်အောင်နားမှာ … ကူးခတ်နေသည် … အစကတော့ … သူတို့လည်း … မကိုက်ရဲ … တောကြည့်တောင်ကြည့် … နောက်တော့ … အနားပိုကပ်လာသည် … ဦးသက်အောင် … မောင်းထုတ်သည် … ခြေနဲ့ ခတ်သည် … လက်နဲ့ ရိုက်သည် … ဟိုကောင်တွေ ဒေါသထွက်လာကြသည် … အသားနာတော့ … ဒေါသထွက်လာကြသည် … တွတ်ပြီ … အ၀တ်အစားမရှိ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ … လူယုတ်မာကို … တွတ်ကြပြီ … ကန်သည် … ကြောက်သည် … သွေးတွေ ထွက်လာသည် … ငါးခူတွေကလည်း … တွတ်သည် … ဟား ဟား ဟား …
မေ … မြေအောက်ခန်းက … သံလက်သီးကို … လက်မှာ စွပ်လိုက်သည် … အိုကေ … နံပါတ်ဒုတ်တချောင်း ယူလိုက်သည် … ရိုက်မယ်လေ … ခေါင်းကို ခွပ်ကနဲ နေအောင် ရိုက်ပစ်လိုက်မယ် … အပေါ်ကို …
ပြန်တက်လာပြီး … ကြမ်းခင်းကို ပြန်ဖွင့်လိုက်သည် … ဟား ဟား … သက်အောင်. …
အတင်းတက်လာသည် … ဟောဟဲ ဟောဟဲနဲ့ … အသက်ရှုလို့ မ၀ … ရှူ … အားရအောင် … တကိုယ်လုံး … အပေါ်ရောက်လာတာနဲ့ … မေ .. အပေါ်ကနေ … စီးပြီး … လက်မောင်းကို တချက် ရိုက်ပစ်လိုက်သည်
အော် … သူ့အသားနာတော့ … အော်တတ်တယ်ပေါ့ … ကဲဟယ် … ဘယ်ပြီးတော့ ညာ …
အားးးးး ဟား ဟား ဟား … လက်ပြီးတော့ … ခြေထောက်ပေါ့ … ကဲဟယ် …
“အားးးးးးး … မင်းဘာလို့ ငါ့ကို … ဒီလိုလုပ်တာလဲ … အားးးးးးး”
မမေးနဲ့ … ထပ်ရိုက်အုံးမယ် … လျှာတော်တော် ရှည်တယ် … ရော့ နှစ်ချက် … မေ … အားကုန်ရိုက်သည် … သက်အောင် … ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အပုံလိုက် … မထနိုင်တော့ …
“ဟား ဟား … ထပါအုံး … လူယုတ်မာကြီးရဲ့ …”
“ဘာ … မင်း … မင်း … လူမှားနေပြီနဲ့ တတူယ် …”
“မမှားဘူး … လူယုတ်မာရဲ့ … မှတ်မိသေးရဲ့လား … ငါ့ကို … သေချာကြည့်စမ်း …”
မေ … သက်အောင် … ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး … မျက်နှာကို ဆွဲမော့လိုက်သည် … ထွီ … ရွံဖို့ကောင်းလိုက်တာ … မေ … တံတွေးနဲ့ … ထွေးပစ်လိုက်သည် …
“မင်း … မင်း …”
“ဟုတ်တယ် … ဟုတ်တယ် … ရှင်မှတ်မိပြီပေါ့လေ … ဟား ဟား … ရော့ … မှတ်မိတဲ့အတွက် … တချက်
မေ … သူ့ခါးကို … ထပ်ရိုက်ပစ်လိုက်သည် …
“နာတယ် … တော်ပါတော့ … ငါ တောင်းပန်ပါတယ် … တောင်းပန်ပါတယ် …”
“ဘာတောင်းပန်ပါတယ်လဲ … အရမ်းယုတ်မာတဲ့ … လူယုတ်မာ … ကဲ ဟယ် …”
မေ … အရမ်းဒေါသထွက်နေတော့ … သူ့မျက်ခွက်ကို … သံလကသ်ီးနဲ့ ထိုးပစ်လိုက်သည် … ခွပ် … အားးးးးးးးး
သက်အောင် … ပါးစပ်က … သွေးတွေ ဖြာကနဲ ကျသွားသည် … လူယုတ်မာ … ကဲဟယ် … ကဲဟယ် … ယား …
မေး … ထိုးသည် … ရိုက်သည် … နှက်သည် … ဘယ်နှချက်မှန်းမသိ … ဟူး … လူယုတ်မာ …
မေ့သွားပြီလား … နေအုံး …. နင်သေလို့ မရသေးဘူး … မေ … ဆံပင်ဆွဲပြီး … ဒရွတ်တိုက် … မြေအောက်ခန်းကို … ခေါ်သွားသည် … သွေးတွေက … ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ … မြင်လို့ မကောင်း …
အစင်းလိုက်ကြီး … ဟား ဟား … ကောင်းတယ် …
မေ … မြေအောက်ခန်းရောက်တော့ … ဒင်းကို … ခုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည် … ခြေထောက်တွေ … လက်တွေကို … ကြိုးတုပ်လိုက်သည် … ကုတင်ပေါ်မှာ … သက်အောင်က … ကားယား … ရုန်းလေ … ဘယ်ရမလဲ … ဟူး … မောလိုက်တာ … မေ … ရေခဲသေတ္တာထဲက … ရေတဗူး … ထုတ်သောက်လိုက်သည် …
ရေခဲရေက … အမောပြေစေသည် … ဒါပေမယ့် … ရင်ထဲက အမုန်းတရားကို … ပြေစေမှာ မဟတု …
အောင်မယ် … ဒင်းဟာကြီးက … ငါ့ကို … လာလှောင်နေတယ်ပေါ့ … တွေ့မယ် … တွေ့မယ် … ရေခဲရေနဲ့ … သူ့မျက်နှာကို … ပက်ပစ်လိုက်သည် … သက်အောင် … လန့်နိုးလာသည် … ဟား ဟား … ရုန်းတယ်ပေါ့ … ကဲဟယ် … မေ … သူ့ရင်ဘတ်ကို … ထပ်ရိုက်ပစ်လိုက်သည် …
အော် … ကြိုက်သလောက်သာအော် … ဟဲ့ အကောင် … နင်ယုတ်မာတုန်းက … အရမ်းကောင်းတယ်ဆို … ကဲဟာ …
မေ … ရိုက်ရတာ အားမရ … ကြာပွတ်တခု ကောက်ကိုင်လိုက်သည် … ကြာပွတ်က ရိုးရိုးမဟုတ် … ဘရိတ်ဒါးတွေ အတွဲလိုက်ချည်ထားသော … ကြာပွတ် … ထိလို့ကတော့ … ရွှတ်ကနဲ … ရွှတ်ကနဲ အသားတွေ … ဟား ဟား ဟား …
“မလုပ်ပါနဲ့ … မလုပ်ပါနဲ့ … တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ …”
“လူယုတ်မာ … သူများအိမ်ကို ဓါးမြတိုက်တယ် … လူကို အားရအောင် ဖျက်စီးတယ် … ကဲ ဟာ … ရွှမ်း … လာတောင်းပန်မနေနဲ့ … ကဲ ဟာ … ရွှမ်း ..”
“အောင်မလေးဗျာ … အားးးး … အောင်မလေးဗျာ … တောင်းပန်ပါတယ် … တောင်းပန်ပါတယ် … အားးးး
… . …အားးးး … …. အားးးး … ”
မေ … အားရအောင် … အဆက်မပြတ် ကျာပွတ်နဲ့ … ရိုက်ပစ်လိုက်သည် … သွေးတွေ … လူယုတ်မာ တကိုယ်လုံး … သွေးချင်းချင်း နီသွားသည် … အော်လိုက်တာလည်း … မပြောနဲ့ … လူယုတ်မာ …
နင့်အလှည့်တုန်းက … အားရအောင် … လုပ်ထားတာ … အခုတော့ … ခံ … မသေမချင်းခံ … ဟား ဟား ဟား …
“တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ … နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး … နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး …”
“ခွေးမသား … လူယုတ်မာ … သူများသားပျိုသမီးပျိုကို ဖျက်စီးတဲ့ကောင် … နေအုံး … နင် အရမ်းနာလား
“နာတယ် … အရမ်းနာတယ် …”
“အေး … နာတယ်ဆိုရင် … ဆေး ဖြန်းပေးရမှာပေါ့ …” “အောင်မလေးဗျာ … စပ်တယ် … စပ်တယ် … အား … အား …”
စပ်မှာပေါ့ … အရက်ပြန်လောင်းချလိုက်တာကိုး … ခစ် … ခစ် … မေ အားရပါးရ ရယ်လိုက်တယ် … ကြည့်ပါအုံး … သက်အောင် တယောက် … ထွန့်ထွန့်ကို လူးနေတာပဲ … စပ်ကလည်း တအားစပ် … ရုန်းတော့လည်း … မလွတ်နိုင် … ဘယ်လိုလဲ … ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီလား … မုဒိန်းကောင်ရဲ့ … ခစ် … ခစ်
“စပ်တယ် … စပ်တယ် … အား … အား …”
“ခွေးကောင် … အော်မနေနဲ့ … ရော့ … မစပ်အောင်လို့ … ဒါလေး လူးပေးမယ် … ”
“အောင်မလေး … မလုပ်နဲ့ … မလုပ်နဲ့ …”
သက်အောင် ကြောက်မယ်ဆိုလည်း ကြောက်စရာ … မေ ဘယ်ဘက်လက်က … လက်အိတ်ကို …
ကောက်စွပ်လိုက်ပြီး … လက်ထဲ ကိုင်ထားတာက … ဆား … အနာကို ဆားသိပ်တော့ … ပိုဆိုးပြီပေါ့ … “ခွေးကောင် … နင် ငါ့ကို … လုပ်တုန်းက … အရမ်းကောင်းတာပဲဆို … အခု နင့်အလှည့် …”
မေ … ဆားတွေကို … အဆုပ်လိုက် ကိုင်ပြီး … သက်အောင် ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖြူးလိုက်သည် … ပြီးတော့ … ပွတ်ပစ်လိုက်သည် … မှတ်ကရော … ခုနက … ဘရိတ်ဓါး အနာထဲ ဆားသိပ်ပေးလိုက်သည် …
“အားးးး … စပ်တယ် … စပ်တယ် … မလုပ်ပါနဲ့ … တောင်းပန်ပါတယ် … အားးးးးးး ….”
“လက်ဖြန့်စမ်း … မှတ်မိလား … ဒီလက် … ငါ့ကို … မတရားလုပ်တဲ့လက် … ကဲဟာ …”
“မလုပ်ပါနဲ့ … မလုပ်ပါနဲ့ …”
သက်အောင် … လက်သီးဆုပ်ထားဆဲ … ခေါင်းက တခါခါ … မေ့လက်ထဲမှာ … သံချောင်းနဲ့ … တူ … ကဲဟာ … ပြောနေကြာတယ် … လက်မဖြန့်လဲ … ဒီအတိုင်း ရိုကထ်ည့်ပစ်လိုက်မယ် … မေ … သံချောင်း တချောင်း … ရိုက်ထည့်ပစ်လိုက်သည် … တဒုန်းဒုန်းနဲ့ … သံချောင်းက … အဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားသည် … သက်အောင် … အော်တာပေါ့ … တအားအားနဲ့ … အော်ပလေ့စေ … အော် … သေအောင်သာအော် … အခု ငါ့အလှည့် … နင့်လက် ဒီဘက်ပြီးတော့ … ဟိုဘက် … ကဲဟာ … ဒုန်း … ကဲဟာ … ဒုန်း ….
သက်အောင် … နာလွန်းလို့ … အော်ငြီးရင်း … မေ့သွားပြန်သည် … မေ … အရမ်းဒေါသထွက်နေသည် …
မောနေသည် … တောက် … လူယုတ်မာ … ငါနဲ့ ယောင်းမကို … လုပ်တုန်းက … အားရပါးရ … စော်ကားကြတယ် … အခု နင်မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်ပေါ့ … ဒင်းမျက်နှာကို … ရေနဲ့ ထပ်ပြီး ပက်ပစ်လိုက်ပြန်သည် … မနိုး … အော် မနိုးဘူးပေါ့ … ကောင်းပြီလေ … လက်ပြီးတော့ … ခြေထောက် … ငါ့ကို လိမ့်နေအောင် … ကန်ခဲ့တဲ့ ခြေထောက် … ကဲဟယ် … ကဲဟယ် … သံချောင်းတွေ …
ထပ်ရိုက်ပစ်လိုက်သည် … မကျေနပ်ဘူး … လုံးဝ မကျေနပ်ဘူး … ယောင်းမ … နင့်အတွက် … ငါ လက်စားချေနေပြီ … ယောင်းမ … နင့်ကို … အားရအောင် … လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်ကို … ငါအခု … ဓါးနဲ့ … တထစ်ချင်း ဖြတ်ပစ်မယ် …
“ပြော … ယောင်းမ … နင် … ဘယ်နားခုတ်စေချင်သလဲ …”
မေ … ရူးသွားပြီ … မေ ရူးသွားပြီ … နာကျည်းချက်များက … အသဲခိုက်အောင် … ဖြစ်နေတော့ … မေ ရူးသွားပြီ … သက်အောင်ကို … စိတ်ရှိလက်ရှိ … လုပ်ချင်နေတယ် … နားထဲမှာ … ယောင်းမအသံကို ကြားနေတယ် … ယောင်းမက ပြောတယ် … ဒင်းရဲ့ … ဟိုဟာကို ဖြတ်ပစ်တဲ့ …
ဟုတ်တယ် … ဖြတ်ပစ်မှာပေါ့ .. မေ … သက်အောင် … ဒုတ်ကို … ကိုင်ပြီး … ဓါးနဲ့ လှီးပစ်လိုက်တယ် …. တထစ်ထစ်နဲ့ … အသားတုံးကြီးက … ပြတ်ထွက်သွားသည် … ကောင်းတယ် … မှတ်ပြီလား … မှတ်ပြီလား … နင် ငါတို့ကို … ယုတ်မာထားတဲ့ … ဟာကြီးလေ … အခု နင့်မှာ မရှိတော့ဘူး … နင့်မှာ မရှိတော့ဘူး …
သက်အောင် … ထအော်သည် … အော် … ဒင်းက … မေ့ချင်ယောင် ဆောင်နေတာပေါ့ …ေ-ာက်ကောင်
မေ … အားရပါးရပြုံးပြီး … နှာနုကို … ပိတ်ထိုးပစ်လိုက်သည် … သက်အောင် … အကျယ်ကြီး …
အော်သည် … အော်ပေါ့ … သေအောင်အော် … ဟူး … မောလိုက်တာ … ချွေးတွေလည်း … ပြန်လာပြီ …
မေ … ရေခဲရေ … နောက်တပုလင်း ထတ်ုပြီး သောက်လိုက်သည် … တီ တောင် … တီ တီ .. တီတောင် …
ဘာသံလည်း … ဖုန်း … မေ့ရဲ့ ဖုန်း … ဘယ်သဆူက်တာလဲ … နံပါတ်ကြည့်တော့ … လှမြတ် … တူမလေး ဆီက … ဟာကွာ … မေ ဖုန်းကောက်ကိုင်ပြီး …
“ပြော … ဘာပြောမလို့လဲ …”
“ဒေါ်လေး … ဒေါ်လေး … ဘယ်မှာလဲ …”
“မသိဘူး … ငါအခု … လူယုတ်မာကို … ဆုံးမနေတယ် … ”
“ပြောပြပါ … ဒေါ်လေးရယ် … ဟီး … သမီး လိုက်လာခဲ့မယ်လေ … ဟီး … ဘယ်မှာလဲ … ဒေါ်လေးရယ် … ပြောပြပါ … ဒေါ်လေးရယ် … နော် … နော်”
“ထောက်ကြန့်မှာ … ငါ့ဆီကို … မလာနဲ့ .. မလာနဲ့ …”
“ဒေါ်လေး … အရမ်းမလုပ်ပါနဲ့အုံး … သမီး … လာခဲ့မယ်နော် … ဟီး … ”
“နင် … ငါ့ကို ဆရာလာမလုပ်နဲ့ … နင် မေ့သွားပြီလား … ဒင်း ငါ့ကို … ဘယ်လို စော်ကားခဲ့သလဲ … နင့်အမေကို … ဘယ်လို စော်ကားခဲ့လဲ … ငါတကိုို့ ဘယ်လို ယုတ်မာခဲ့လဲ”
“သိပါတယ် … ဒေါ်လေးရယ် … ဒေါ်လေး … ဒေါ်လေး … စိတ်ကိုလျှော့ပါအုံး … စိတ်ကိုလျှော့နော် … ” “မလျှော့နိုင်ဘူး … မလျှော့နိုင်ဘူး … နင့်တာဝန်ကို နင်လုပ် … မနက်ဖြန်ကျရင် … ငါ့အခန်းထဲက … အံဆွဲထဲက … စာအတိုင်း ဆက်လုပ် … ငါပြောတာ ကြားလား”
“ကြားတယ် … ဒေါ်လေး … သူ့ကို … အခုခွဲစိတ်ခန်းမှာ … သွေးကြောတွေ ပြန်ဆက်ပေးနေတယ် … ”
“ငါ့ကို … ဂတိပေးစမ်း … နင် … ငါ ခိုင်းခဲ့တဲ့အတိုင်း … လုပ်ပါ့မယ်လို့ …”
“ဟုတ် … ပေးပါတယ် ဒေါ်လေးရယ် … ပေးပါတယ် … ဒေါ်လေး … ခဏနေအုံး … ဦး … ပြောမလို့ … ”
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … မပြောနဲ့ … သူနဲ့ ငါ မပြောချင်ဘူး … ” “မေ … မေ …”
မေ … သိတယ် … ဒီအသံကို … မေ ကြားတယ် …. ဒီအသံကို … မမေ့ဘူး … မောင် … သိပ်ချစ်ရတဲ့
မောင် … ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် … နေ့တိုင်း မေ့နားထဲမှာ … ကြားနေဆဲ … ဟင့်အင်း … အခုတော့ … အခုတော့ … မပြောချင်ဘူး … မပြောချင်ဘူးးးးးးးးးးး ….
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … မေဆိုတာ သေသွားပြီ … မဆက်နဲ့တော့ …” “မေ … မေ …”
မေ … ဖုန်းကို ကောက်ပေါက်ပစ်လိုက်သည် … ဟီးးးးးးးးးးးးးးးး … မောင် … နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် … မောင်ရယ် … မေသွားတော့မယ် … ယုတ်မာလွန်းတဲ့ ကံကြမ္မာကို … မေ မုန်းတယ် … မေတို့ကို … ယုတ်မာခဲ့တဲ့ … သက်အောင်တို့ကို … မေ မုန်းတယ် …
အို … မုန်းတယ် …
မုန်းတယ် … မုန်းတယ် … မုန်းတယ် … မုန်းတယ် … မုန်းတယ် … မုန်းတယ် … မုန်းတယ် …
တောက် … ဒီလောက် မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ … အမုန်းတရားတွေကို … အဆုံးသတ်မျဉ်း … ဆွဲပေးမယ်ဟေ့ …
မေ … ဓါတ်ဆီပုံးကို … သက်အောင် … ကိုယ်ပေါ်မှာ … လောင်းချလိုက်သည် … မေ့ကိုယ်မှာလည်း …
သက်အောင်ရဲ့ နောက်ဆုံး … အသံလေး … အော် … အားရအောင် အော် …. ဟား ဟား ဟား … မေ … ဆီတိုင်ကီ သုံးလုံးကို … ဖွင့်ပစ်လိုက်သည် … အခန်းထဲမှာ ဓါတဆ်ီနံ့တွေ လျှံထွက်လာသည် … လောင်မယ် …. နင့်ကိုလည်း မီးလောင်တိုက်သွင်းမယ် … ပြီးရင် … ငါလည်း သွားမယ် … နေအုံး … ရော့ … ဒါ … ငါ့ကို … ယုတ်မာခဲ့တဲ့အတွက် …
မေ … ဓါးနဲ့ … သက်အောင် … ရင်ဘတ်ကို … စိုက်ချလိုက်သည် …
ရော့ … ဒါ ငါ့ယောင်းမအတွက် … ကဲဟာ … ကဲဟာ … ကဲဟာ … ကဲဟာ … သက်အောင် … ဗိုက်ထဲက … ကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်အောင် … ထွက်ကျလာသည် … ကောင်းပြီ … အခု ငါ့အလှည့် …
မေ … မီးခြစ်လေးကို … ခြစ်လိုက်သည် …
“သွားပြီ … သမီးရေ …” “သွားပြီ … မောင်ရေ … ”
မီးခြစ်လေးက … ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို … ပစ်ကျသွားသည် … မောင်ရေ … မေ သွားပြီ … မေ … မျက်စိကို မှိတ်လိုက်သည် …